(No. 70 , November 6, 2020)
၁။ ကျောက်ဖြူ ဇိုင်ချောင်းကျေးရွာသားများကို တပ်မတော်က ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနေ
၂။ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ EAOs အဖွဲ့များအပေါ်တပ်မတော် သဘောထားကြေညာချက် တိကျရှင်းလင်းရန်လို အပ်ဟုဆို
၃။ ချီဖွေစစ်ရှောင်တချို့ နေရပ်ပြန်ရန် စီစဉ်
၄။ မဲဆွယ်ခွင့်မရသည့် မိုင်းဆတ် “UWSA” နယ်မြေ ရွေးကောက်ပွဲ ဖျက်သိမ်းပေးရန် ပါတီ ၄ ခု တောင်းဆို
၅။ တပ်မတော်၏ ကြေညာချက်ကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်မည်မဟုတ်ကြောင်း KIO ဆို
၆။ လူထု လွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်ကို ပြည်သူစစ်အဖွဲ့များ ခြိမ်းခြောက်နေဟုဆို
၇။ ဆန္ဒမဲလာထည့်သူများ ထိတ်လန့်မှုမဖြစ်အောင် မမြင်နိုင်သည့်နေရာတွင်သာ လုံခြုံရေးယူပေးမည်ဟု KNU ပြော
၈။ နမ့်ခမ်းမြို့ UP အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကို သေနတ်ပစ်ခဲ့သည့်တရားခံ လွှတ်မြောက်နေဆဲ
၉။ ဒီးမော့ဆိုမှာ ကြိုတင်မဲ အမှားအယွင်း ၆၀ ကျော်နေ
၁၀။ မွန်ပြည်နယ်က ရေလုပ်သား တစ်ထောင်နီးပါး မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်
၁၁။ ချင်းအမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် (CNLD) ပါတီက ကြိုတင်မဲလာထည့်တဲ့ ဘိုးဘွားတွေကို အတင်းမဲထည့်ခိုင်းတယ် လို့ ဖော်ပြထားထားတဲ့ သတင်းအမှား
၁၂။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် လက်တွဲသင့်ကြောင့် ကချင်လူထု၏အမြင်သဘောထား
၁၃။ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို ကရင်နီ လူမျိုးစုလူငယ်များ အင်အားပြဝန်းရံ
၁၄။ ကော့ကရိတ်တွင် ကြိုတင်မဲပေးသည့် မဲရုံအချို့ကိုသာ စောင့်ကြည့်နိုင်၊ အားနည်းချက်အချို့ရှိ
၁၅။ မီးဇာကျေးရွာရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများထောက်ပံ့မှုအချိူ့ရရှိသော်လည်း ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့် အခက် ကြုံနေရ
၁၆။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ ၂၃၆၂၀၀ ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီး စားသောက်ရေးအတွက် အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်နေရ
၁၇။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျော့ချရန် လိုအပ်
၁၈။ မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်း စစ်အင်အားအပြည့်တင်စစ်ကား အစီးရေ ၂၀ ကျော်ဖြတ်သန်း
၁၉။ ပဲခူးတိုင်းမဲစာရင်းထဲရောက်နေသည့် ရွာတစ်ရွာကို ကရင်ပြည်နယ်ထဲ ပြန်လည်ထည့်သွင်း
၂၀။ စစ်တွေ ပလ္လင်ပြင်ကျေးရွာသား ၄ ဦး ပြန်လွတ်လာ
၂၁။ ကိုဗစ်ကော်မတီ ညွှန်ကြားချက် ဖောက်ဖျက်သူကို လွိုင်ကော်တွင် အမှုဖွင့်
၂၂။ မိုင်းဆတ် “ဝ” နယ်မြေအတွင်း အစိုးရတပ် နှင့်ဆက်နွယ်သည့် USDP ပါတီ မဲပေးရန် တိုက်တွန်းနေ
၂၃။ ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာချိန် တောင်ကုတ်မှ NLD အမတ်လောင်း ၃ ဦး ပြန်မလွတ်သေး
၂၄။ မွန်ပြည်နယ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ၈ ထောင်ကျော် မဲပေးရန် လျောက်ထား
၂၅။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် အသက် ၆ဝ ကျော် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ ပယ်မဲများမည်ဟု နိုင်ငံရေးပါတီများပြော
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်း ဇိုင်ချောင်းကျေးရွာသားများကို တပ်မတော်က နိုဝင်ဘာလ၂ ရက် ညနေပိုင်း ကတည်းက နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်ထိ ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်းတွင် လူစုပြီး ၃ ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးနေ ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက် မနက်ပိုင်းက အဆိုပါ ဇိုင်ချောင်း ကျေးရွာဘက်သို့ အရပ်ဝတ်ဖြင့် လာရောက် တပ်မတော်သား ၅ ဦး အနက် ၂ ဦးမှာ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များထံ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက ကျေးရွာသားများကို ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ဆိုသည်။ ဇိုင်ချောင်း ကျေးရွာသားတဦးက “ ဖြစ်တာကတော့ ရွာအစွန်မှာဖြစ် ကြတာ။ အရပ်ဝတ်နဲ့ တပ်မတော်သား ၅ ဦး လာတဲ့အချိန် ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး လုပ်နေတဲ့ လူတွေကတားဆီးပြီးတော့ လက် ဆေးဖို့ ပြောတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့က လက်မဆေးဘူး။ သေနတ်တွေကို ထုတ်ပြတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါကို အလှမ်းမကမ်း မှာ ရှိတဲ့ AA အဖွဲ့ မြင်ပြီးတော့ သူတို့ ဖြတ်သွားတာနဲ့ အပြန်အလှန် လုံးထွေးသတ်ပုတ်ကြတယ်လို့ သိရတယ်။ တပ်မတော် သား ၃ ယောက်ကတော့ လွတ်သွားပြီး ၂ ယောက်ကို AA က ဖမ်းခေါ်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်”ဟု ဧရာဝတီ သို့ ပြော သည်။ ထိုသို့ တပ်မတော်သားနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါ ဇိုင်ချောင်း ကျေးရွာအတွင်းသို့ တပ်မတော် စစ်ကြောင်း များ ဝင်ရောက်လာပြီး ကျေးရွာသားများကို ထိန်းသိမ်းကာ ယနေ့အထိ စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ယင်းကျေးရွာ အတွင်း၌မည်သို့ ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို အဆက်အသွယ် မရှိဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာသားများက ဆိုကြသည်။
ကျောက်ဖြူ မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖိုးစံက “အဲဒီနေ့ကတည်းက ရွာသားတချို့ကတော့ ကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်နဲ့ နီးစပ်ရာ ကျေးရွာတွေကို ထွက်ပြေးနေကြတာ ရှိတယ်။ ကျန်နေခဲ့တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုးတွေ၊ ကလေး တွေ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အဆက်အသွယ် မရဘူး။ အဲဒီ ရွာဘက်ကိုလည်း တယောက်မှ မသွားရဘူး။ ဒေသခံတွေကလည်း သူတို့အတွက် တော်တော် စိုးရိမ်နေကြတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ တပ်မတော် သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းကတော့ အဆိုပါ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရန်သွား ရောက်သည့် တပ်မတော်သားများထဲမှ ၂ ဦးကို ယင်းကျေးရွာမှ AA အမာခံများက ဝိုင်းဝန်း ဖမ်းဆီးသည့်အတွက် ကျေးရွာ သားများကို စစ်ဆေးနေပြီး ဖမ်းဆီးရမိသည့် ကျေးရွာသား ၃ ဦးကိုလည်း တရားစွဲဆိုရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ကျောက်ဖြူ မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်က ဇိုင်ချောင်းကျေးရွာသား အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းသန်းအား ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား ထားကြောင်းလည်း ဆိုသည်။ ဦးဘရှိန်က “ရွာသားတွေ ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတယ် ဆိုတာကိုတော့ ပြည်သူ့ကိုယ်စား လှယ် တဦးအနေနဲ့ နယ်/ လုံ ဝန်ကြီးဆီတော့ အကြောင်းကြားထားတယ်။ ရွာသားတွေကတော့ တခြားရွာကို ရောက်နေ တယ်။ တပ်မတော်သားတွေ လည်း မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီလိုတော့ သတင်းကြားတယ်။ တိတိကျကျတော့ သတင်းမရသေးဘူး။ ဆက်သွယ်လို့လည်း မရဘူး။ ရွာသားတွေကတော့ တော်တော် ကြောက်နေကြတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/20 20/11/04/232799.html
ရွေးကောက်ပွဲ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (EAOs) များအပေါ် ထုတ်ပြန်သည့် တပ်မတော်၏ သဘောထားကြေညာချက်မှာ တိကျရှင်းလင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများက ပြန်လည်ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့သည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်၌ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့၏ အင်အား တည်ဆောက်မှုကြောင့် ပြည် သူလူထုများ မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ဖော်ပြထားမှုတွင် မည်သည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြသင့်သည်ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။ ၎င်းက “ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ တချို့ EAO တွေက ရွေးကောက်ပွဲကို အားပေးတာရှိတယ်။ တချို့ EAO တွေကတော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆန့် ကျင်တာရှိတယ်။ တချို့ကတော့ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆန့်လည်းမဆန့်ကျင်ဘူး၊ ထောက်လည်း မထောက်ခံဘူး။ တကယ် တမ်းက တိတိကျကျ ဘယ်အဖွဲ့က ဆိုတာကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ NCA ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရှိတယ်။ NCA ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့တွေကလည်း NCA ကို ချိုးဖောက်သလား၊ ဘာလား ဆိုတဲ့ သို့လော သို့လော မေးခွန်းတွေ ဖြစ်လာတာကတော့ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် EAOs အဖွဲ့အချို့၏ အင်အားတည်ဆောက်မှုကြောင့် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေသခံ ပြည်သူထု၏ အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်သော လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအချို့၏ နှောင့်ယှက် ဖိအားပေးမှုကြောင့် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အရေးပါသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တိုးတက်မှု နှောင့်နှေး စေသည့်အပြင် အချို့ဒေသများ၌ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၏ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းလည်း ၎င်းတို့ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဆက် လက်ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ (၁၆)ရက်နေ့အတွင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သည့် နယ်မြေစာရင်းများ၌ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည် နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့ အဓိကပါဝင်ပြီး လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှ တသော အခြေအနေမရှိသောကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းဆိုထားသည်။ ကေအဲန်ယူ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၂) ပဒိုစောလှထွန်းက “EAO တစ်ခုလုံးကို ပြောလာတဲ့ ကိစ္စအပေါ်မှာတော့ သူတို့ မဟုတ် မမှန်အဲ့လိုမျိုး တဖက်သတ် စွပ်စွဲထုတ်ပြန်တဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ကျနော်တို့ လူထုတွေ ကြားထဲမှာ ရှင်းလင်းအသိပေးဖို့ ပြန်ပြီးတော့ အသိပေးဖို့လိုတာပေါ့။ ဒါကလည်း နိုင်ငံရေးအရ တိုက်ခိုက်သလို လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုမှာ လူထုတွေ တဖက်သတ် အမြင်လွဲမှားအောင် လုပ်နေတဲ့ ပုံစံတွေ ဖြစ်နေတယ်”ဟု ကေအိုင်စီ သို့ပြောသည်။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80 %b1%e1%80%9b%e1% 80%bc%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%
ကချင်ပြည်နယ် ချီဖွေမြို့နယ်စစ်ရှောင်စခန်းမှ စစ်ရှောင်တချို့သည် နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် မိမိတို့ ကျေးရွာ ခြုံနွယ်များ သွားရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။ ချီဖွေမြို့အနီး ကန်ပိုင်ယန်ကျေးရွာမှ ဒေသခံစစ်ရှောင် ပြည်သူ ၄၀ ခန့်က နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ မိမိတို့ကျေးရွာကို သွားရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြသည်ဟု ချီဖွေ KBC စစ်ရှောင်စခန်း တာဝန်ခံ ဆရာယောန ထံမှ သိရသည်။
“သူတို့က အိမ်ပြန်ချင်ကြပြီ သူတို့အတွက် အိမ်တွေကိုတော့ ဘယ်သူတွေ ဆောက်ပေးမလဲမသိဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ သွား ရောက်ရှင်းလင်းထားနှင့်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။ ကန်ပိုင်ယန်ကျေးရွာက နည်းနည်းခက်တယ်။ ဒီဘက် ချီဖွေဘက်ကဆိုရင် စစ်တပ်ထိုင်ပြီး ဟိုဘက် ကန်ပိုင်ယန်ကျေးရွာဆုံးအထက်မှာ KIA တွေထိုင်တယ်။ သူတို့က ကြားညှပ်နေတဲ့ ရွာလည်းဖြစ်နေ တယ်။ သူတို့လည်း အိမ်ပြန်ချင်ပြီဘဲပြောနေကြတာ။ ခုချိန်ထိတော့ အိမ်တွေဘယ်အဖွဲ့အစည်း တာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေး သွားမယ်ဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး။”ဟု ချီဖွေ KBC စစ်ရှောင်စခန်းတာဝန်ခံ ဆရာယောန ကပြောသည်။ သွားရောက်ခဲ့ သော ဒေသခံများမှာ လက်ရှိ ချီဖွေ KBC စစ်ရှောင်စခန်း နှင့် LBC စစ်ရှောင်စခန်းတို့တွင် ခိုလှုံနေကြသည်ဟု သိရသည်။ ကန်ပိုင်ယန်ကျေးရွာဒေသခံများ နေရပ်ပြန်ရေးအတွက် အစိုးရက လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ဆောင် ပေးခြင်းမရှိကြောင်း ကချင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဖွဲ့ KHCC က ဆိုသည်။
“အစိုးရတွေ နဂိုထဲက သူတို့လုပ်ဆောင်ပေးနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ကတော့ မလုပ်ပေးတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ က ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဘယ်နေရာတွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ။သူတို့ဘက်ကတော့ အစိုးရဘက်က နဂိုထဲက သူတို့တတ်နိုင်သလောက် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ နေရာတွေရှိတယ်။”ဟု KHCC ဒု အတွင်းရေးမှူး ဆရာခါးလီ က ပြောသည်။ ကန်ပိုင်ယန်ကျေးရွာသည် ချီဖွေမြို မှ ၁ မိုင်ခန့်သာ ကွာဝေးပြီး ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တပ်မတော်နှင့် KIA တို့ တိုက်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသူများဖြစ်သည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/11/04/l2-22/
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်မြို့နယ်ရှိ UWSA ထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားသည့် နယ်မြေအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိနိုင် သဖြင့် အချိန်မှီ ပိတ်သိမ်းသင့်ကြောင်း နိုင်ငံရေး ပါတီ (၄) ပါတီ မှ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (UEC) ထံ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ “ဝ”ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းသို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မရရှိကြ ကြောင်း၊ အဆိုပါနယ်မြေသို့ ဝင်ပြီး မဲဆွယ်ရန် တောင်းဆိုစီစဉ်လာခဲ့သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ဝင်ရောက်ခွင့် မပေးကြောင်းလည်း ထိုနယ်မြေအတွင်း ဝင် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများက ပြောဆိုလိုက်သည်။ လက်ရှိ ပြည် ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး စာတင်ထားသည့် ပါတီများမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၊ ရှမ်းတိုင်ရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD)၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (SNDP)နှင့် လားဟူအမျိုး သား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (LNDP)တို့ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မိုင်းဆတ်မြို့နယ် “ ဝ”ထိန်းချုပ်သည့် နယ်မြေအတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု (၄) ခု တွင် ကျေးရွာပေါင်း (၂၁) ရွာရှိပြီး မဲဆန္ဒရှင် စုစုပေါင်း (၂၂၇၄၃) ဦးခန့် နှင့် မဲရုံပေါင်း (၁၂) ရုံ ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
“ကိုဗစ် ကာလ နဲ့ ကိုဗစ်ငြိမ်သွားပေမယ့် ခုချိန်ထိ သူတို့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲ ဝင်မယ်ဆိုရင် ကော်မရှင် လက်မှတ်တွေ ပါရင်လည်း သူတို့ ဗမာစာတွေ မသိဘူးပြောတယ်။ ဂိတ်ပေါက်ဝမှာ ၁ နာရီ ၂ နာရီလောက် စောင့်ရတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒီနေ့ ကော်မရှင်တွေ ပြောလာတာကတော့ တကယ်သွားမယ်ဆိုရင် အချိန် ၂ ရက် (၅ -၆) ရက်နေ့ သွားမယ်ဆိုရင် သူတို့ ဘက်က အပြည့်အဝ ကူညီပေးမယ်လို့ပြေတယ်။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့တော့ မသွားတော့ဘူး”SNLD ကိုယ်စားပြု မိုင်းဆတ်မြို့ နယ် ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဦးအိုက်စိုင်း (ခ) စိုင်းဝဏ္ဏ က ပြောသည်။ “နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ စည်းရုံးရေးသွားဖို့အတွက် ဝင်ခွင့်မပြုလို့ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုထားပေမယ့်လည်း သူတို့ဝင်ဖို့ အတွက် ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ပါ။ ကျမတို့သွားကတည်းက ခွင့်ပြုစာဆိုရင် ဗမာစာ ဆိုရင် ခွင့်မပြုဘူး။ သူတို့ “ဝ” အကြီးအကဲ တွေဆီက သက်ဆိုင်ရာက တရုတ်စာရေးထားတဲ့ ခွင့်ပြုမိန့်ရှိမှ သွားခွင့်ပြုမယ်ပေါ့။” ဟု ဒေါ်အေးသီတာမြင့် ကပြောသည်။
မိုင်းဆတ်မြို့နယ်တွင် အစိုးရတပ်မတော်၊ ဝ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၊ လားဟူနယ်ခြားစောင့်တပ် နှင့် RCSS/SSA တပ်ဖွဲ့တို့ လှုပ်ရှားသည့် နေရာဖြစ်သည်။ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်အတွင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိင်မည့် ပါတီများမှာ “ဝ” အမျိုးသားပါတီ၊ ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးပါတီ၊ လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသာများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့်ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://b urmese.shannews.org/archives/19208
ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များအပေါ် တပ်မတော်၏ သဘောထားကြေညာချက်ကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုမျိုး ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO က ပြောသည်။ တိုင်းရင်းသားတော်လှန် ရေးအဖွဲ့တချို့က အင်အားတည်ဆောက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုနှောင့်နှေးစေသည့် အပြုအမူများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှောင့်နှေးမှုအပြင် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပင် လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒ မဲ ပေးခွင့်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးက နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ထားသည်။
“သူတို့ရေးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြောင့် လွတ်လပ်စွာဆန္ဒမဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုထားတယ်။ KIO အနေဖြင့် သူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်နောက်ယှက်ခြင်း မလုပ်သလို ထောက်ခံခြင်းမျိုး လည်း လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောထားပြီးဖြစ်တယ်။”ဟု KIO ဗဟိုဌာနချုပ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူ ကပြော သည်။ ထို့ကြောင့် ယခု အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သောနေရာများတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို အမြန်ကျင်းပ နိုင်ရန်မျှော်လင့်ပြီး တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကလည်း မိမိနှင့်မသက်ဆိုင်သောနေရာတွင် ရောက်ရှိနေပါက အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဆုတ်ခွာရန်လိုအပ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဖော်ပြထားသည်။
“ကျွန်တော်တို့က အစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုး အဓိကလုပ်ဆောင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဓိက ငြိမ်းချမ်းရေး သော့ချက်ကို ကိုင်နေတာက တပ်မတော်ဖြစ်နေတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့ပြောနေတဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာက တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင် များအားလုံးကို လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးကို ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ တရားဝင်သူတို့ ဒီလိုပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့ KIO သာမက ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံး လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်လို့ဘယ်သူမှ မယုံကြည် ဘူး၊ လက်မခံဘူး။ ဒါကြောင့် တော်လှန်ရေးဆိုတာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအားလုံး ရသင့် ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမျိုးဆို ပြည်တွင်းစစ်ကို ချူပ်ငြိမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။”ဟု ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူက ပြောသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/11/04/l2-21/
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကွတ်ခိုင်နှင့် မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့များသည် မဲဆန္ဒနယ်အချို့ရှိ ဒေသခံများ၏ လွတ်လပ်စွာမဲပေးခွင့်ကို ခြိမ်းခြောက်မှုများရှိနေကြောင်း ဒေသခံများက ဧရာဝတီသို့ ပြောကြသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းအချို့နှင့် အမည်မဖော်လိုသော ဒေသခံများ၏ အဆိုအရ တာမိုးညဲ ပြည်သူ့ စစ်၊ ပန်းဆေး၊ မန်ပန်၊ ကောင်းခါး၊ မုံးစီးနဲ့ မုံးဟွမ်ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့များသည် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုသာ မဲထည့်ရန် ဒေသခံများကို ဖိအား ပေးနေကြကြောင်း သိရသည်။ ဖိအားပေးခံရသည့် မြို့နယ်များမှာ မန်တပ်ကျေးရွာ ဒွန်ပုံ၊ ဘန်ချန်၊ မတ်ဝမ်၊ နောင်မို၊ တာဟဲ၊ အောက်လောက်၊ နောင်ဖြူးနှင့် နောင်ကျန့်ကျေးရွာများမှ ဒေသခံများဖြစ်ကြသည်ဟု သိရသည်။
ဒေသခံများက ၎င်းတို့၏ အသက်၊ လုံခြုံရေးကြောင့် ရွာအမည်နှင့် ၎င်းတို့၏ နာမည်များကို ဖြေဆိုရန် ငြင်းဆန်ကြသည်။ ဒေသခံများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့၏ စွပ်စွဲချက်များအပေါ် မေးမြန်းရန် ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့များသို့ ဆက်သွယ် သော်လည်း မရရှိခဲ့ပါ။ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသား ပါတီမှ မိုင်းကြာထွန်း က “အဲဒီလို ဖိအားပေးပြောဆိုနေတာကို မကြောက်ဖို့၊ ကိုယ့်ဆန္ဒအတိုင်း သတ္တိရှိရှိ မဲပေးဖို့တော့ ရွာသားတွေကို ပြောထားတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက ဒီလိုဖိအားပေးလို့ မရဘူးဆိုတာကိုလည်း ပြောပြထားတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောပြသည်။ မိုင်းကြာထွန်း သည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ် ၁ ခုတွင် မုံးစီးပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့၏ တားမြစ် ခံခဲ့ရကြောင်း၊ ၎င်း၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အချို့တွင် USDP အောင်နိုင်ရေးအလံများကို ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ရုံးခွဲ များတွင်လွှင့်ထူ ထားပြီး ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက USDP ပါတီအတွက် မဲဆွယ်ပေးနေသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောပြသည်။
ပြည်သူ့စစ်နယ်မြေများအတွင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာပြည်သူ့စစ်ကို အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီး နောက် မဲဆွယ် စည်းရုံးခွင့်ပြုထားသည်ဟု ပြောဆိုကြသော်လည်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားပါတီ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများသာ သွားရောက် စည်းရုံးနိုင်ကြကြောင်း၊ အချို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို မဲဆွယ်ခွင့်မရရန် ကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်မှုရှိနေကြောင်း သိရ သည်။ ပြည်သူ့စစ်နယ်မြေအတွင်းသို့ ပါတီအနေနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး မသွားသည့်အတွက် ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ ခေါင်း ဆောင်များကို ပါတီစည်းရုံးရေး အကူအညီတောင်းခံခြင်း မရှိကြောင်း၊ ပြည်သူ့စစ်အပြင် အစိုးရ တပ်မတော်နှင့် မည်သည့် လက်နက်ကိုင်နှင့်မျှ ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်း ၎င်း က တုံ့ပြန်ပြောဆိုသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ထောင်ဂဏန်းရှိသည့် ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ပေါင်း ၃၀ ကျော်ရှိပြီး အများစုမှာ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်နှင့် မူဆယ်မြို့နယ်တွေမှာ အခြေ ချတည်ရှိနေကြသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/202 0/11/05/232862.html
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ထဲရှိ အစိုးရနှင့် KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတို့ နှစ်ဖက်အုပ်ချုပ်နယ်မြေ များတွင် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လာရောက်မဲထည့်ကြမည့် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများ အထိတ်တလန့် မဖြစ် အောင် လူထုမမြင်နိုင်သည့်နေရာတွင်သာ လုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်ပေးသွားမည်ဟု KNUက ပြောသည်။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ရသည့် နှစ်ဖက်အုပ်ချုပ်နယ်မြေနှင့် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိ ကျေးရွာများတွင် မဲရုံလုံခြုံရေးအပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျေးရွာလုံခြုံရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအထူးရဲ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့များ က သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေအလိုက် လုံခြုံရေးယူထားပေးသည်ဟု ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
KNU ဝင်းရေးမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုစောမောင်ရွှေက “ဖားပြရွာဘက်မှာတော့ ကျနော်တို့ လုံခြုံရေးယူပေးမယ်လို့ ပြောထား တယ်။ အောက်ရွာတွေဘက်မှာ ရဲတွေ လုံခြုံရေးတွေ ရှိပြီးသားပါ။ တပ်မတော်ဘက်က လုံခြုံရေးယူမယ့်အပိုင်းမှာ သူတို့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြတော့ အကုန်နားမလည်ဘူး။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ အနှောင့်အယှက်အဟန့်အတား ဘာမှမဖြစ် ဘူး။ သွားဖို့ လာဖို့ကြတော့ သူတို့လာညှိနှိုင်းပြောပြထားတယ်။ လူထုတွေထိတ်လန့်မှုမဖြစ်အောင် ကျနော်တို့က ပုံမှန်ရှိနေ တဲ့ အခြေအနေ မှာပဲရှိမှာပါ”ဟု (နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်) ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။“ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ မဲရုံဝန်ထမ်း၊ လုံခြုံ ရေး အထူးရဲတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ တပ်တွေက လာပြီးစောင့်ဖို့ မလိုဘူးထင်တယ်။ ရွာထိပ်တွေမှာ စောင့်နေရင်တောင် လူထုတွေသတင်းကြားသွားတာနဲ့ အနည်းနဲ့အများတော့ ထိပ်လန့်မှုတွေ ရှိနေမှာပဲ။ ဒေသခံတွေက နဂိုကတည်းက အကြောက်တရားက ရှိကြတယ်။ မဲမသမာမှုတွေ လုံခြုံရေးအပိုင်းတွေမှာ သူတို့အမြင်နဲ့ရှိရင် ရှိမှာပေါ့လေ”ဟု တောင်ဒီးရွာ သား စောမြတ်သူက ကေအိုင်စီ သို့ပြောသည်။
ထိုဒေသရှိ တပ်မတော်အနေဖြင့်လည်း မဲပေးသည့်ကာလအတွင်း မဲရုံအနီးတွင် ရှိနေမည်မဟုတ်ဘဲ မဲရုံပြင်ပများတွင်သာ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟု တပ်မတော်ဘက်မှ နီးစပ်သူနှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြိုနယ် ဝင်းရော်ဒေသရှိ ကျေးရွာများနှင့် နှစ်ဖက်ရောနှောအုပ်ချုပ်သည့်ကျေးရွာများတွင် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့က အသက် ၆ဝ အထက် ဒေသခံအများစု ကြိုတင်မဲထည့်ခဲ့ကြပြီး မဲထည့်နည်း အတွေ့အကြုံ အားနည်းသည့် အတွက် ပယ်မယ်များမည်ဟု နိုင်ငံရေးပါတီများက သုံးသပ်ပြောမှုများရှိသည်။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%8 0%86%e1% 82%8f%e1%81%b5%e1%80%99%e1%80%b2%e1%80
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့ နောင်စန့်ရပ်နေ လူမှုညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ (UP) အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးစိုင်းအောင်ဝင်း နှင့် ၎င်း၏သား တို့ သေနတ်ပစ်ခံရပြီး ယခုချိန်အထိ တရားခံ လွှတ်မြောက်နေဆဲဟု စုံစမ်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် ည ၆နာရီ ဝန်းကျင်တွင် အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် တစ်ဦးက ဆိုင်ကယ်မောင်းလာပြီး ဆရာ စိုင်းအောင်ဝင်း တို့၏ နေအိမ်ရှေ့တွင် တည့်တည့်တွင် သေနတ်ပစ်ရာ စိုင်းအောင်းဝင်း သေနတ်ဒဏ်ရာ ၂ ချက် ရရှိခဲ့ပြီး ၎င်း၏သားလည်း လက်မောင်းနား ကျည်ဆံရှပ်ထိသွားကြောင်း သိရသည်။“၂ ချက်ထိတယ်။ နောက်ကျောနားနဲ့ တင်ပါး ဆုံရိုးနား ထိတယ်။ တလုံးကတော့ အူမကြီးကို သွားထိတယ်။ သူသားကတော့ လက်မောင်းနား ရှပ်ပြီး ထိသွားတယ်။ သိပ်တော့ မစိုးရိမ်ရဘူး။ ဘယ်အဖွဲ့လာပစ်တယ်ဆိုတာ မသိရသေးဘူး” UP အဖွဲ့အတွင်းရေမှူး လုံးစိုင်းမောက်ဆိုင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ မည်သည့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့က လာရောက်ပစ်ခတ်သည်ကို မသိရရှိ သေးကြောင်း၊ တရားခံလည်း မမိသေးကြောင်း လုံးစိုင်းမောက်ဆိုင် က ပြောသည်။
ပစ်ခတ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လုံးစိုင်းမောက်ဆိုင် က “ကျနော်တို့ တရားစွဲထားတော့ မရှိသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာ တော့ ရဲတွေကတော့ စိုင်းအောင်ဝင်းအိမ် ကို လာပြီးစစ်ဆေးသွားတယ်။ အချက်အလက်တွေကို လာကောက်သွားတယ်” ဟူ လုံးစိုင်းမောက်ဆိုင် ကပြောသည်။ လက်ရှိ ဦးစိုင်းအောင်ဝင်းသည် နမ့်ခမ်းဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံယူနေကြောင်း သိရ သည်။ ၂၀၁၅ ကလည်း ဦးစိုင်းအောင်ဝင်း ၏နေအိမ်တွင် လက်ပစ်ဗုံး ပစ်ခတ်ခံရဖူးပြီး ထိုစဉ်တွင် ဗုံးစ အနည်းငယ်ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“လူတွေ သွားလာလှုပ်ရှားနေချိန်၊ လူမြင်ကွင်းမှာ ပစ်သွားတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် နမ့်ခမ်း က တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိတော့ဘူးဆိုတာပြတာပဲ။ နောက်ပြီး အိမ်ရှေ့ တည့်တည့်လာပစ်တဲ့ CCTV ကလည်းရှိ တယ်။ ရဲတွေက အခုထိမဖမ်းမိဘူးဆိုတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ”ဟု နမ့်ခမ်းဒေသခံ စိုင်းအိုက် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြော သည်။
နမ့်ခမ်းမြို့နယ်တွင် အစိုးရတပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ၊ ပြည်သူ့စစ်များလှုပ်ရှားသည့်နေရာ တခုဖြစ် ပြီး၊ မကြာခဏ ပစ်ခတ်မှုများရှိသည့်နေရာတခုဖြစ်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/19226
ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် အိုကေကျေးရွာအုပ်စုမှာ ကြိုတင်မဲပေးဖို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွေ ဖြန့်ဝေမှု မှားယွင်းနေတာ ကြောင့် မဲဆန္ဒရှင် အယောက် ၆၀ ကျော် ကြိုတင်မဲလက်မှတ်တွေ မှားယွင်းပြီးပေးမိခဲ့ကြပါတယ်။
ကြိုတင်မဲစတင်ပေးလို့ရတဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာပဲ ကြိုတင်မဲထည့်ကြတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် ၁၃၀ ဦးရှိတဲ့အထဲမှာမှ ၆၆ ဦးက မဲဆန္ဒလက်မှတ် မှားယွင်းပေးခဲ့မိကြတာဖြစ်တယ်လို့ အိုကေကျေးရွာအုပ်စု ရပ်ကျေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းဝင်းက ပြော ပါတယ်။“ပေးပြီးသားလူက ၁၃၀ ရှိတယ်။ အမှန်တကယ် မှန်တဲ့စာရင်းထဲဝင်သွားတာက အမျိုးသား ၆ နေရာမှာက ၅၀ ပါ တယ်။ နောက်တခါဆန္ဒမပြုရသေးတဲ့ဟာက မဲလက်မှတ်ဖြတ်ပြီး ဆန္ဒမပြုရသေးတဲ့ဟာက ၁၄ ယောက်ရှိတယ်။ အားလုံးခြုံ ကြည့်လိုက်ရင် အမှားစာရင်း ၆၆ ယောက်ရှိတယ်”ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် အိုကေကျေးရွာအုပ်စုက အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲ ဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)ရဲ့ မဲဆန္ဒဖြစ်ရမည့်အစား အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)ရဲ့ မဲဆန္ဒလက်မှတ် ကို ဖြန့်ဝေမှားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို မှားယွင်းတာတွေက ကော်မရှင်တွေ သေချာစီစစ်တာမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့ ၎င်းမဲ ဆန္ဒနယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)မှာ ဝင်ပြိုင်တဲ့ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ဦးမောတယ်ခဲက ပြောပါ တယ်။“သေချာစီစစ်ပြီးလက်ခံတာမျိုးမလုပ်ဘူး။ နောက်တခုက ဒီမဲရုံမှူးလက်မှတ်လည်း ထပ်ထိုးရတာဖြစ်တယ်။ ဒီနောက် ကျောမှာ မဲရုံမှူးလက်မှတ်လည်း ထပ်ထိုးရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ မဲရုံမှူးကိုယ်၌ကလည်း နောက် ကျောမှာ လက်မှတ်ထိုးတဲ့ အပေါ်မှာ သေချာစီစစ်ပြီးထိုးတာ မဟုတ်ဘူးလို့ သုံးသပ်ရတယ်။ ဘာကြောင့် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)နဲ့ အမှတ်(၇)ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ စာလုံးကြီးလွှဲနေသလို နောက်တခုက မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇)က ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အနေနဲ့ဆို ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားပါတီက ဝင်ပြိုင်တဲ့ပါတီက ကယန်းအမျိုးသားပါတီက ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ဒီ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာက ကျနော်တို့ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကဖြစ်တဲ့ ကျနော် မောတယ်ခဲက ယှဉ်ပြိုင်တာဖြစ်တယ်။ ပါတီလိုဂိုကလည်း မတူဘူး ဆိုတော့ အဲဒီမှာက ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ မဲရုံမှူးက စီစစ်ပြီးလုပ်ရင် မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူး ဆိုတာ ပြောလိုတယ်။”
အခုမှားယွင်းသွားတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၆) နဲ့ အမှတ် (၇) က ပြည်နယ်အခြေစိုက်ပါတီတွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ ကယန်းအမျိုးသားပါတီတို့ မဟာမိတ်လုပ်ထားတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် အမျိုးသားလွတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆)မှာ မဲဆန္ဒရှင် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅ အုပ်စုရှိပြီး ကျေးရွာပေါင်း ၈၅ ရွာရှိပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာ ဝင်ပြိုင်ကြတဲ့ပါတီတွေကတော့ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ၊ ကယန်း အမျိုးသားပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအင်အားစု၊ ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီတို့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေက ဝင်ပြိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/demoso-kayah-advance-voting-mistake-11042020005724.html
မွန်ပြည်နယ်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ အလှပ်ကျေးရွာမှာ ရေလုပ်သား ၁၀၀၀ နီးပါးဟာ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြိုတင် မဲကို နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နဲ့ ၇ ရက်နေ့မှာထည့်ဖို့ ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် မဲထည့်ခွင့်ဆုံးရှုံးရမယ့် အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါ တယ်။ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် အလှပ်ကျေးရွာနဲ့ ဝဲပတန်ကျေးရွာတွေက ရေလုပ်သားတစ်ထောင်နီးပါးဟာ မြိုနယ်ကော် မရှင်ရဲ့ ကြိုတင်မဲပေးရက် သတ်မှတ်ချက်ကြောင့် မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးရမယ့် အခြေအနေရှိတယ်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေနဲ့ ရေလုပ်သားတွေက ပြောပါတယ်။
ကြိုတင်မဲကို နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်နဲ့ ၇ ရက်နေ့မှသာ ပေးခွင့်ရှိပြီး ကြားထဲမှာပေးခွင့်မရှိဘူးလို့ ရပ်ကျေးကော်မရှင်က ပြောဆို တာကြောင့် ရေလုပ်သား တစ်ထောင်ကျော် မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးရမယ့် အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ ပေါင်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းမင်းအောင်က ပြောပါတယ်။“၆ ရက်၊ ၇ ရက်မှ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရမယ့်ဆိုရင် ရေလုပ်သား ၉၀၀ လောက် မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးသွားမယ်၊ တကယ်လို့ ၄၊ ၅ မှာ ကြိုတင်မဲ ပေးခွင့်ရရင်တော့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက် မဲပေးခွင့်ရမယ်”ပေါင်မြို့နယ် အလှပ်နဲ့ ဝဲပတန်ကျေးရွာဟာ ရေလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး လှေအစီးရေ ၁၈၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ မိသားစု စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေတာကြောင့် ယောက်ကျားဖြစ်သူနဲ့ သားဖြစ်သူက ကြိုတင်မဲ ထည့်ခွင့်မရပဲ ပင်လယ်ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရတယ်လို့ အလှပ်ကျေးရွာနေ ရေလုပ်သားမိသားစုဝင်တစ်ဦး မမိချိုက ပြော ပါတယ်။ မဲတပြားက အရေးကြီးနေတာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ မရှင်းပြလည်း သိနေပေမယ့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး အခက် အခဲရှိတာကြောင့် အဲဒီကိစ္စကို ဦးစားပေးဖြေရှင်းနေရတယ်လို့ ရေးလုပ်သား မိသားစုဝင်တွေက ပြောပြကြပါတယ်။
ရေလုပ်သားတွေ မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးသွားမှာကို ရေလုပ်ငန်းရှင်တွေက စိုးရိမ်ကြတဲ့အတွက် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နဲ့ ၅ ရက်မှာ ကြိုတင်မဲထည့်ခွင့်ပြုဖို့ မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နဲ့ ရပ်ကျေးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က မေတ္တာရပ်ခံစာ တင်ပြထားတယ်လို့ ဝဲပတန် ကျေးရွာ ရေလုပ်ငန်းရှင် ဦးမိုးလွင်က ပြောပါတယ်။ ပေါင်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သီရိဖြိုး ကတော့ အသက် ၆၀ နဲ့အထက် မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုသာ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်ကနေ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့အထိက ကြိုတင် မဲပေးရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ရေလုပ်သားတွေ မေတ္တာရပ်ခံစာ တင်ပြထားတဲ့အပေါ်မှာ UEC ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/fishermen-in-mon-state-advance-voting-11042020035018.html
ဒီအကြောင်းရာကို Chinland NLD Group ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က တင်ထား တာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့စ်မှာရေးထားတာက ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မတူပီမြို့ပေါ် စံဘောင်ရပ်ကွက်မှာ ကြိုတင်မဲလာထည့် ကြတဲ့ အသက် ၆၀ နဲ့အထက် အဘိုးအဘွားတွေကို ချင်းအမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် (CNLD) ပါတီဝင်တွေက ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် အမဲရိုးလုစားတဲ့ခွေးတွေလို အတင်းခေါ်သွားပြီး ဘာမှမတော်စပ်ပေမဲ့ အတင်းမဲသွားထည့် ပေးနေကြတယ် CNLD တွေ ခိုးနည်း/လိမ်နည်းအကုန်တတ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး ဒီသတင်းအမှားဟာ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ ပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မတူပီမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးနိုင်းအွမ်ကို ထပ်မံမေးမြန်းရာမှာတော့ အဲလိုမျိူး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် အတင်းမဲထည့်ခိုင်းတာမျိူး မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။“လူငယ်တွေကလည်း သက်ကြီးဘိုးဘွား တွေကို ကူညီပေးနေတော့ နည်းနည်း ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ချင်တဲ့သဘော ဖြစ်လာတော့ ပါတီအဖွဲ့တွေကိုရော၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့တွေကိုရော ခေါ်ပြီးတော့ ပြောထားတယ်။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်အနေထားမှာတော့ မရှိပါဘူး။ မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုလည်း ကျနော်ပြောထားတာက ကိုဗစ်ကြောင့် အသက် (၆၀) နဲ့အထက်က ကြိုတင်မဲပေးဖို့စီစဉ်ပေမယ့် မဲဆန္ဒရှင်ရဲ့ သဘောပါပဲ…. မဲပေးမယ့်နေ့ကျမှ မဲထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်….လို့ပြောထားပါတယ်။ လူငယ်တွေကူညီပေးတာက မသွား နိုင်တဲ့သက်ကြီးတဲ့သူတွေကို တွဲကူပေးတာတွေရှိတယ်… မဲဆန္ဒရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲ့နေ့တစ်ရက်ထည်းမှာပဲ မဲထည့် ရမယ်လို့ထင်နေကြတယ် ကျနော်တို့က (၅) ရက်နေ့ထိ မဲပေးလို့ရတယ် အေးအေးဆေးဆေး မဲပေးလို့ရတယ်လို့ပြောထားပါ တယ်။ တချိူ့လူတွေက ကိုယ်လိုရာဆွဲပြီးတင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် အဲ့လောက် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်အနေထားမှာ မရှိပါဘူး ပါတီဖွဲ့အားလုံးနဲ့သွားပါတယ်။ ရှင်းပါတယ်။ အဲ့ဒါမျိုးမရှိပါဘူး….. သူအနေနဲ့ပဲ ပို့စ်တင်တာလာတော့မသိပါဘူး အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်တာလည်းမရှိပါဘူး… တခြားပါတီတွေကိုလည်း မေးလို့ရပါတယ်” လို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
“ဘိုးဘွားတွေကို အတင်းခေါ်ပြီးမဲထည့်ခိုင်းတာတော့မလုပ်ပါဘူးခင်ဗျ၊ အသက် (၆၀) ပြည့်ရင် ကြိုတင်မဲထည့်ရမယ်ဆို တာကိုပဲ တစ်အိမ်တက်ဆင်း သတိပေးတာပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုရွေးကောက်ပွဲကာလဆိုတော့ မတူပီမှာချင်းပါတီက အရမ်း အားကောင်းနေတော့ သတင်းမဟုတ်မမှန်တွေ အမြဲဝါဒဖြန့်တာတွေရှိတယ်။ မြေပြင်အနေထားအရ မတူပီရဲ့ CNLD အရမ်း အားကောင်းတော့ သူတို့သံသယဖြစ်အောင် သတင်းယူမှားနိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို အမြဲတမ်းရေးနေကြတယ်၊ ဒါက ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရသိရရင်တော့ ဥပဒေအရ ဖြေရှင်းချင်ပါတယ်။ Facebook အကောင့်အတုတွေကလည်း အများကြီးထွက်လာတယ်ဆို တော့ ဘာမှဖြေရှင်းလို့မရဘူးလေ” လို့ ဦးအောင်လျန်းကပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှ သတင်းတုသတင်း အမှားတွေများလာတဲ့အတွက်အကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနက သတင်းတွေကိုသာ ဖတ်ရှုကြပါ။ https://ww w.bnionline.net/mm/news-76732
ဒေါက်တာ ခလန်တူးခေါင် (နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ)
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုပြီး ညွန်းဆိုနေတာတွေရှိတယ်။ တကယ့်တကယ်ငြိမ်းချမ်ရေးက အပစ်ရပ် ဆဲရေးတစ်ခုထဲ မဟုတ်ဘူး။ အပစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေးက ယာယီ Ceasefire သာဖြစ်တယ်။ Peace အဆင့်ရောက်ဖို့ ဆက်သွား ရမယ်၊ Peace အဆင့်ရောက်ဖို့က တကယ့်တကယ် အပြောင်းအလဲလုပ်ရမယ်။ နိုင်ငံရေးအပြောင်အလဲ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဗဟိုချူပ်ကိုင်မှုစနစ်တွေအားလုံး လျော့ချဖို့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ လိုအပ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအားကောင်းရင် ဗဟိုအစိုးရကိုဝိုင်းပြီးတွန်းလို့ရတယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီမိုကရေစီတောင်မှ ကမ္ဘောဒီးယား ကပုံစံလိုမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်မျိုး ပြန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ပြည်နယ်အခြေပြုပါတီ တိုင်းရင်းသားပါတီအားကောင်းပြီး ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရမဖြစ်ရင်တောင် အစိုးရဖွဲ့ချင်တဲ့ ပြည်မပါတီတွေက လာပြီးတော့ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကို တွန်းပို့ရမယ်။ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အားလုံးပြော နေတဲ့ ဖယ်ဒရယ် Principal အရ တူနေရင် လက်တွဲခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီကို တကယ်တန်းဖိုးထားရင် ဒီမိုကရေစီ ကိုသဘောကျတဲ့ပါတီအားလုံးကို လက်တွဲခေါ်ရမယ်။
သိက္ခာတော်ရ ဆရာဆမ်ဆွန် (KBC ဥက္ကဌ )
ဒီနေ့ NLD ကလည်းတစ်ဖက်မှာ ဗဟိုချူပ်ကိုင်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုနေတယ်လို့မြင်တယ်။ တကယ်တန်းဆို တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်တွေမှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လက်တွဲရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားပါတီ တွေ အားလုံးက ၂၀၂၀ မှာကျတော့ ၂၀၁၅ ကို အတွေ့အကြုံယူပြီးတော့ ကိုယ့်ပြည်နယ် ကိုယ့်ဒေသတွေမှာ နိုင်အောင်ယှဉ်ပြိုင် မယ်ဆိုပြီးလုပ်လာကြတာတွေ့ရတယ်။ တကယ်တန်း NLD အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို လက်တွဲခဲ့ရင် သူ့အနေနဲ့ အောင်ပွဲတွေအများကြီးရနိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒီလိုမလုပ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်နယ်တွေမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအား ကောင်းနေတယ်လို့ မြင်ရတယ်။ USDP အနေနဲ့က သူကိုယ်တိုင် စစ်တပ်မှထွက်ပြီး ဗိုလ်ချူပ်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် သူကိုယ်တိုင်ပြင်မယ်ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ NLD နဲ့လက်တွဲဖို့လိုတယ်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ပန်တိုင်ချင်းတူတယ်။ ဆိုတော့ NLD က တိုင်းရင်းသားပါတီအားလုံးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စည်းရုံးပြီး ဒါတွေကိုလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း NLD နှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီအားလုံးက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မကြိုက်ကြတာတော့ ဟုတ်တယ်။ ဒါကို သူတစ်ယောက်ထဲ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့မြင်နေရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်လိုပဲဆိုဆို စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဦးစွာအရင်ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်တယ်။
NLD ကိုမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကြိုက်တယ်။ ကျနော်သာ အောက်ပိုင်း ရန်ကုန်တွေမှာ အိမ်ထောင်စုရှိရင် NLD ကိုပဲ မဲ ပေး မှာဖြစ်တယ်။ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာနိုင်အောင် လုပ်ဖို့ထောက်ခံအားပေးရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တော့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားဘက်ကို ကြည့်ရမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေနှင့် မဟာမိတ် လုပ်ပြီး တိုင်းရင်းသားဒေသ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုနိုင်အောင်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြုပါတီတွေကို နေရာထားပေးတယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေနိုင်လိမ့်မယ်။ NLD က မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီဆိုရင် ဘယ်လိုမဆိုအား ကောင်းလာ မယ်။ အားကောင်းလာပြီဆိုရင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားပြု ကချင်ဆိုရင် ကချင်တွေရဲ့ကိုယ်စားပြုတဲ့သူတွေ လွတ်တော်ထဲ ရောက်လာရင် ဖယ်ဒရယ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ဖြုတ်ဖို့ အားလုံးပိုပြီးအားကောင်းလာမယ်။ NLD တစ်ပါတီထဲနိုင်ပြီး စစ်တပ်ကို ဘယ်လိုမှ မနိုင်ဘူး။ စစ်တပ်က သူ့အပ်ါမှာရှိနေတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ရင် တော့ ဒါတွေကို တွန်းလှန်နိုင်မယ်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/11/05/l1-21/
ကယားပြည်နယ် အခြေစိုက်ပါတီတစ်ခုဖြစ်သော ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ( KySDP ) ကို ကရင်နီလူမျိုးစု တိုင်းရင်းသား လူငယ်အင်အား ၁၆၀ ကျော်က လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ လွိုင်လင်လေးမြို့တွင် နိုင်ဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က အင်အားပြ ဝန်းရံလှည့်လည်ခဲ့ကြသည်။
ဝန်းရံလှည့်လည် စည်းရုံးပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကရင်နီလူမျိုးစု တိုင်းရင်းသား လူငယ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ကယားလီဖု လူငယ်အဖွဲ့၏ ကိုယ်စားလှယ် ခူးပေါလူက “ဒီ တိုင်းရင်းသား ပါတီကို ဘာကြောင့် ဝန်းရံလဲဆိုတော့ ဒီတိုင်းရင်းသားပါတီက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား၊ ကျွန်တော်တို့ ရပ်ရွာရဲ့အရေးကို ပိုသိတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ ဝန်းရံရခြင်း ဖြစ်တာ ပေါ့နော်”ဟု ပြောသည်။ ယခုကဲ့သို့ ကရင်နီလူမျိုးစု တိုင်းရင်းသား လူငယ်များအနေဖြင့် ဒေသအခြေစိုက်ပါတီကို ဝန်းရံ ခြင်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူငယ်ထုများ၏ တွေ့ဆုံနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲမှ ထုတ်ပြန်လိုက် သော သဘောထားအတိုင်း လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒေသအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို တခြား နိုင်ငံရေးပါတီတချို့က နိုင်ငံရေးအရ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်များလည်း ကြုံနေရကြောင်း ကယန်းလူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ခွန်းမျိုးလှိုင်ဝင်း က ပြောသည်။
ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ကယန်းအမျိုးသားပါတီနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားပြီး ပြည်နယ်တွင်း မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၃၄ နေရာရှိသည့်အနက် ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက နေရာ ၃၀ နှင့် ကယန်းအမျိုးသားပါတီက လေးနေရာ တို့ တွင် အသီးသီး ဝင်ရောက်အရွေးခံကြမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဒေသအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို ဝန်းရံနေသည့် ကရင်နီလူမျိုးစု လူငယ်များမှာ ကယား၊ ကယန်း၊ ကယော၊ ကော်ယော် (မနုမနော)၊ ယင်းတလဲနှင့် ကရင်လူငယ်များ ပါဝင် သည်။ ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကယားပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၂ ပါတီ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေ ပြီး ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ နောက်ဆုံးစာရင်းအရ မဲပေးခွင့်ရှိသူ ဦးရေ ၂၀၇၀၀၀ ကျော် ရှိသည်။ http://www .mizzimaburmese.com/articl e/75205
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်မဲအဖြစ် အသက် ၆၀နှင့်အထက် မဲဆန္ဒရှင်များကို စက်တင်ဘာလ ၂၉ရက် နေ့မှစ၍ တစ်ပတ်ကြာအတွင်း ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် မဲရုံအချို့ကိုသာ စောင့်ကြည့်နိုင်သည့်ကြားက အားနည်း ချက်အချို့ရှိနေ သည်ဟု အရပ်ဖက်အဖွဲ့များ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။
ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်(၅)မဲရုံနှင့် ရန်ကုတ်ကျေးရွာရှိ မဲရုံတစ်ရုံကို ကြိုတင်မဲပေးနေမှုကို စောင့်ကြည့်နေသည့် People’s Alliance for Credible Election(PACE) အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်က ကျေးရွာမဲရုံတွင် အားနည်းချက် မရှိသော်လည်း မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်မဲရုံတွင် မဲပြားအနည်းငယ် စည်းတံဆိပ်မပါခြင်းနှင့် သက်ကြီးမဲဆန္ဒရှင်အချို့ မဲပေးမှုကို နားမလည်သည် များရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်ဟု ပြောသည်။ PACE အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ် ကိုစိုးသိန်းက “ကျနော်စောင့်ကြည့်တဲ့ ရပ်ကွက်မှာတော့ ရပ်ကျေးကော်မရှင် ဥက္ကဌက ရုတ်တရက် လေထိထားပြီးတော့ ကြိုတင်မဲလက်မှတ်မှာ စည်းတံဆိပ်ရိုက် တာ သိပ်အာရုံစိုက်လို့ မရတာ၊ အပင် ပမ်းခံလို့ မရတာတွေ ရှိတယ်။ တစ်ညလုံး မဲလက်မှတ်တွေ ထိုင်လုပ်တာ ၃-၄စောင်က (တံဆိပ်မပါဘဲ) လွှတ်သွား တယ်။ နောက်နေ့ ကြိုတင်မဲ ထည့်ချိန်မှာ ဒါတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။”ဟု အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ဖြစ်စဉ်ကို ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်အနေဖြင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စောင့်ကြည့်ရေးမှာ မရှိသလောက် ဖြစ်နေပြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များသာ မဲရုံများတွင် စောင့်ကြည့်နိုင် ကြသည်ဟု မဲပေးရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့မှ နယ်ခံ နော်တကောထူးက ပြောသည်။ နော်တကောထူးက “အရပ်ဖက် အဖွဲ့ စောင့်ကြည့်ရေးကို မပေးတဲ့အပေါ်မှာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ စိန်ခေါ် ချက်တွေက များတာပေါ့နော်။ ဥပမာ အားဖြင့် ကြိုတင်မဲကိုပဲကြည့်ရင် ၀ရုန်းသုန်းကား ထည့်ကြတယ်။ ဒါတွေက အမှန်တကယ် မဲထည့်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီလေ။ မဲပေးနေပြီလေ။ ဒါကို လမ်းညွှန်ချက်တွေ လက်ထပ်ပြီးတော့ သွားထု ပေးတာတွေ တွေ့ရတယ်။ ဒါတွေက မသန်စွမ်းတို့ ဘာတို့မှ အကူတောင်းရတာလေ။”ဟု ပြောဆိုသည်။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%b1%e1%80%80 %e1%80%ac%e1%80%b7%e1%80%80%e1%
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်ကုလားတန်မြစ်အထက်ပိုင်း မီးဇာကျေးရွာရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများသည် အစိုးရနှင့် အဖွဲ့အစည်းတချိူ့ထံမှ ငွေကြေးအထောက်အပံ့များရရှိမှုရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ဒေသတွင် ကုန်ဈေးနှုန်းအဆမ တန်မြင့် တက်မှုကြောင့် အခက်ကြုံနေကြရသည်ဟု သိရသည်။
လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီစဉ် (WFP)တို့ထံမှ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ငွေကြေးအချိူ့ထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ကြသော်လည်း ကုန်ဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်မှုကြောင့် အခက်ကြုံ နေရ သည်ဟု မီးဇာကျေးရွာရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးထွန်းသန်းကပြောသည်။“ဆန်တွေဝယ်ဖို့ကတော့ WFP က ဒီလတည်းမှာထောက်ပံ့ပေးတာရှိပါတယ် ပိုက်ဆံနဲ့ပေါ့နော်၊ ဆန် ဆီ ဆား ပဲတွေက သူတို့ထောက်ပံ့လို့မရဘူး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့် ဒီပလက်ဝကြားမှာ အတက်အဆင်း သိပ်အဆင်မပြေလို့၊ ဒီထောက်ပံ့တာက ဒီဇင်ဘာလ ထိ သုံးနိုင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်၊ ကျနော်တို့နယ်မြေ အခြေအနေအရ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေလည်း အရမ်း တက်နေတယ်တဲ့အခါကျတော့ အဆင်မပြေဘူး၊ ကျနော်တို့ အဓိကလို အပ်တာက ဆန်တွေလိုအပ်တယ် ဒုတိယတော့ ပိုက်ဆံလိုအပ်တယ် နောက်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ ရုန်းကန်လို့ရတဲ့ အနေထား မျိုးမှာရှိပါတယ် အခုလတ်တလော တစ်လနှစ်လတော့ အဆင်ပြေလောက်မယ်ထင်တယ် ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့လမှာ ပိုင်းမှာတော့ ကျနော်တို့လည်း ခန့်မှန်းလို့မရ တော့ဘူး” ဟု ဦးထွန်းသန်းကပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့နှင့် မီးဇာကျေးရွာအကြားတွင် တပ်မတော်စစ်ဆေးရေးဂိတ် ၃ ဂိတ်ခန့်ရှိသည့်အပြင် AA တပ်ဖွဲ့များလည်း လှုပ်ရှားမှုရှိပြီးသွားလာ၍မရဖြစ်ကာ ပလက်ဝဘက်မှ ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်၍မရသောကြောင့် မတူပီမြို့နယ် လိုင်လင်းပီမြို့ ဘက်မှ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူရသည့်အတွက် ကုန်ဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ယခုလက်ရှိ မီးဇာကျေးရွာတွင် ဆန်တစ်အိတ် ၇ သောင်းခွဲ၊ ဆားတစ်ပိသာ ၄၀၀၀ နှင့် ငါးပိတစ်အိတ် ၈ သောင်းခန့်ပေါက် ဈေးရှိနေသည်ဟုသိရသည်။
မီးဇာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဟွေ့လောက “ဆန်ကပြတ်လတ်မှုတော့မရှိဘူး ဒါပေမဲ့ ရှိတဲ့သူဆီကနေ ဝေခွဲစားသောက် နေရတာ ဆန်အိတ်ကလည်း ၇ သောင်းထိတက် အခုက ပလက်ဝတောင်မှ သွားလို့မရဘူး၊ အခုတောင်ယာလုပ်တာက လည်း ဆန်လုံလောက်မှုတော့မရှိဘူး၊ တောင်ယာမှာ နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိတယ်၊ ပလက်ဝဘက်လည်းသွားလို့မရဘူး ကြားမှာ AA ကလည်းရှိနေတယ် တပ်ကလည်း ဂိတ်ရှိတယ် အသွားအလာလုံးဝကိုမရဘူးပေါ့ အခုက ကုန်ဈေးနှုန်းတွေက လည်း အကုန်လုံးတက်ကုန်နေတာ အခုလောလောဆယ်တော့ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ကြံပြီးမှ စားသောက်နေရတာ၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မရှိတဲ့လူတွေကလည်း ဟိုချေးဒီချေး စစ်ဘေးရှောင်လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး အခုမီးဇာဆိုရင်လည်း တစ်ရွာလုံးပဲ အခက်အခဲကြုံနေရတာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ကို ကျော်ဖြတ်သန်းပြီးမှ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကို ဖလှယ်ပြီးမှစားနေရတာ” ဟု ပြောသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76699
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် အရေအတွက် ၂၃၆၂၀၀ ကျော်ရှိလာပြီး စားသောက်ရေး အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များသည် စစ်ဘေးရှောင် စခန်းပေါင်း ၁၆၈ ခုတွင် နေထိုင်သူများအပြင် ဆေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းများရှိရာတွင် သွားရောက်ခိုလှုံနေကြရသူလည်းများစွာ ရှိ သေးကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ စာရင်းကောက်တယ် ဆိုတာကလည်း ဒုက္ခရောက်နေသူတွေ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် စုဆောင်းတင်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီစာရင်းကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်”ဟု REC (Rakhine Ethnics Congress) ၏အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်ထွန်းက ပြောကြားသည်။ REC အဖွဲ့က နိုဝင်ဘာ၂ ရက် ညနေ ၅ နာရီအထိ နောက်ဆုံး ကောက်ယူထားချက်အရ သိရှိရခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုသို့စာရင်း ကောက်ယူရခြင်းမှာလည်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ကြားတွင် အတိဒုက္ခ ရောက်နေရသည့် ပြည်သူများ၏ အရေအတွက်နှင့် အခက်အခဲများကို သက်ဆိုင်သူများ သိရှိပြီး ပြည်သူလူထုကို မထိခိုက်စေသော နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့်သာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာကြစေလိုခြင်း၊ ပြည်သူလူထုက တင်မြှောက် သော အစိုးရတစ်ရပ် အနေဖြင့် ပြည်သူကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဒီမိုကရေစီ ယဉ်ကျေးမှုကို အာမခံစေလိုခြင်း၊ ထိခိုက်နစ်နာသူများအတွက် အစိုးရနှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများက ဝိုင်းဝန်းကူညီ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် စားသောက်ရေးအပိုင်းတွင်လည်း အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဖြစ်သလို နေထိုင်စားသောက် ရသည်များလည်းရှိကြောင်း မြေပုံမြို့နယ်မှ စစ်ဘေးရှောင်များက ပြောကြားသည်။“စားသောက်ရေး အဆင်မပြေမှုတွေများ လာတယ်။ အခုဆိုရင် ဒီလထဲ ရိက္ခာမရှိတော့၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ကူညီပေးနိုင်မယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေကို အကူအညီ တောင်းထားတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ မရောက်ရင် ငတ်ကြမှာပဲ။ နောက်ပြီး စစ်ရှောင်စခန်းမှာ နေထိုင်ဆိုပေမဲ့ ဘာမှလုပ်ကိုင် စားသောက်လို့ မရတာက ခက်တယ်။ လုပ်ကိုင်စားသောက် နိုင်ရင်တော့ အနည်းနဲ့အများ မိသားစု စားသောက်ရေးအတွက် ကာမိမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကမ်းထောင်းကြီး စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ ဒေသခံ ဦးကျော်ဝင်းက ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/197075
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကို လျှော့ချရန် အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားများအတွက် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို ရရှိ အောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန် မျှော်မှန်းထားသည့် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများအနေဖြင့် မဲပေးရန် တိုင်းရင်း သားပါတီ အချို့က တိုက်တွန်း ပြောဆိုလိုက်သည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကို လျှော့ချနိုင်ပါက တိုင်းရင်းသားများ လိုချင်နေသည့် တန်းတူရေး၊ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ကိုယ် ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တွေကို ရရှိနိုင်မည်ဟု တိုင်းရင်းသားပါတီ များ က ပြောသည်။
ကရင်အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KNDP ဥက္ကဋ္ဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက “ကျနော်တို့ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ထဲမှာ လည်း တန်းတူ ညီမျှဖွံ့ဖြိုးဖို့ KNDP ကို မဲပေးစို့ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်ဖို့ရယ် KNDP ကို မဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ ကြွေးကြော်ထား တယ်။ စည်းရုံးဆော်သြထားတဲ့အပိုင်းမျိုးပါ။ အထူးသဖြင့်ကတော့ တန်းတူညီမျှ ဖြစ်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ကို မဲပေးသင့်တယ် ကျနော်တို့ ဒါကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားမယ် လွှတ်တော်ထဲမှာ တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ ပြည်နယ်မှာ ဆိုလို့ရှိရင်လည်း အဲဒီအတိုင်းပဲပေါ့။ အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတဲ့အတွက် မဲဆန္ဒရှင်တွေ က ကျနော်တို့ကို မဲပေးဖို့လိုအပ်တယ်”ဟု ပြောသည်။ ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KySDP ပါတီကလည်း ရွေး ကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိပါက ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ဖော်ဆောင်ရန် ဦးတည်ချက်ထား သော ပါတီဖြစ်သည့် အတွက် မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ အကျိုးကို သယ်ပိုးမည့် ၎င်းတို့၏ ပါတီကို မဲပေးကြ ရန်လိုသည် ဟု KySDP အတွင်းရေးမှူး ခူးသဲရယ် က ပြောသည်။
ထို့အတူ ကချင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ပါတီ KSPP ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကွမ်ဂေါင်အောင်ခမ်းကလည်း မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ပါတီကို မဲပေးသင့်သည့် အကြောင်းအရင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။“KSPP ဟာ ကချင်ပြည်နယ်ကို ဦးဆောင်တဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်။ နောက်အနာဂတ်မှာ ၂၀၂၁ နောက်ပိုင်းမှာ ညွှန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့တဲ့ အချိန်မှာလည်း KSPP ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါမယ်။ ဖက်ဒရယ် နိုင်ငံ တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာလည်း KSPP ဟာ ပါဝင်လာရမယ်။ ဒါပြီးမှ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဟာမှာ လည်း KSPP ဟာ ပါဝင်ရမယ်။ ဒါကြောင့် KSPP ဟာ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ခွဲခြားလို့ မရတဲ့ ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီဟာက ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး အတွက် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်လဲ KSPP ကိုမဲပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။”ချင်းပါတီ ၃ ပါတီ ပေါင်းစည်းထားသည့် ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် CNLD ပါတီကလည်း ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနှင့် ချင်းအမျိုး သားရေး လက္ခဏာများကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်မည့် ချင်းပါတီကို မဲပေးကြရန် CNLD ဥက္ကဋ္ဌ ဦးငိုင်ဆာ့ခ် က ပြောသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီအနေဖြင့်လည်း ၁၉၄၇ ပင်လုံ ကတိကဝတ်ကို အခြေခံသည့် ပါတီ ဖြစ်သည့်အပြင် ရှမ်းလူမျိုး တစ်မျိုးတည်း၏ အရေးအတွက် လုပ်ဆောင်မည့် ပါတီ မဟုတ်ပဲ ပြည်ထောင်စုထဲတွင် မှီတင်းနေ ထိုင်သည့် တိုင်းရင်းသား အားလုံး၏ အရေးကို လုပ်ဆောင်မည့် ပါတီဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ပါတီကို မဲပေးသင့်သည်ဟု SNLD ပါတီ မှ ဝိုင်း မော်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စိုင်းဆွန်လျို့ က ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် တိုင်း ရင်းသားများက ၎င်းတို့၏ အမျိုးသားအလိုက် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို ပြန်လည်ဝန်းရံခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ https://www.bnionli ne.net/mm/news-76723
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်း အစိုးရ တပ်မတော်၏ စစ်ကား အစီးရေ ၂၀ ကျော် စစ်အင်အားနှင့် ရိက္ခာ အပြည့်တင်ဆောင်ကာ ဖြတ်သန်းသွားကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် နေ့လည်ပိုင်းက စစ်အင်အားများ နှင့် ရိက္ခာများ တင်ဆောင်သည့် စစ်ကားများသည် မူဆယ်မြို့ကိုဖြတ်ကာ စယ်လန့်ကျေးရွာဘက်သို့ သွားချထားခဲ့ကြောင်း မူဆယ်မျက်မြင်ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ မူဆယ်မြို့လယ်ကို ၁၀ စီးဖြတ်တယ်။ မူဆယ်မြို့ပတ်လမ်းဘက်ကနေ ၁၀ စီးဖြတ်တယ်။ အဲ့ကနေ ပြီးတော့ စယ်လန့် ဘက်ကို သွားတယ်။ စစ်သားတွေ ရိက္ခာတွေချပြီး ပြန်သွားတယ်” ဟု မျက်မြင်ဒေသခံ အသက် ၄၀ ဝန်းကျင် အမျိုးသားက ပြောသည်။ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ၄ ရက်သာ ကျန်ရှိသည့်အချိန်တွင် စစ်သားများ သယ်ဆောင် လာသည့် ကားများသည် မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းသို့ ဖြတ်သန်းလာသည်မှာ စဉ်းစားစရာဖြစ်ကြောင်း လည်း ၎င်း က ပြောသည်။“ စစ်ကား အစီးရေ ၂၀ စီးမှာ စစ်အင်အား ဘယ်လောက်ပါလာလဲတော့မသိဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲလည်း နီးပြီဆို တော့ စိုးရိမ်စရာတော့ ဖြစ်တာပေါ့” ဟု မူဆယ်ဒေသခံ တဦးက ပြောသည်။
မူဆယ်ခရိုင် တာမိုးညဲမြို့နယ် အတွင်းတွင်လည်း အသက် (၆၀) အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကြိုတင်မဲပေးရာတွင် ဖိအားပေးပြီး မိမိဆန္ဒမဲမပေးခဲ့ရကြောင်း လည်း ရှိသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/19203
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာရှည်မြို့နယ် မဲစာရင်းရောက်ရှိသွားသည့် ကရင် ပြည်နယ်၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ သာမိုတောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကပ်ပယ်ရွာ မဲစာရင်းကို ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင်ကြီး မြို့နယ်မဲစာရင်းထဲ ပြန်လည် ထည့်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ထွန်းက ပြောသည်။ ကပ်ပယ်ရွာသည် ယခင်ကတည်းက ကရင်ပြည်နယ်၊ သံတောင် ကြီးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်မှုဧရိယာအတွင်း တည်ရှိသော်လည်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၈၊ ဩဂုတ် ၃ ရက်နေ့ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀၁၅/၂၀၁၈) အရ နယ်မြေထိစပ်နေသည့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာ ရှည်မြို့နယ်၊ ကျွဲရိုင်းပင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းဖွဲ့ စည်းလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ရေတာရှည်မြို့နယ် မဲစာရင်းထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဒေသခံများက သံတောင်ကြီးမြို့နယ်မဲစာရင်းထဲ ပြန်လည်ထည့် သွင်းပေးရန် လျှောက်ထား မှုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ရေတာရှည်မဲစာရင်းထဲမှ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ကြောင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ထွန်းက ပြောသည်။“ပုံစံ ၆၆ က သာမိုတောင် အုပ်စု၊ သံတောင်မြို့နယ်ထဲက ထုတ်ပေးထားတဲ့ ဟာတွေဆိုတော့ သူတို့က ၄ (က) နဲ့ လျှောက်လို့ရ တယ်။ သူတို့က လျှောက်လာကြတော့ ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ၄ (ခ) နဲ့ဖျက်ပေးလိုက်ဆိုတော့ ဖျက်ပေးလိုက်တာပါ။ နယ်မြေ ကတော့ ဘာမှ မပြောလိုဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ။ ကျနော်တို့ကော်မရှင် ကတော့ ကော်မရှင်ဥပဒေအရပဲ လုပ်ပေးလိုက်တာပါ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ယခုလို ပဲခူးတိုင်း၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်ထဲ ရောက်ရှိသွားသည့် ကပ်ပယ်ရွာနှင့် ခပေါင်းပင်ရွာများသည် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် မဲစာရင်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ကာပူးပေါင်းကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတာဝန်ရှိသူများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း NLD မှ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်လောင်း နော်ခရစ္စထွန်းက ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ်ထဲ ပြန်ရောက်လာသည့် ကပ်ပယ်ရွာမဲစာရင်းတွင် မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၁၄၀ ဦးရှိပြီး သံတောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို မဲပေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါရွာနှစ်ရွာ ကို သံတောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှ ရေတာ ရှည်မြို့နယ် အတွင်း ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းလိုက်မှုအပေါ်၂၀၂၀ ပြည်နှစ် မတ် ၆ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ကရင်ပြည်နယ်ထဲ ပြန်ထည့်သွင်းရန် မေးခွန်းမေးမြန်း ခဲ့ဖူးပြီး ထိုစဉ်က ဖွဲ့စည်းပုံ အတိုင်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ဒု-ဝန်ကြီး ဦးတင်မြင့်က ဖြေကြားထားသည်။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%95%e1%80%b2%e1%80%81%e1%80%b0%e1 %80%b8%e1%8
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နယ်၊ ပလ္လင်ပြင်ကျေးရွာသား ၄ ဦးကို ယမန်နေ့ ညနေ ၅ နာရီအချိန်ခန့်က ရေချမ်းပြင် ရဲစခန်းမှ တစ်ဆင့် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
၎င်းတို့ ၄ ဦးမှာ ဦးသာထွန်းလှ (၆၈)နှစ်၊ ဦးထွန်းကျော်လှိုင် (၄၈)နှစ်၊ ဦးမောင်သိန်းချေ (ခ) ဦးဆိတ်တောင်း (၄၀)နှင့် ဦးကျော်ဝင်းချေ (၃၈)နှစ် အရွယ်တို့ဖြစ်ကြောင်း ဦးသာထွန်းလှ၏သမီး ဒေါ်မသန်းလှိုင်က ပြောသည်။ “ မနေ့က ၅ နာရီ လောက်မှာ ရေချမ်းပြင်ရဲစခန်းကနေပြီးတော့ လွတ်လာပါတယ်။ စစ်သားတွေကတော့ မနေ့က ညနေ ၄ နာရီလောက်မှာ ရေချမ်းပြင်ရဲစခန်းကို လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျမအဖေ ပြောတာကတော့ ရွာကထွက်တဲ့ အချိန်ကနေ မျက်နှာကို အဝတ်စနဲ့ ချုပ်ယူသွားလို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ၃၅၄ တပ်မှာ ထားပြီးတော့ စစ်ဆေးတယ်လို့ပြောတယ်။ စစ်ဆေး တာတွေကတော့ AA နဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိတယ်။ AA ကို ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ စွပ်စွဲတယ်လို့ပြော တယ်။ ကျမအဖေတို့က AA နဲ့ ဆက်စပ်မှုမရှိသလို ထောက်ပံ့ကြေးပေးတာတွေလည်း မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ ငြင်းဆိုတဲ့အတွက် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်” ဟုပြောသည်။
ဖခင်ဖြစ်သူအပါအဝင် ဖမ်းဆီးခံရသော ကျေးရွာသားများအားကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်သဖြင့် အလွန်ဝမ်းသာမိကြောင်း ဒေါ်မသန်းလှိုင်ကဆက်ပြောသည်။ ၄င်းတို့ ၄ ဦးအား ပလ္လင်ပြင်ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိလာသော မြန်မာ့တပ်မတော်စစ်ကြောင်း စုပေါင်းတပ်ဖွဲ့က နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီကျော် အချိန်ခန့်က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပလ္လင်ပြင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမောင်မြစိန် ကလည်း ၄င်းတို့ ၄ ဦး လွတ်မြောက်လာခြင်းမှာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း နိရဉ္စရာသတင်းဌာနသို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76750
ကယားပြည်နယ် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ကော်မတီ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးကို သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀ (က)၊ (ပ) ၃၀၆/၂၀၂၀ ဖြင့် လွိုင်ကော်မြို့မ ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က မန္တလေးမှတစ်ဆင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ် လမ်းအတိုင်း ဆိုင်ကယ်ဖြင့်လာခဲ့သော စိုင်းဝဏ္ဏ ဆိုသူသည် ပီကင်းကောခူ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် စစ်ဆေးမှု မခံဘဲ ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် လေးမိုင်စံပြရွာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် လွိုင်ကော်မြို့မ ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း ကယားပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး Facebook လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုမခံခဲ့သူ စိုင်းဝဏ္ဏကို စိစစ်တွေ့ရှိရပြီးနောက် ကွာရန်တင်း စင်တာ ဝင်ခိုင်းခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ နေအိမ်တွင် သီးခြားနေထိုင်ခဲ့ရသောကြောင့် ယခုမှ အမှုဖွင့် အရေးယူရခြင်းဖြစ်ကြောင်း လွိုင်ကော်မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီဌာန၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်းဖြစ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သူ ဦးရန်နိုင်ဝင်းက ဆိုသည်။ လွိုင်ကော်မြို့မ ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ကျော်လင်းထွန်းက စိုင်းဝဏ္ဏကို နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက် ညတွင် တရားလိုပြုလုပ်၍ အမှုဖွင့်ထားကြောင်း မဇ္ဈိမကို အတည်ပြုသည်။ “မြို့နယ် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော့ကို တရားလို ပြုလုပ်တိုင်တန်းဖို့ ဆိုပြီး သူတို့က အကြောင်းကြားတာကိုး။ အကြောင်းကြားတော့ ကျွန်တော်က တရားလိုလုပ်ပြီး အမှုဖွင့်ပေးထားတယ်” ဟု စခန်းမှူး ကျော်လင်းထွန်းက ပြောသည်။
တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည့် ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၏ ညွှန်ကြားချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် တမင် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက တစ်နှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ် နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟု သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀ (က) တွင် ဖော်ပြထားသည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/75244
သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်မြို့နယ် “ဝ” တပ်ဖွဲ့လှုပ်ရှားနယ်မြေ နေထိုင်သူများအားလုံး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကို မဲထည့်ပေး ရန် “ဝ”တပ်ဖွဲ့ ကညွှန်ကြားထားကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ “ဝ” တပ်ဖွဲ့ လှုပ်ရှားသည့် နယ်မြေ အတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီများအား ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ဟုအကြောင်းပြကာ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မပေး သဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ထိုနေရာသို မဲဆွယ်ခွင့်မရရှိခဲ့ကြကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိုနေရာတွင် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု မရှိနိုင်ဟုဆိုကာ ရွေးကောက်ပွဲ ပယ်ဖျက်ပေးရန် နိုင်ငံရေးပါတီ (၄)ခု က ယမန်နေ့ (နိုဝင်ဘာ ၄)ရက်က တောင်းဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် “ ဝ”တပ်ဖွဲ့ ထိန်းချုပ်နေရာဖြစ်သည့် ဝမ်ဟုံ၊ ဆီဘုတ်၊ မိုင်းယွန်း၊ တာကူးတွင်နေထိုင်သည့် ပြည်သူများကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်းများက အစိုးရတပ်မတော်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(USDP) ပါတီကို မဲထည့်ရန် ပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ မဲထည့်ပုံ၊ထည့်နည်းများ ကို ခေါ်ယူသင်ကြားပေးနေကြောင်းလည်း အမည် မဖော်လိုသည့် “ဝ”တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။“ ကျနော်တို့ကို ခေါ်ပြီးတော့အစိုးရတပ် ပါတီကိုပဲ မဲပေးဖို့ ပြော ပါတယ်။ ကျန်ပါတီတွေမပေးဖို့ နောက်ပြီး တံဆိပ်တုံးထုတာတွေ သင်ပေးပါတယ်” ဟု ၎င်း အမည်မဖော်လိုသည့် “ ဝ”တပ်သား က ဆိုသည်။ ယခင် ထိုဒေသတွင်နေထိုင်သည့် ပြည်သူများသည် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD)ကိုသာမဲပေးရန် “ ဝ”တပ်ဖွဲ့က ပြောဆိုခဲ့ပြီး၊ ၅နှစ်သာကာလအတွင်း အပြောင်း အလဲမရှိလာသည့်အတွက် ယခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အစိုးရတပ် ပါတီဖြစ်သည့် USDPကို မဲပေးရန် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
“ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်သားတွေ က မဲပေးခွင့်မရှိပေမယ့် “ဝ”ထိန်းချုပ်နယ်မြေက ဝ တပ်သားတွေကတော့ မဲ ပေးလို့ရတယ်။ “ဝ”နယ်မြေက လူကြီးပေါ်မူတည်တယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမဲထည့်ဖို့ ဆိုတာက ဒါကတော့ တရားမျှတမှု မရှိဘူး” ဟု မိုင်းဆတ်မြို့နေ အသက် ၄၀ ကျော် စိုင်းတစ် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်ကို ပြောသည်။ မိုင်းဆတ်မြို့နယ် နိုင်ငံရေးပါတီများ ဝင်ခွင့်မရသည့် ဒေသများတွင် မဲဆန္ဒရှင်များကို တိုင်းရင်းသားပါတီများအား မဲပေးရန် ဟန့်တားခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကြောင်းလည်း မိုင်းဆတ်ဒေသခံများပြောပြချက်အရ သိရသည်။ မိုင်းဆတ်မြို့နယ် အတွင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီများမှာ “ဝ”အမျိုးသားပါတီ၊ ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ရှမ်းတိုင်ရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ နှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီတို့ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/19229
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် (NLD) ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ဦးကို ရက္ခိုင့်စစ်တပ်(AA)က ဖမ်ဆီးခဲ့ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ၃ ရက်သာ လိုတော့သည့် အချိန်ထိ ပြန်လည်လွတ် မြောက်လာခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ယနေ့အချိန်အထိ ပြန်လည် လွတ်မြောက်မလာသည့်အတွက် မိသားစုနှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် NLD ပါတီဝင်များ က စိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။ NLD ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ဦး ဖြစ်သည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမင်းအောင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်နီနီမေမြင့်၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်ချစ်ချစ်ချော တို့ ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က တောင်ကုတ်မြို့နယ် ဖောင်းခါးကျေးရွာတွင် မဲဆွယ် စည်းရုံးနေစဉ် အဖမ်းခံခဲ့ ရခြင်း ဖြစ်သည်။
တောင်ကုတ်မြို့နယ် NLD ပါတီဝင် ဦးသက်ထွန်း (ခ) ကိုဖိုးထောင်က“ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ယောက် သတင်းကတော့ နောက်ဆက်တွဲ ဘာမှ မကြားရသေးဘူး။ သူတို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးတွေကိုတော့ မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေး ကော်မတီနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ယောက်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပူးပေါင်းပြီး မဲဆွယ် စည်းရုံး ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေတာ ရှိပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ဦးသက်ထွန်း(ခ) ကိုဖိုးထောင် သည် အဖမ်းခံထားရသည့် NLD ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းအောင်၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်တဦးလည်း ဖြစ်ပြီး ဖမ်းဆီးခံ ရသည့် ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူ တဦး ဖြစ်သည်။ သံတွဲခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်သိန်း ကလည်း အဖမ်းခံထားရသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ဦးမှာ အသက်ရှင်လျက် ရှိသဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေဖြင့် ဆက်လက် ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့် ရှိနေသေးကြောင်း ပြော သည်။
ယခု အဖမ်းခံထားရသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃ ဦးတွင် ဦးမင်းအောင်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ မှ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဟောင်းတဦးဖြစ်သလို လက်ရှိပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ဒေါ်နီနီမေမြင့်မှာလည်း လက်ရှိ တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦးကာ NLD ပါတီ ဗဟိုလူငယ် အဖွဲ့ဝင်တဦး လည်း ဖြစ်သည်။ ဒေါ်ချစ်ချစ်ချော မှာ ပြည်နယ်အဆင့် ပါတီ လူငယ် ခေါင်းဆောင်တဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ရက္ခိုင့်စစ်တပ် (AA) အနေဖြင့် အဆိုပါ ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ၃ ဦးကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခေါ်ခဲ့ပြီး လိုအပ်ချက်အရ ကာလအတိုင်းအတာတခုအထိ ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ကာ အစိုးရက ဖမ်းဆီးထားသော ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ပြည်သူ များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တောင်းဆိုနေသော ကျောင်းသားများအား ပြန်လည်လွတ်ပေးမည် ဆိုပါက ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ၃ ဦးအားလည်း ပြန်လည်လွတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့ AA ဘက်က ကြေညာချက် တစောင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ https://burma.irr awaddy.com/news/2020/11/05/232851.html
မွန်ပြည်နယ်တွင် ရောက်ရှိနေသည့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ၈၃၀၀ ကျော် မဲပေးရန် လျောက်ထားခဲ့သည်ဟု ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ တာဝန်ရှိသူ က ပြောသည်။ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မနည်း မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပ ရောက်နေသူများသည် မိမိတို့၏ အမြဲတမ်းနေရပ်သို့ သွားရောက်ပြီး မဲပေးလိုခြင်းမရှိပါက မိမိတို့ရောက်ရှိနေသည့် မဲဆန္ဒနယ်က ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို မဲပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
“သထုံခရိုင် ၄ မြို့နယ်ပေါ့၊ ဒီ သထုံ ကျိုက်ထို ဘီးလင်း ပေါင် ၄ မြို့နယ်မှာ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက်မနည်း မဲ ဆန္ဒ နယ်ပြင်ပရောက်နေသူတွေ ပုံစံ (၃-က) နဲ့ လျှောက်ထားတာ ၄ မြို့နယ်ပေါင်းချုပ်က ၁၅၀၀ ကျော်ရှိတယ်”ဟု သထုံခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးသက်နိုင်ဦးက ပြောသည်။ ထို့အပြင် မော်လမြိုင်ခရိုင်အတွင်းရှိ မော်လမြိုင်၊ ချောင်းဆုံ၊ ကျိုက်မရော၊ မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်၊ ရေး ၆ မြို့နယ်တို့တွင် လျှောက်ထားသူ စုစုပေါင်း ၆၈၀၀ ကျော်ရှိ သည်ဟု မော်လမြိုင်ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးထင်ကျော် က ပြောသည်။ ရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိ နေသူများ မဲပေးနိုင်ရန် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကျေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲရုံးများ တွင် လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ရပ်ကျေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးမြင့်ဆွေ က “တခြားဒေသ အစုံကနေပြီးတော့မှ ဒီမှာအလုပ်လာလုပ်ကြတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေပေါ့။ COVID ကြောင့် သူတို့နေရပ်ပြီးတော့ မဲပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြလို့ ဒီမှာပဲ မဲပေးဖို့လျှောက်ကြတယ်”ဟု ပြောသည်။ ပုံစံ (၃-က) ဖြင့် လျှောက်ထားသူတို့၏ မဲစာရင်းကို ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမှီ တစ်ပတ်အလိုတွင် သက် ဆိုင်ရာ ရပ်/ကျေးကော်မရှင်ရုံး တို့တွင် ကပ်ထားကြေညာပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံ လက်မှတ်များထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲ၏နောက်ဆုံးပြုစု ထားသည့် စာရင်းများအရ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မွန်ပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်လုံးတွင် မဲ ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသည့် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူ ၁၈ သိန်း ၄ သောင်း ကျော် ရှိသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76740
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် အသက် ၆ဝ အထက်ရှိသူများ အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်မှ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် နေ့အထိ ၎င်းတို့သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ပြီး အများစုမှာ မဲထည့်ဖူးခြင်း အတွေ့အကြုံ မရှိခဲ့ သည့်အတွက် ပယ်မဲများနိုင်မည်ဟု နိုင်ငံရေးပါတီများက ပြောသည်။ ပထမဦးဆုံအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ရထား သည့် ကျေးရွာများတွင် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလာထည့်ကြသော အသက် ၆ဝ ကျော်အရွယ် ဒေသခံအများစုမှာ ပယ်မဲ၊ ခိုင်လုံမဲများ နှင့် မဲထည့်ပုံထည့်နည်းများ သိရှိထားမှု အားနည်းခဲ့သည့်အပြင် ကော်မရှင်အနေဖြင့်လည်း မသိနားမလည်သည့် အပိုင်းများ တွင် ရှင်းပြပေးမှု အားနည်းသည်ဟု နိုင်ငံရေးပါတီများက ကေအိုင်စီသို့ ပြောဆိုသည်။
“ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေက မဲထည့်နည်းတွေ သိပ်နားမလည်ထားကြဘူး။ တစ်ချို့ဆို ဘာတံဆိပ်မှ တုံးမထုပဲ ဆန္ဒမဲစာရွက် ကို ပုံးထဲဒီအတိုင်းပဲ ထည့်သွားတယ်ကြားရတယ်။ မဲရုံကော်မရှင်တွေဘက်မှာ မသိနားမလည်ဘဲ မဲလာထည့်သူတွေကို မဲ ဆွယ်တာတော့ မဟုတ် ဘူးပေါ့နော်။ မသိတာတွေ ရှင်းပြမှုအပိုင်း အားနည်းတယ်။ ၅ ပုံ ၂ ပုံလောက်က ပယ်မဲဖြစ်လိမ့်မယ်” ဟု ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် NLD ပါတီ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုထိန်လင်းက ပြောသည်။“အသက် ၆ဝ ကျော် ဆိုတော့က မဲမထည့်တတ်ကြဘူးလေ။ မဲစာရင်းက တစ်ချို့နေရာဆို အိမ်မှာပဲကပ်ထားတယ်။ မကပ်ထားတာလည်းရှိတယ်။ တစ်ချို့ကပ်ထားတယ်။ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိလို့ သွားမကြည့်ကြဘူး။ ကော်မရှင်နဲ့ ကျေးရွာလူကြီးတွေလည်း ရွာသားတွေကို မပြောထားနိုင်ကြဘူး။ မဲအမှတ်စဉ်တွေ မသိထားကြဘူး။ ကြိုတင်မဲမှာ ပယ်မယ်များ နိုင်တယ်လို့ ကြားရတယ်ဟု ကရင် အမျိုးသား ဒီမိုက ရက်တစ်ပါတီ -KNDP ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စကျော်စွာက ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
ပုံစံဖြည့်စွက် နောက်ဆုံးလျှောက်ထားသူများနှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်တိုးဆန္ဒမဲထည့်ခွင့်ရသူ အမည်စာရင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် အမည်စာရင်းများအား လုံးကိုပါ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကျေးကော်မရှင်ရုံးများတွင် ကပ်ထားပေးမည် ဖြစ် ပြီး ကြိုတင်မဲလာရောက်ထည့်မှု ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲမရှိဟု ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကြည်လွင်က (နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်) တွင် ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တွင် ဆန္ဒမဲထည့်ခွင့် ရသူ ၁၅ဝ, ဝဝဝ (တစ်သိန်းငါးသောင်း)ကျော်ရှိပြီး နိုင်ငံရေးပါတီ ၅ ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသီးသီး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ် ၂ နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲ ဆန္ဒနယ် ၂ နေရာနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အပါ စုစုပေါင်း မဲဆန္ဒနယ် ၅ နေရာ ခွင့်ပြုထားသည်။ http://kicnews .org/2020/11/%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1% 80%a1%e1%80%84%e1%80
၁။ ကြောကျဖွူ ဇိုငျခြောငျးကြေးရှာသားမြားကို တပျမတျောက ထိနျးသိမျးစဈဆေးနေ
၂။ ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ပတျသကျ၍ EAOs အဖှဲ့မြားအပျေါတပျမတျော သဘောထားကွညောခကျြ တိကရြှငျးလငျးရနျလို အပျဟုဆို
၃။ ခြီဖှစေဈရှောငျတခြို့ နရေပျပွနျရနျ စီစဉျ
၄။ မဲဆှယျခှငျ့မရသညျ့ မိုငျးဆတျ “UWSA” နယျမွေ ရှေးကောကျပှဲ ဖကျြသိမျးပေးရနျ ပါတီ ၄ ခု တောငျးဆို
၅။ တပျမတျော၏ ကွညောခကျြကို ပွနျလညျတုံ့ပွနျမညျမဟုတျကွောငျး KIO ဆို
၆။ လူထု လှတျလပျစှာမဲပေးခှငျ့ကို ပွညျသူစဈအဖှဲ့မြား ခွိမျးခွောကျနဟေုဆို
၇။ ဆန်ဒမဲလာထညျ့သူမြား ထိတျလနျ့မှုမဖွဈအောငျ မမွငျနိုငျသညျ့နရောတှငျသာ လုံခွုံရေးယူပေးမညျဟု KNU ပွော
၈။ နမျ့ခမျးမွို့ UP အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ ကို သနေတျပဈခဲ့သညျ့တရားခံ လှတျမွောကျနဆေဲ
၉။ ဒီးမော့ဆိုမှာ ကွိုတငျမဲ အမှားအယှငျး ၆၀ ကြျောနေ
၁၀။ မှနျပွညျနယျက ရလေုပျသား တဈထောငျနီးပါး မဲပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးနိုငျ
၁၁။ ခငျြးအမြိူးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြူပျ (CNLD) ပါတီက ကွိုတငျမဲလာထညျ့တဲ့ ဘိုးဘှားတှကေို အတငျးမဲထညျ့ခိုငျးတယျ လို့ ဖျောပွထားထားတဲ့ သတငျးအမှား
၁၂။ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားနှငျ့ လကျတှဲသငျ့ကွောငျ့ ကခငျြလူထု၏အမွငျသဘောထား
၁၃။ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီကို ကရငျနီ လူမြိုးစုလူငယျမြား အငျအားပွဝနျးရံ
၁၄။ ကော့ကရိတျတှငျ ကွိုတငျမဲပေးသညျ့ မဲရုံအခြို့ကိုသာ စောငျ့ကွညျ့နိုငျ၊ အားနညျးခကျြအခြို့ရှိ
၁၅။ မီးဇာကြေးရှာရှိ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားထောကျပံ့မှုအခြိူ့ရရှိသျောလညျး ကုနျဈေးနှုနျးမွငျ့တကျမှုကွောငျ့ အခကျ ကွုံနရေ
၁၆။ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး စဈဘေးရှောငျဦးရေ ၂၃၆၂၀၀ ကြျောရှိလာခဲ့ပွီး စားသောကျရေးအတှကျ အခကျအခဲမြားစှာ ရငျဆိုငျနရေ
၁၇။ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစု တညျဆောကျရနျ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှု လြော့ခရြနျ လိုအပျ
၁၈။ မူဆယျမွို့နယျအတှငျး စဈအငျအားအပွညျ့တငျစဈကား အစီးရေ ၂၀ ကြျောဖွတျသနျး
၁၉။ ပဲခူးတိုငျးမဲစာရငျးထဲရောကျနသေညျ့ ရှာတဈရှာကို ကရငျပွညျနယျထဲ ပွနျလညျထညျ့သှငျး
၂၀။ စဈတှေ ပလ်လငျပွငျကြေးရှာသား ၄ ဦး ပွနျလှတျလာ
၂၁။ ကိုဗဈကျောမတီ ညှနျကွားခကျြ ဖောကျဖကျြသူကို လှိုငျကျောတှငျ အမှုဖှငျ့
၂၂။ မိုငျးဆတျ “ဝ” နယျမွအေတှငျး အစိုးရတပျ နှငျ့ဆကျနှယျသညျ့ USDP ပါတီ မဲပေးရနျ တိုကျတှနျးနေ
၂၃။ ရှေးကောကျပှဲ နီးကပျလာခြိနျ တောငျကုတျမှ NLD အမတျလောငျး ၃ ဦး ပွနျမလှတျသေး
၂၄။ မှနျပွညျနယျတှငျ ရှပွေ့ောငျးနထေိုငျသူ ၈ ထောငျကြျော မဲပေးရနျ လြောကျထား
၂၅။ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျတှငျ အသကျ ၆ဝ ကြျော ကွိုတငျဆန်ဒမဲ ပယျမဲမြားမညျဟု နိုငျငံရေးပါတီမြားပွော
ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျဖွူမွို့နယျအတှငျး ဇိုငျခြောငျးကြေးရှာသားမြားကို တပျမတျောက နိုဝငျဘာလ၂ ရကျ ညနပေိုငျး ကတညျးက နိုဝငျဘာလ ၄ ရကျထိ ကြေးရှာ စာသငျကြောငျးတှငျ လူစုပွီး ၃ ရကျကွာ ထိနျးသိမျး စဈဆေးနေ ကွောငျး သတငျး ရရှိသညျ။
နိုဝငျဘာလ ၂ ရကျ မနကျပိုငျးက အဆိုပါ ဇိုငျခြောငျး ကြေးရှာဘကျသို့ အရပျဝတျဖွငျ့ လာရောကျ တပျမတျောသား ၅ ဦး အနကျ ၂ ဦးမှာ AA တပျဖှဲ့ဝငျမြားထံ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရပွီးနောကျ တပျမတျော စဈကွောငျးမြားက ကြေးရှာသားမြားကို ထိနျးသိမျး စဈဆေးနခွေငျး ဖွဈကွောငျး ဒသေခံမြားက ဆိုသညျ။ ဇိုငျခြောငျး ကြေးရှာသားတဦးက “ ဖွဈတာကတော့ ရှာအစှနျမှာဖွဈ ကွတာ။ အရပျဝတျနဲ့ တပျမတျောသား ၅ ဦး လာတဲ့အခြိနျ ကိုဗဈကာကှယျရေး လုပျနတေဲ့ လူတှကေတားဆီးပွီးတော့ လကျ ဆေးဖို့ ပွောတယျ။ အဲဒီမှာ သူတို့က လကျမဆေးဘူး။ သနေတျတှကေို ထုတျပွတယျလို့ ပွောတယျ။ အဲဒါကို အလှမျးမကမျး မှာ ရှိတဲ့ AA အဖှဲ့ မွငျပွီးတော့ သူတို့ ဖွတျသှားတာနဲ့ အပွနျအလှနျ လုံးထှေးသတျပုတျကွတယျလို့ သိရတယျ။ တပျမတျော သား ၃ ယောကျကတော့ လှတျသှားပွီး ၂ ယောကျကို AA က ဖမျးချေါသှားတယျလို့ ပွောတယျ”ဟု ဧရာဝတီ သို့ ပွော သညျ။ ထိုသို့ တပျမတျောသားနှဈဦးကို ဖမျးဆီးခဲ့ပွီးနောကျ အဆိုပါ ဇိုငျခြောငျး ကြေးရှာအတှငျးသို့ တပျမတျော စဈကွောငျး မြား ဝငျရောကျလာပွီး ကြေးရှာသားမြားကို ထိနျးသိမျးကာ ယနအေ့ထိ စဈဆေးလကျြရှိပွီး ယငျးကြေးရှာ အတှငျး၌မညျသို့ ဖွဈပကျြနသေညျကို အဆကျအသှယျ မရှိဘဲ ဖွဈနကွေောငျး ပတျဝနျးကငျြ ကြေးရှာသားမြားက ဆိုကွသညျ။
ကြောကျဖွူ မဲဆန်ဒနယျမှ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးဖိုးစံက “အဲဒီနကေ့တညျးက ရှာသားတခြို့ကတော့ ကြောကျဖွူမွို့ပျေါနဲ့ နီးစပျရာ ကြေးရှာတှကေို ထှကျပွေးနကွေတာ ရှိတယျ။ ကနျြနခေဲ့တဲ့ သကျကွီးရှယျအိုးတှေ၊ ကလေး တှေ အမြိုးသမီးတှကေတော့ ဘယျလိုဖွဈနတေယျဆိုတာ အဆကျအသှယျ မရဘူး။ အဲဒီ ရှာဘကျကိုလညျး တယောကျမှ မသှားရဘူး။ ဒသေခံတှကေလညျး သူတို့အတှကျ တျောတျော စိုးရိမျနကွေတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ တပျမတျော သတငျးပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးကတော့ အဆိုပါ လုံခွုံရေးဆောငျရှကျရနျသှား ရောကျသညျ့ တပျမတျောသားမြားထဲမှ ၂ ဦးကို ယငျးကြေးရှာမှ AA အမာခံမြားက ဝိုငျးဝနျး ဖမျးဆီးသညျ့အတှကျ ကြေးရှာ သားမြားကို စဈဆေးနပွေီး ဖမျးဆီးရမိသညျ့ ကြေးရှာသား ၃ ဦးကိုလညျး တရားစှဲဆိုရနျ ပွငျဆငျနကွေောငျး ပွောဆိုသညျ။
ကြောကျဖွူ မဲဆန်ဒနယျမှ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးဘရှိနျက ဇိုငျခြောငျးကြေးရှာသား အရေးနှငျ့ပတျသကျပွီး ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျလုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာ ဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မငျးသနျးအား ဆကျသှယျအကွောငျးကွား ထားကွောငျးလညျး ဆိုသညျ။ ဦးဘရှိနျက “ရှာသားတှေ ဘေးဒုက်ခကွုံတှနေ့ရေတယျ ဆိုတာကိုတော့ ပွညျသူ့ကိုယျစား လှယျ တဦးအနနေဲ့ နယျ/ လုံ ဝနျကွီးဆီတော့ အကွောငျးကွားထားတယျ။ ရှာသားတှကေတော့ တခွားရှာကို ရောကျနေ တယျ။ တပျမတျောသားတှေ လညျး မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီလိုတော့ သတငျးကွားတယျ။ တိတိကကြတြော့ သတငျးမရသေးဘူး။ ဆကျသှယျလို့လညျး မရဘူး။ ရှာသားတှကေတော့ တျောတျော ကွောကျနကွေတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောဆိုသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/11/04/232799.html
ရှေးကောကျပှဲ နှငျ့စပျလဉျြး၍ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျး (EAOs) မြားအပျေါ ထုတျပွနျသညျ့ တပျမတျော၏ သဘောထားကွညောခကျြမှာ တိကရြှငျးလငျးရနျ လိုအပျကွောငျး နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူမြားနှငျ့တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားက ပွနျလညျထောကျပွပွောဆိုခဲ့သညျ။
တပျမတျော ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံးမှ နိုဝငျဘာလ ၂ ရကျနေ့ ရကျစှဲ ဖွငျ့ ထုတျပွနျသညျ့ သဘောထားထုတျပွနျခကျြ၌ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးအခြို့၏ အငျအား တညျဆောကျမှုကွောငျ့ ပွညျ သူလူထုမြား မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးမှုမြား ဖွဈပျေါစကွေောငျး ဖျောပွထားမှုတှငျ မညျသညျ့တိုငျးရငျးသားလကျနကျ အဖှဲ့အစညျးဖွဈကွောငျးကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ဖျောပွသငျ့သညျဟု နိုငျငံရေး လလေ့ာသုံးသပျသူ ဦးမောငျမောငျစိုးက ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “ရှေးကောကျပှဲ နဲ့ ပတျသကျပွီး တော့ တခြို့ EAO တှကေ ရှေးကောကျပှဲကို အားပေးတာရှိတယျ။ တခြို့ EAO တှကေတော့ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ဆနျ့ ကငျြတာရှိတယျ။ တခြို့ကတော့ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ဆနျ့လညျးမဆနျ့ကငျြဘူး၊ ထောကျလညျး မထောကျခံဘူး။ တကယျ တမျးက တိတိကကြ ဘယျအဖှဲ့က ဆိုတာကို ထုတျပွနျနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပေါ့။ ဘာဖွဈလဲဆိုတော့ NCA ထိုးထားတဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှလေညျး ရှိတယျ။ NCA ထိုးထားတဲ့ အဖှဲ့တှကေလညျး NCA ကို ခြိုးဖောကျသလား၊ ဘာလား ဆိုတဲ့ သို့လော သို့လော မေးခှနျးတှေ ဖွဈလာတာကတော့ ကောငျးတဲ့ ကိစ်စမဟုတျဘူး”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
တပျမတျော၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ EAOs အဖှဲ့အခြို့၏ အငျအားတညျဆောကျမှုကွောငျ့ လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ (၈)ရကျနေ့ တှငျ ကငျြးပမညျ့ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ဒသေခံ ပွညျသူထု၏ အခှငျ့အရေး တဈရပျဖွဈသော လှတျလပျစှာ ဆန်ဒမဲ ပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးမှုဖွဈပျေါစကွေောငျး ဖျောပွထားခွငျးဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးအခြို့၏ နှောငျ့ယှကျ ဖိအားပေးမှုကွောငျ့ ဒီမိုကရစေီဖျောဆောငျရေးအတှကျ အရေးပါသညျ့ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျမြား တိုးတကျမှု နှောငျ့နှေး စသေညျ့အပွငျ အခြို့ဒသေမြား၌ တိုငျးရငျးသား ပွညျသူမြား၏ မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ကွောငျးနှငျ့ နိုငျငံရေး ပါတီမြား၏ မဲဆှယျ စညျးရုံးရေးမပွုလုပျနိုငျခွငျးတို့ကွောငျ့ ဒီမိုကရစေီအခှငျ့အရေးမြား ဆုံးရှုံးခဲ့ရကွောငျးလညျး ၎င်းငျးတို့ထုတျပွနျခကျြ၌ ဆကျ လကျဖျောပွထားသညျ။
ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ၏ ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာလ (၁၆)ရကျနအေ့တှငျး ထုတျပွနျခဲ့သော ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျသညျ့ နယျမွစောရငျးမြား၌ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ခငျြးပွညျနယျ၊ ရှမျးပွညျနယျ၊ ကခငျြပွညျနယျ၊ မှနျပွညျ နယျ၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးတို့ အဓိကပါဝငျပွီး လှတျလပျပွီး တရားမြှ တသော အခွအေနမေရှိသောကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျခွငျးမရှိကွောငျးဆိုထားသညျ။ ကအေဲနျယူ တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး(၂) ပဒိုစောလှထှနျးက “EAO တဈခုလုံးကို ပွောလာတဲ့ ကိစ်စအပျေါမှာတော့ သူတို့ မဟုတျ မမှနျအဲ့လိုမြိုး တဖကျသတျ စှပျစှဲထုတျပွနျတဲ့ ကိစ်စကိုတော့ ကနြျောတို့ လူထုတှေ ကွားထဲမှာ ရှငျးလငျးအသိပေးဖို့ ပွနျပွီးတော့ အသိပေးဖို့လိုတာပေါ့။ ဒါကလညျး နိုငျငံရေးအရ တိုကျခိုကျသလို လကျရှိ ငွိမျးခမျြးရေး ဖျောဆောငျမှုမှာ လူထုတှေ တဖကျသတျ အမွငျလှဲမှားအောငျ လုပျနတေဲ့ ပုံစံတှေ ဖွဈနတေယျ”ဟု ကအေိုငျစီ သို့ပွောသညျ။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%b1%e1%80%9b%e1% 80%bc%e1%80 %b8%e1%80%b1%e1%
ကခငျြပွညျနယျ ခြီဖှမွေို့နယျစဈရှောငျစခနျးမှ စဈရှောငျတခြို့သညျ နရေပျပွနျနိုငျရေးအတှကျ ပထမဆုံးအကွိမျ မိမိတို့ ကြေးရှာ ခွုံနှယျမြား သှားရောကျရှငျးလငျးခဲ့ကွသညျဟု သိရသညျ။ ခြီဖှမွေို့အနီး ကနျပိုငျယနျကြေးရှာမှ ဒသေခံစဈရှောငျ ပွညျသူ ၄၀ ခနျ့က နိုဝငျဘာလ ၂ ရကျနေ့ မိမိတို့ကြေးရှာကို သှားရောကျရှငျးလငျးခဲ့ကွသညျဟု ခြီဖှေ KBC စဈရှောငျစခနျး တာဝနျခံ ဆရာယောန ထံမှ သိရသညျ။
“သူတို့က အိမျပွနျခငျြကွပွီ သူတို့အတှကျ အိမျတှကေိုတော့ ဘယျသူတှေ ဆောကျပေးမလဲမသိဘူး။ သူတို့အနနေဲ့ သှား ရောကျရှငျးလငျးထားနှငျ့တဲ့ သဘောဖွဈတယျ။ ကနျပိုငျယနျကြေးရှာက နညျးနညျးခကျတယျ။ ဒီဘကျ ခြီဖှဘေကျကဆိုရငျ စဈတပျထိုငျပွီး ဟိုဘကျ ကနျပိုငျယနျကြေးရှာဆုံးအထကျမှာ KIA တှထေိုငျတယျ။ သူတို့က ကွားညှပျနတေဲ့ ရှာလညျးဖွဈနေ တယျ။ သူတို့လညျး အိမျပွနျခငျြပွီဘဲပွောနကွေတာ။ ခုခြိနျထိတော့ အိမျတှဘေယျအဖှဲ့အစညျး တာဝနျယူဆောကျလုပျပေး သှားမယျဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး။”ဟု ခြီဖှေ KBC စဈရှောငျစခနျးတာဝနျခံ ဆရာယောန ကပွောသညျ။ သှားရောကျခဲ့ သော ဒသေခံမြားမှာ လကျရှိ ခြီဖှေ KBC စဈရှောငျစခနျး နှငျ့ LBC စဈရှောငျစခနျးတို့တှငျ ခိုလှုံနကွေသညျဟု သိရသညျ။ ကနျပိုငျယနျကြေးရှာဒသေခံမြား နရေပျပွနျရေးအတှကျ အစိုးရက လုပျဆောငျနသေောကွောငျ့ ၎င်းငျးတို့လုပျဆောငျဆောငျ ပေးခွငျးမရှိကွောငျး ကခငျြလူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှုအဖှဲ့ KHCC က ဆိုသညျ။
“အစိုးရတှေ နဂိုထဲက သူတို့လုပျဆောငျပေးနဆေဲဖွဈတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ကတော့ မလုပျပေးတော့ဘူး။ ကြှနျတျောတို့ က ကြှနျတျောတို့သတျမှတျထားတယျ။ ဘယျနရောတှလေုပျပေးတယျဆိုတာ။သူတို့ဘကျကတော့ အစိုးရဘကျက နဂိုထဲက သူတို့တတျနိုငျသလောကျ တာဝနျယူလုပျဆောငျပေးနတေဲ့ နရောတှရှေိတယျ။”ဟု KHCC ဒု အတှငျးရေးမှူး ဆရာခါးလီ က ပွောသညျ။ ကနျပိုငျယနျကြေးရှာသညျ ခြီဖှမွေို မှ ၁ မိုငျခနျ့သာ ကှာဝေးပွီး ကခငျြပွညျနယျအတှငျး တပျမတျောနှငျ့ KIA တို့ တိုကျပှဲကွောငျ့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျလာသူမြားဖွဈသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/11/04/l2-22/
သြှမျးပွညျအရှပေို့ငျး မိုငျးဆတျမွို့နယျရှိ UWSA ထိနျးခြုပျလှုပျရှားသညျ့ နယျမွအေတှငျး ရှေးကောကျပှဲ ဖွဈနိုငျခွမေရှိနိုငျ သဖွငျ့ အခြိနျမှီ ပိတျသိမျးသငျ့ကွောငျး နိုငျငံရေး ပါတီ (၄) ပါတီ မှ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ (UEC) ထံ လကျမှတျရေးထိုး တောငျးဆိုခဲ့သညျ။ လကျရှိအခြိနျထိ “ဝ”ထိနျးခြုပျနယျမွအေတှငျးသို့ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့မရရှိကွ ကွောငျး၊ အဆိုပါနယျမွသေို့ ဝငျပွီး မဲဆှယျရနျ တောငျးဆိုစီစဉျလာခဲ့သျောလညျး အကွောငျးအမြိုးမြိုးပွကာ ဝငျရောကျခှငျ့ မပေးကွောငျးလညျး ထိုနယျမွအေတှငျး ဝငျ ရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ နိုငျငံရေးပါတီမြားက ပွောဆိုလိုကျသညျ။ လကျရှိ ပွညျ ထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကို လကျမှတျရေးထိုး စာတငျထားသညျ့ ပါတီမြားမှာ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (NLD) ၊ ရှမျးတိုငျရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (SNLD)၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ (SNDP)နှငျ့ လားဟူအမြိုး သား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ (LNDP)တို့ ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ မိုငျးဆတျမွို့နယျ “ ဝ”ထိနျးခြုပျသညျ့ နယျမွအေတှငျးရှိ ကြေးရှာအုပျစု (၄) ခု တှငျ ကြေးရှာပေါငျး (၂၁) ရှာရှိပွီး မဲဆန်ဒရှငျ စုစုပေါငျး (၂၂၇၄၃) ဦးခနျ့ နှငျ့ မဲရုံပေါငျး (၁၂) ရုံ ရှိ ကွောငျးသိရသညျ။
“ကိုဗဈ ကာလ နဲ့ ကိုဗဈငွိမျသှားပမေယျ့ ခုခြိနျထိ သူတို့ ထိနျးခြုပျနယျမွထေဲ ဝငျမယျဆိုရငျ ကျောမရှငျ လကျမှတျတှေ ပါရငျလညျး သူတို့ ဗမာစာတှေ မသိဘူးပွောတယျ။ ဂိတျပေါကျဝမှာ ၁ နာရီ ၂ နာရီလောကျ စောငျ့ရတာတှလေညျးရှိတယျ။ ဒီနေ့ ကျောမရှငျတှေ ပွောလာတာကတော့ တကယျသှားမယျဆိုရငျ အခြိနျ ၂ ရကျ (၅ -၆) ရကျနေ့ သှားမယျဆိုရငျ သူတို့ ဘကျက အပွညျ့အဝ ကူညီပေးမယျလို့ပွတေယျ။ ကနြျောတို့ အဖှဲ့တော့ မသှားတော့ဘူး”SNLD ကိုယျစားပွု မိုငျးဆတျမွို့ နယျ ပွညျနယျမဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၂) တှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ဦးအိုကျစိုငျး (ခ) စိုငျးဝဏ်ဏ က ပွောသညျ။ “နိုငျငံရေး ပါတီတှေ စညျးရုံးရေးသှားဖို့အတှကျ ဝငျခှငျ့မပွုလို့ပါ။ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျက ခှငျ့ပွုထားပမေယျ့လညျး သူတို့ဝငျဖို့ အတှကျ ခှငျ့မပွုတဲ့အတှကျပါ။ ကမြတို့သှားကတညျးက ခှငျ့ပွုစာဆိုရငျ ဗမာစာ ဆိုရငျ ခှငျ့မပွုဘူး။ သူတို့ “ဝ” အကွီးအကဲ တှဆေီက သကျဆိုငျရာက တရုတျစာရေးထားတဲ့ ခှငျ့ပွုမိနျ့ရှိမှ သှားခှငျ့ပွုမယျပေါ့။” ဟု ဒျေါအေးသီတာမွငျ့ ကပွောသညျ။
မိုငျးဆတျမွို့နယျတှငျ အစိုးရတပျမတျော၊ ဝ လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့၊ လားဟူနယျခွားစောငျ့တပျ နှငျ့ RCSS/SSA တပျဖှဲ့တို့ လှုပျရှားသညျ့ နရောဖွဈသညျ။ မိုငျးဆတျမွို့နယျအတှငျး ဝငျရောကျယှဉျပွိငျမညျ့ ပါတီမြားမှာ “ဝ” အမြိုးသားပါတီ၊ ပွညျထောငျစု ကောငျးကြိုးပါတီ၊ လားဟူအမြိုးသား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသာမြား ဒီမိုကရကျတဈပါတီနှငျ့ပွညျထောငျစု ကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီတို့ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://b urmese.shannews.org/archives/19208
ရှေးကောကျပှဲနှငျ့ပတျသကျပွီး တိုငျးရငျးသားတျောလှနျရေးအဖှဲ့မြားအပျေါ တပျမတျော၏ သဘောထားကွညောခကျြကို ပွနျလညျတုံ့ပွနျမှုမြိုး ပွုလုပျမညျမဟုတျကွောငျး ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO က ပွောသညျ။ တိုငျးရငျးသားတျောလှနျ ရေးအဖှဲ့တခြို့က အငျအားတညျဆောကျ၍ ငွိမျးခမျြးရေးကိုနှောငျ့နှေးစသေညျ့ အပွုအမူမြား လုပျဆောငျခဲ့သောကွောငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးနှောငျ့နှေးမှုအပွငျ လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျကငျြးပမညျ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျပငျ လှတျလပျစှာ ဆန်ဒ မဲ ပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးမှုမြား ဖွဈပျေါစနေိုငျကွောငျး တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံးက နိုဝငျဘာ ၂ ရကျနတှေ့ငျ ထုတျပွနျ ထားသညျ။
“သူတို့ရေးထားတဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှကွေောငျ့ လှတျလပျစှာဆန်ဒမဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးမှုမြား ဖွဈပျေါစတေယျဆိုပွီး ပွောဆိုထားတယျ။ KIO အနဖွေငျ့ သူတို့ရဲ့ရှေးကောကျပှဲကို ဝငျရောကျနောကျယှကျခွငျး မလုပျသလို ထောကျခံခွငျးမြိုး လညျး လုပျမှာမဟုတျဘူးလို့ ပွောထားပွီးဖွဈတယျ။”ဟု KIO ဗဟိုဌာနခြုပျပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ဗိုလျမှူးကွီးနျောဘူ ကပွော သညျ။ ထို့ကွောငျ့ ယခု အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျသောနရောမြားတှငျ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲကို အမွနျကငျြးပ နိုငျရနျမြှျောလငျ့ပွီး တိုငျးရငျးသားတျောလှနျရေးအဖှဲ့မြားကလညျး မိမိနှငျ့မသကျဆိုငျသောနရောတှငျ ရောကျရှိနပေါက အမွနျဆုံး ပွနျလညျဆုတျခှာရနျလိုအပျကွောငျး ထုတျပွနျခကျြက ဖျောပွထားသညျ။
“ကြှနျတျောတို့က အစိုးရနှငျ့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုမြိုး အဓိကလုပျဆောငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဓိက ငွိမျးခမျြးရေး သော့ခကျြကို ကိုငျနတောက တပျမတျောဖွဈနတေယျ။ ဆိုတော့ သူတို့ပွောနတေဲ့ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးဆိုတာက တိုငျးရငျးသားလကျနကျ ကိုငျ မြားအားလုံးကို လကျနကျဖွုတျသိမျးရေးကို ပွောနတောဖွဈတယျ။ တရားဝငျသူတို့ ဒီလိုပွောတယျ။ ကြှနျတျောတို့ KIO သာမက ကနျြတဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအားလုံး လကျနကျဖွုတျသိမျးပွီး ငွိမျးခမျြးရေးရမယျလို့ဘယျသူမှ မယုံကွညျ ဘူး၊ လကျမခံဘူး။ ဒါကွောငျ့ တျောလှနျရေးဆိုတာ ဌာနတေိုငျးရငျးသားမြားအားလုံး ရသငျ့ ရထိုကျတဲ့ အခှငျ့အရေးတှကေို ရနိုငျတဲ့ နိုငျငံရေးတှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုမြိုးဆို ပွညျတှငျးစဈကို ခြူပျငွိမျးနိုငျမှာဖွဈတယျ။”ဟု ဗိုလျမှူးကွီးနျောဘူက ပွောသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/11/04/l2-21/
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ ကှတျခိုငျနှငျ့ မူဆယျမွို့နယျအတှငျးရှိ ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့မြားသညျ မဲဆန်ဒနယျအခြို့ရှိ ဒသေခံမြား၏ လှတျလပျစှာမဲပေးခှငျ့ကို ခွိမျးခွောကျမှုမြားရှိနကွေောငျး ဒသေခံမြားက ဧရာဝတီသို့ ပွောကွသညျ။ လှတျတျောကိုယျစား လှယျလောငျးအခြို့နှငျ့ အမညျမဖျောလိုသော ဒသေခံမြား၏ အဆိုအရ တာမိုးညဲ ပွညျသူ့ စဈ၊ ပနျးဆေး၊ မနျပနျ၊ ကောငျးခါး၊ မုံးစီးနဲ့ မုံးဟှမျပွညျသူ့စဈ အဖှဲ့မြားသညျ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီကိုသာ မဲထညျ့ရနျ ဒသေခံမြားကို ဖိအား ပေးနကွေကွောငျး သိရသညျ။ ဖိအားပေးခံရသညျ့ မွို့နယျမြားမှာ မနျတပျကြေးရှာ ဒှနျပုံ၊ ဘနျခနျြ၊ မတျဝမျ၊ နောငျမို၊ တာဟဲ၊ အောကျလောကျ၊ နောငျဖွူးနှငျ့ နောငျကနျြ့ကြေးရှာမြားမှ ဒသေခံမြားဖွဈကွသညျဟု သိရသညျ။
ဒသေခံမြားက ၎င်းငျးတို့၏ အသကျ၊ လုံခွုံရေးကွောငျ့ ရှာအမညျနှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ နာမညျမြားကို ဖွဆေိုရနျ ငွငျးဆနျကွသညျ။ ဒသေခံမြားနှငျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျအခြို့၏ စှပျစှဲခကျြမြားအပျေါ မေးမွနျးရနျ ပွညျသူ့စဈ အဖှဲ့မြားသို့ ဆကျသှယျ သျောလညျး မရရှိခဲ့ပါ။ ကှတျခိုငျမွို့နယျ ပွညျနယျမဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၁) တှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသညျ့ တအာငျး (ပလောငျ) အမြိုးသား ပါတီမှ မိုငျးကွာထှနျး က “အဲဒီလို ဖိအားပေးပွောဆိုနတောကို မကွောကျဖို့၊ ကိုယျ့ဆန်ဒအတိုငျး သတ်တိရှိရှိ မဲပေးဖို့တော့ ရှာသားတှကေို ပွောထားတယျ။ ရှေးကောကျပှဲက ဒီလိုဖိအားပေးလို့ မရဘူးဆိုတာကိုလညျး ပွောပွထားတယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောပွသညျ။ မိုငျးကွာထှနျး သညျ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးခရီးစဉျ ၁ ခုတှငျ မုံးစီးပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့၏ တားမွဈ ခံခဲ့ရကွောငျး၊ ၎င်းငျး၏ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးခရီးစဉျအခြို့တှငျ USDP အောငျနိုငျရေးအလံမြားကို ကြေးရှာပွညျသူ့စဈရုံးခှဲ မြားတှငျလှငျ့ထူ ထားပွီး ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့ဝငျမြားက USDP ပါတီအတှကျ မဲဆှယျပေးနသေညျကို မွငျတှခေဲ့ကွောငျးလညျး ပွောပွသညျ။
ပွညျသူ့စဈနယျမွမြေားအတှငျး မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့ကို သကျဆိုငျရာပွညျသူ့စဈကို အကွောငျးကွားစာပေးပို့ပွီး နောကျ မဲဆှယျ စညျးရုံးခှငျ့ပွုထားသညျဟု ပွောဆိုကွသျောလညျး ဌာနတေိုငျးရငျးသားပါတီ ကိုယျစားလှယျ လောငျးမြားသာ သှားရောကျ စညျးရုံးနိုငျကွကွောငျး၊ အခြို့ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို မဲဆှယျခှငျ့မရရနျ ကနျ့သတျမှုမြား ပွုလုပျမှုရှိနကွေောငျး သိရ သညျ။ ပွညျသူ့စဈနယျမွအေတှငျးသို့ ပါတီအနနှေငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး မသှားသညျ့အတှကျ ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့ ခေါငျး ဆောငျမြားကို ပါတီစညျးရုံးရေး အကူအညီတောငျးခံခွငျး မရှိကွောငျး၊ ပွညျသူ့စဈအပွငျ အစိုးရ တပျမတျောနှငျ့ မညျသညျ့ လကျနကျကိုငျနှငျ့မြှ ပတျသကျမှုမရှိကွောငျး ၎င်းငျး က တုံ့ပွနျပွောဆိုသညျ။ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးတှငျ တပျဖှဲ့ဝငျအငျအား ထောငျဂဏနျးရှိသညျ့ ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့ပေါငျး ၃၀ ကြျောရှိပွီး အမြားစုမှာ ကှတျခိုငျမွို့နယျနှငျ့ မူဆယျမွို့နယျတှမှော အခွေ ခတြညျရှိနကွေသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/11/05/232862.html
ကရငျပွညျနယျ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျထဲရှိ အစိုးရနှငျ့ KNU-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံးတို့ နှဈဖကျအုပျခြုပျနယျမွေ မြားတှငျ ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ လာရောကျမဲထညျ့ကွမညျ့ မဲဆန်ဒရှငျ ပွညျသူမြား အထိတျတလနျ့ မဖွဈ အောငျ လူထုမမွငျနိုငျသညျ့နရောတှငျသာ လုံခွုံရေးစောငျ့ရှောကျပေးသှားမညျဟု KNUက ပွောသညျ။ ကွာအငျးဆိပျကွီး မွို့နယျတှငျ ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပခှငျ့ရသညျ့ နှဈဖကျအုပျခြုပျနယျမွနှေငျ့ KNU ထိနျးခြုပျနယျမွရှေိ ကြေးရှာမြားတှငျ မဲရုံလုံခွုံရေးအပိုငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး ကြေးရှာလုံခွုံရေး၊ မွနျမာနိုငျငံအထူးရဲ၊ ရဲတပျဖှဲ့မြား က သကျဆိုငျရာ နယျမွအေလိုကျ လုံခွုံရေးယူထားပေးသညျဟု ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။
KNU ဝငျးရေးမွို့နယျ ဥက်ကဋ်ဌ ပဒိုစောမောငျရှကေ “ဖားပွရှာဘကျမှာတော့ ကနြျောတို့ လုံခွုံရေးယူပေးမယျလို့ ပွောထား တယျ။ အောကျရှာတှဘေကျမှာ ရဲတှေ လုံခွုံရေးတှေ ရှိပွီးသားပါ။ တပျမတျောဘကျက လုံခွုံရေးယူမယျ့အပိုငျးမှာ သူတို့ ဆောငျရှကျခကျြတှကွေတော့ အကုနျနားမလညျဘူး။ သခြောတာတဈခုကတော့ အနှောငျ့အယှကျအဟနျ့အတား ဘာမှမဖွဈ ဘူး။ သှားဖို့ လာဖို့ကွတော့ သူတို့လာညှိနှိုငျးပွောပွထားတယျ။ လူထုတှထေိတျလနျ့မှုမဖွဈအောငျ ကနြျောတို့က ပုံမှနျရှိနေ တဲ့ အခွအေနေ မှာပဲရှိမှာပါ”ဟု (နိုဝငျဘာ ၅ ရကျ) ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။“ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ၊ မဲရုံဝနျထမျး၊ လုံခွုံ ရေး အထူးရဲတှလေညျး ရှိတယျဆိုတော့ တပျတှကေ လာပွီးစောငျ့ဖို့ မလိုဘူးထငျတယျ။ ရှာထိပျတှမှော စောငျ့နရေငျတောငျ လူထုတှသေတငျးကွားသှားတာနဲ့ အနညျးနဲ့အမြားတော့ ထိပျလနျ့မှုတှေ ရှိနမှောပဲ။ ဒသေခံတှကေ နဂိုကတညျးက အကွောကျတရားက ရှိကွတယျ။ မဲမသမာမှုတှေ လုံခွုံရေးအပိုငျးတှမှော သူတို့အမွငျနဲ့ရှိရငျ ရှိမှာပေါ့လေ”ဟု တောငျဒီးရှာ သား စောမွတျသူက ကအေိုငျစီ သို့ပွောသညျ။
ထိုဒသေရှိ တပျမတျောအနဖွေငျ့လညျး မဲပေးသညျ့ကာလအတှငျး မဲရုံအနီးတှငျ ရှိနမေညျမဟုတျဘဲ မဲရုံပွငျပမြားတှငျသာ လုံခွုံရေး ဆောငျရှကျပေးသှားမညျဟု တပျမတျောဘကျမှ နီးစပျသူနှငျ့ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးတာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွိုနယျ ဝငျးရျောဒသေရှိ ကြေးရှာမြားနှငျ့ နှဈဖကျရောနှောအုပျခြုပျသညျ့ကြေးရှာမြားတှငျ အောကျတိုဘာ ၂၉ ရကျနကေ့ အသကျ ၆ဝ အထကျ ဒသေခံအမြားစု ကွိုတငျမဲထညျ့ခဲ့ကွပွီး မဲထညျ့နညျး အတှအေ့ကွုံ အားနညျးသညျ့ အတှကျ ပယျမယျမြားမညျဟု နိုငျငံရေးပါတီမြားက သုံးသပျပွောမှုမြားရှိသညျ။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%8 0%86%e1%82%8f%e1%81%b5%e1%80%99%e1%80%b2%e1%80
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး နမျ့ခမျးမွို့ နောငျစနျ့ရပျနေ လူမှုညီညှတျရေး အဖှဲ့ (UP) အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ ဦးစိုငျးအောငျဝငျး နှငျ့ ၎င်းငျး၏သား တို့ သနေတျပဈခံရပွီး ယခုခြိနျအထိ တရားခံ လှတျမွောကျနဆေဲဟု စုံစမျးသိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ နိုဝငျဘာ ၄ ရကျ ည ၆နာရီ ဝနျးကငျြတှငျ အမညျမသိ လကျနကျကိုငျ တဈဦးက ဆိုငျကယျမောငျးလာပွီး ဆရာ စိုငျးအောငျဝငျး တို့၏ နအေိမျရှတှေ့ငျ တညျ့တညျ့တှငျ သနေတျပဈရာ စိုငျးအောငျးဝငျး သနေတျဒဏျရာ ၂ ခကျြ ရရှိခဲ့ပွီး ၎င်းငျး၏သားလညျး လကျမောငျးနား ကညျြဆံရှပျထိသှားကွောငျး သိရသညျ။“၂ ခကျြထိတယျ။ နောကျကြောနားနဲ့ တငျပါး ဆုံရိုးနား ထိတယျ။ တလုံးကတော့ အူမကွီးကို သှားထိတယျ။ သူသားကတော့ လကျမောငျးနား ရှပျပွီး ထိသှားတယျ။ သိပျတော့ မစိုးရိမျရဘူး။ ဘယျအဖှဲ့လာပဈတယျဆိုတာ မသိရသေးဘူး” UP အဖှဲ့အတှငျးရမှေူး လုံးစိုငျးမောကျဆိုငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ လကျရှိအခြိနျထိ မညျသညျ့လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့က လာရောကျပဈခတျသညျကို မသိရရှိ သေးကွောငျး၊ တရားခံလညျး မမိသေးကွောငျး လုံးစိုငျးမောကျဆိုငျ က ပွောသညျ။
ပဈခတျမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး လုံးစိုငျးမောကျဆိုငျ က “ကနြျောတို့ တရားစှဲထားတော့ မရှိသေးဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဖွဈဖွဈခငျြးမှာ တော့ ရဲတှကေတော့ စိုငျးအောငျဝငျးအိမျ ကို လာပွီးစဈဆေးသှားတယျ။ အခကျြအလကျတှကေို လာကောကျသှားတယျ” ဟူ လုံးစိုငျးမောကျဆိုငျ ကပွောသညျ။ လကျရှိ ဦးစိုငျးအောငျဝငျးသညျ နမျ့ခမျးဆေးရုံတှငျ ဆေးကုသခံယူနကွေောငျး သိရ သညျ။ ၂၀၁၅ ကလညျး ဦးစိုငျးအောငျဝငျး ၏နအေိမျတှငျ လကျပဈဗုံး ပဈခတျခံရဖူးပွီး ထိုစဉျတှငျ ဗုံးစ အနညျးငယျထိခိုကျ ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။“လူတှေ သှားလာလှုပျရှားနခြေိနျ၊ လူမွငျကှငျးမှာ ပဈသှားတာကိုကွညျ့ခငျြးအားဖွငျ့ နမျ့ခမျး က တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိတော့ဘူးဆိုတာပွတာပဲ။ နောကျပွီး အိမျရှေ့ တညျ့တညျ့လာပဈတဲ့ CCTV ကလညျးရှိ တယျ။ ရဲတှကေ အခုထိမဖမျးမိဘူးဆိုတော့ စဉျးစားစရာပါပဲ”ဟု နမျ့ခမျးဒသေခံ စိုငျးအိုကျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွော သညျ။
နမျ့ခမျးမွို့နယျတှငျ အစိုးရတပျမတျော၊ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျမြား၊ ပွညျသူ့စဈမြားလှုပျရှားသညျ့နရော တခုဖွဈ ပွီး၊ မကွာခဏ ပဈခတျမှုမြားရှိသညျ့နရောတခုဖွဈသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/19226
ကယားပွညျနယျ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ အိုကကြေေးရှာအုပျစုမှာ ကွိုတငျမဲပေးဖို့ ဆန်ဒမဲလကျမှတျတှေ ဖွနျ့ဝမှေု မှားယှငျးနတော ကွောငျ့ မဲဆန်ဒရှငျ အယောကျ ၆၀ ကြျော ကွိုတငျမဲလကျမှတျတှေ မှားယှငျးပွီးပေးမိခဲ့ကွပါတယျ။
ကွိုတငျမဲစတငျပေးလို့ရတဲ့ နိုဝငျဘာလ ၂ ရကျနမှေ့ာပဲ ကွိုတငျမဲထညျ့ကွတဲ့ မဲဆန်ဒရှငျ ၁၃၀ ဦးရှိတဲ့အထဲမှာမှ ၆၆ ဦးက မဲဆန်ဒလကျမှတျ မှားယှငျးပေးခဲ့မိကွတာဖွဈတယျလို့ အိုကကြေေးရှာအုပျစု ရပျကြေးကျောမရှငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးထှနျးဝငျးက ပွော ပါတယျ။“ပေးပွီးသားလူက ၁၃၀ ရှိတယျ။ အမှနျတကယျ မှနျတဲ့စာရငျးထဲဝငျသှားတာက အမြိုးသား ၆ နရောမှာက ၅၀ ပါ တယျ။ နောကျတခါဆန်ဒမပွုရသေးတဲ့ဟာက မဲလကျမှတျဖွတျပွီး ဆန်ဒမပွုရသေးတဲ့ဟာက ၁၄ ယောကျရှိတယျ။ အားလုံးခွုံ ကွညျ့လိုကျရငျ အမှားစာရငျး ၆၆ ယောကျရှိတယျ”ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ အိုကကြေေးရှာအုပျစုက အမြိုးသားလှတျတျော မဲ ဆန်ဒနယျအမှတျ(၆)ရဲ့ မဲဆန်ဒဖွဈရမညျ့အစား အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၇)ရဲ့ မဲဆန်ဒလကျမှတျ ကို ဖွနျ့ဝမှေားသှားတာဖွဈပါတယျ။
အခုလို မှားယှငျးတာတှကေ ကျောမရှငျတှေ သခြောစီစဈတာမလုပျတဲ့အတှကျကွောငျ့ဖွဈရတယျလို့ ၎င်းငျးမဲ ဆန်ဒနယျ အမြိုးသားလှတျတျောမဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၆)မှာ ဝငျပွိုငျတဲ့ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီက ဦးမောတယျခဲက ပွောပါ တယျ။“သခြောစီစဈပွီးလကျခံတာမြိုးမလုပျဘူး။ နောကျတခုက ဒီမဲရုံမှူးလကျမှတျလညျး ထပျထိုးရတာဖွဈတယျ။ ဒီနောကျ ကြောမှာ မဲရုံမှူးလကျမှတျလညျး ထပျထိုးရတဲ့အနအေထားမြိုးမှာ မဲရုံမှူးကိုယျ၌ကလညျး နောကျ ကြောမှာ လကျမှတျထိုးတဲ့ အပျေါမှာ သခြောစီစဈပွီးထိုးတာ မဟုတျဘူးလို့ သုံးသပျရတယျ။ ဘာကွောငျ့ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၆)နဲ့ အမှတျ(၇)ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ စာလုံးကွီးလှဲနသေလို နောကျတခုက မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၇)က ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျအနနေဲ့ဆို ကနြျောတို့တိုငျးရငျးသားပါတီက ဝငျပွိုငျတဲ့ပါတီက ကယနျးအမြိုးသားပါတီက ဖွဈတယျ။ ကနြျောတို့ဒီ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၆)မှာ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျတာက ကနြျောတို့ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီကဖွဈတဲ့ ကနြျော မောတယျခဲက ယှဉျပွိုငျတာဖွဈတယျ။ ပါတီလိုဂိုကလညျး မတူဘူး ဆိုတော့ အဲဒီမှာက ကှဲကှဲပွားပွားဖွဈတယျ။ အကယျ၍ မဲရုံမှူးက စီစဈပွီးလုပျရငျ မှားစရာအကွောငျးမရှိဘူး ဆိုတာ ပွောလိုတယျ။”
အခုမှားယှငျးသှားတဲ့ အမြိုးသားလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၆) နဲ့ အမှတျ (၇) က ပွညျနယျအခွစေိုကျပါတီတှေ ဖွဈကွ တဲ့ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီနဲ့ ကယနျးအမြိုးသားပါတီတို့ မဟာမိတျလုပျထားတဲ့ မဲဆန်ဒနယျတှဖွေဈပါတယျ။ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၆)မှာ မဲဆန်ဒရှငျ ကြေးရှာအုပျစု ၁၅ အုပျစုရှိပွီး ကြေးရှာပေါငျး ၈၅ ရှာရှိပါတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျအတှငျးမှာ ဝငျပွိုငျကွတဲ့ပါတီတှကေတော့ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈ ပါတီ၊ ကယနျး အမြိုးသားပါတီ၊ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ အမြိုးသားဒီမိုက ရစေီအငျအားစု၊ ပွညျထောငျစု ကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ၊ တိုငျးရငျးသားစညျးလုံးညီညှတျရေးပါတီတို့ရဲ့ ကိုယျစားလှယျ လောငျးတှကေ ဝငျပွိုငျကွတာဖွဈပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/demoso-kayah-advance-voting-mistake-11042020005724.html
မှနျပွညျနယျ၊ ပေါငျမွို့နယျ၊ အလှပျကြေးရှာမှာ ရလေုပျသား ၁၀၀၀ နီးပါးဟာ မွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ကွိုတငျ မဲကို နိုဝငျဘာ ၆ ရကျနဲ့ ၇ ရကျနမှေ့ာထညျ့ဖို့ ညှနျကွားခကျြကွောငျ့ မဲထညျ့ခှငျ့ဆုံးရှုံးရမယျ့ အခွအေနနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပါ တယျ။ မှနျပွညျနယျ ပေါငျမွို့နယျ အလှပျကြေးရှာနဲ့ ဝဲပတနျကြေးရှာတှကေ ရလေုပျသားတဈထောငျနီးပါးဟာ မွိုနယျကျော မရှငျရဲ့ ကွိုတငျမဲပေးရကျ သတျမှတျခကျြကွောငျ့ မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးရမယျ့ အခွအေနရှေိတယျလို့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ တှနေဲ့ ရလေုပျသားတှကေ ပွောပါတယျ။
ကွိုတငျမဲကို နိုဝငျဘာ ၆ ရကျနဲ့ ၇ ရကျနမှေ့သာ ပေးခှငျ့ရှိပွီး ကွားထဲမှာပေးခှငျ့မရှိဘူးလို့ ရပျကြေးကျောမရှငျက ပွောဆို တာကွောငျ့ ရလေုပျသား တဈထောငျကြျော မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးရမယျ့ အခွအေနနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတယျလို့ ပေါငျမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးထှနျးမငျးအောငျက ပွောပါတယျ။“၆ ရကျ၊ ၇ ရကျမှ ကွိုတငျမဲပေးခှငျ့ရမယျ့ဆိုရငျ ရလေုပျသား ၉၀၀ လောကျ မဲပေးခှငျ့ ဆုံးရှုံးသှားမယျ၊ တကယျလို့ ၄၊ ၅ မှာ ကွိုတငျမဲ ပေးခှငျ့ရရငျတော့ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျး လောကျ မဲပေးခှငျ့ရမယျ”ပေါငျမွို့နယျ အလှပျနဲ့ ဝဲပတနျကြေးရှာဟာ ရလေုပျငနျးကို အဓိကလုပျကိုငျကွပွီး လှအေစီးရေ ၁၈၀ ကြျောရှိပါတယျ။ မိသားစု စားဝတျနရေေး အဆငျမပွတောကွောငျ့ ယောကျကြားဖွဈသူနဲ့ သားဖွဈသူက ကွိုတငျမဲ ထညျ့ခှငျ့မရပဲ ပငျလယျထှကျပွီး အလုပျလုပျနရေတယျလို့ အလှပျကြေးရှာနေ ရလေုပျသားမိသားစုဝငျတဈဦး မမိခြိုက ပွော ပါတယျ။ မဲတပွားက အရေးကွီးနတော နိုငျငံရေးပါတီတှေ မရှငျးပွလညျး သိနပေမေယျ့ မိသားစု စားဝတျနရေေး အခကျ အခဲရှိတာကွောငျ့ အဲဒီကိစ်စကို ဦးစားပေးဖွရှေငျးနရေတယျလို့ ရေးလုပျသား မိသားစုဝငျတှကေ ပွောပွကွပါတယျ။
ရလေုပျသားတှေ မဲပေးခှငျ့ဆုံးရှုံးသှားမှာကို ရလေုပျငနျးရှငျတှကေ စိုးရိမျကွတဲ့အတှကျ နိုဝငျဘာလ ၄ ရကျနဲ့ ၅ ရကျမှာ ကွိုတငျမဲထညျ့ခှငျ့ပွုဖို့ မှနျပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ၊ ခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ၊ မွို့နယျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျနဲ့ ရပျကြေးရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျထံ နိုဝငျဘာလ ၂ ရကျနကေ့ မတ်ေတာရပျခံစာ တငျပွထားတယျလို့ ဝဲပတနျ ကြေးရှာ ရလေုပျငနျးရှငျ ဦးမိုးလှငျက ပွောပါတယျ။ ပေါငျမွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဒျေါသီရိဖွိုး ကတော့ အသကျ ၆၀ နဲ့အထကျ မဲဆန်ဒရှငျတှကေိုသာ အောကျတိုဘာ ၂၉ ရကျကနေ နိုဝငျဘာ ၅ ရကျနအေ့ထိက ကွိုတငျ မဲပေးရမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ ရလေုပျသားတှေ မတ်ေတာရပျခံစာ တငျပွထားတဲ့အပျေါမှာ UEC ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြအတိုငျးသာ ဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမယျလို့ ပွောပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/fishermen-in-mon-state-advance-voting-11042020035018.html
ဒီအကွောငျးရာကို Chinland NLD Group ဆိုတဲ့ Facebook စာမကျြနှာမှာ အောကျတိုဘာလ ၃၀ ရကျနကေ့ တငျထား တာဖွဈပါတယျ။ ပို့ဈမှာရေးထားတာက ခငျြးပွညျနယျတောငျပိုငျး မတူပီမွို့ပျေါ စံဘောငျရပျကှကျမှာ ကွိုတငျမဲလာထညျ့ ကွတဲ့ အသကျ ၆၀ နဲ့အထကျ အဘိုးအဘှားတှကေို ခငျြးအမြိူးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြူပျ (CNLD) ပါတီဝငျတှကေ ရုပျပကျြ ဆငျးပကျြ အမဲရိုးလုစားတဲ့ခှေးတှလေို အတငျးချေါသှားပွီး ဘာမှမတျောစပျပမေဲ့ အတငျးမဲသှားထညျ့ ပေးနကွေတယျ CNLD တှေ ခိုးနညျး/လိမျနညျးအကုနျတတျတယျလို့ ဖျောပွထားတာဖွဈပွီး ဒီသတငျးအမှားဟာ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာ ပျေါမှာ ပွနျ့နှံ့လာခဲ့ပါတယျ။
ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး မတူပီမွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအတှငျးရေးမှူး ဦးနိုငျးအှမျကို ထပျမံမေးမွနျးရာမှာတော့ အဲလိုမြိူး ရုပျပကျြဆငျးပကျြ အတငျးမဲထညျ့ခိုငျးတာမြိူး မရှိဘူးလို့ ပွောပါတယျ။“လူငယျတှကေလညျး သကျကွီးဘိုးဘှား တှကေို ကူညီပေးနတေော့ နညျးနညျး ရုတျရုတျသဲသဲဖွဈခငျြတဲ့သဘော ဖွဈလာတော့ ပါတီအဖှဲ့တှကေိုရော၊ ကျောမရှငျ အဖှဲ့တှကေိုရော ချေါပွီးတော့ ပွောထားတယျ။ ရုပျပကျြဆငျးပကျြအနထေားမှာတော့ မရှိပါဘူး။ မဲဆန်ဒရှငျတှကေိုလညျး ကနြျောပွောထားတာက ကိုဗဈကွောငျ့ အသကျ (၆၀) နဲ့အထကျက ကွိုတငျမဲပေးဖို့စီစဉျပမေယျ့ မဲဆန်ဒရှငျရဲ့ သဘောပါပဲ…. မဲပေးမယျ့နကေ့မြှ မဲထညျ့မယျဆိုရငျလညျး အဆငျပွပေါတယျ….လို့ပွောထားပါတယျ။ လူငယျတှကေူညီပေးတာက မသှား နိုငျတဲ့သကျကွီးတဲ့သူတှကေို တှဲကူပေးတာတှရှေိတယျ… မဲဆန်ဒရှငျကိုယျတိုငျကလညျး အဲ့နတေ့ဈရကျထညျးမှာပဲ မဲထညျ့ ရမယျလို့ထငျနကွေတယျ ကနြျောတို့က (၅) ရကျနထေိ့ မဲပေးလို့ရတယျ အေးအေးဆေးဆေး မဲပေးလို့ရတယျလို့ပွောထားပါ တယျ။ တခြိူ့လူတှကေ ကိုယျလိုရာဆှဲပွီးတငျတာဖွဈပါလိမျ့မယျ ဒါပမေယျ့ အဲ့လောကျ ရုပျပကျြဆငျးပကျြအနထေားမှာ မရှိပါဘူး ပါတီဖှဲ့အားလုံးနဲ့သှားပါတယျ။ ရှငျးပါတယျ။ အဲ့ဒါမြိုးမရှိပါဘူး….. သူအနနေဲ့ပဲ ပို့ဈတငျတာလာတော့မသိပါဘူး အဲ့လောကျကွီးဖွဈတာလညျးမရှိပါဘူး… တခွားပါတီတှကေိုလညျး မေးလို့ရပါတယျ” လို့ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
“ဘိုးဘှားတှကေို အတငျးချေါပွီးမဲထညျ့ခိုငျးတာတော့မလုပျပါဘူးခငျဗြ၊ အသကျ (၆၀) ပွညျ့ရငျ ကွိုတငျမဲထညျ့ရမယျဆို တာကိုပဲ တဈအိမျတကျဆငျး သတိပေးတာပဲရှိခဲ့ပါတယျ။ အခုရှေးကောကျပှဲကာလဆိုတော့ မတူပီမှာခငျြးပါတီက အရမျး အားကောငျးနတေော့ သတငျးမဟုတျမမှနျတှေ အမွဲဝါဒဖွနျ့တာတှရှေိတယျ။ မွပွေငျအနထေားအရ မတူပီရဲ့ CNLD အရမျး အားကောငျးတော့ သူတို့သံသယဖွဈအောငျ သတငျးယူမှားနိုငျတဲ့ ဖွဈရပျတှကေို အမွဲတမျးရေးနကွေတယျ၊ ဒါက ပုဂ်ဂိုလျရေး အရသိရရငျတော့ ဥပဒအေရ ဖွရှေငျးခငျြပါတယျ။ Facebook အကောငျ့အတုတှကေလညျး အမြားကွီးထှကျလာတယျဆို တော့ ဘာမှဖွရှေငျးလို့မရဘူးလေ” လို့ ဦးအောငျလနျြးကပွောပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲနီးလာတာနဲ့အမြှ သတငျးတုသတငျး အမှားတှမြေားလာတဲ့အတှကျအကွောငျ့ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့သတငျးဌာနက သတငျးတှကေိုသာ ဖတျရှုကွပါ။ https://ww w.bnionline.net/mm/news-76732
ဒေါကျတာ ခလနျတူးခေါငျ (နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူ)
ငွိမျးခမျြးရေးဆိုတာ အပဈအခတျရပျစဲရေးဆိုပွီး ညှနျးဆိုနတောတှရှေိတယျ။ တကယျ့တကယျငွိမျးခမျြရေးက အပဈရပျ ဆဲရေးတဈခုထဲ မဟုတျဘူး။ အပဈခတျရပျဆဲရေးက ယာယီ Ceasefire သာဖွဈတယျ။ Peace အဆငျ့ရောကျဖို့ ဆကျသှား ရမယျ၊ Peace အဆငျ့ရောကျဖို့က တကယျ့တကယျ အပွောငျးအလဲလုပျရမယျ။ နိုငျငံရေးအပွောငျအလဲ လုပျနိုငျဖို့အတှကျ ဗဟိုခြူပျကိုငျမှုစနဈတှအေားလုံး လြော့ခဖြို့ တိုငျးရငျးသားပါတီတှေ လိုအပျတယျ။ တိုငျးရငျးသားပါတီတှအေားကောငျးရငျ ဗဟိုအစိုးရကိုဝိုငျးပွီးတှနျးလို့ရတယျ။ မဟုတျရငျ ဒီမိုကရစေီတောငျမှ ကမ်ဘောဒီးယား ကပုံစံလိုမြိုး ဖွဈသှားနိုငျတယျ။ ဒီမိုကရစေီ တဈပါတီအာဏာရှငျစနဈမြိုး ပွနျဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အားလုံး ပွညျနယျအခွပွေုပါတီ တိုငျးရငျးသားပါတီအားကောငျးပွီး ညှနျ့ပေါငျးဖှဲ့ရငျ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အစိုးရမဖွဈရငျတောငျ အစိုးရဖှဲ့ခငျြတဲ့ ပွညျမပါတီတှကေ လာပွီးတော့ နိုငျငံရေးတှဆေုံ့ညှိနှိုငျးမှုတှလေုပျရတဲ့အနအေထားမြိုးကို တှနျးပို့ရမယျ။ တိုငျးရငျးသားပါတီတှေ အားလုံးပွော နတေဲ့ ဖယျဒရယျ Principal အရ တူနရေငျ လကျတှဲချေါရမှာဖွဈတယျ။ ဒီမိုကရစေီကို တကယျတနျးဖိုးထားရငျ ဒီမိုကရစေီ ကိုသဘောကတြဲ့ပါတီအားလုံးကို လကျတှဲချေါရမယျ။
သိက်ခာတျောရ ဆရာဆမျဆှနျ (KBC ဥက်ကဌ )
ဒီနေ့ NLD ကလညျးတဈဖကျမှာ ဗဟိုခြူပျကိုငျမှုစနဈကို အသုံးပွုနတေယျလို့မွငျတယျ။ တကယျတနျးဆို တိုငျးရငျးသား ပွညျနယျတှမှော တိုငျးရငျးသားတှနေဲ့လကျတှဲရမှာဖွဈတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ ဒီလိုမလုပျခဲ့ဘူး၊ ဆိုတော့ တိုငျးရငျးသားပါတီ တှေ အားလုံးက ၂၀၂၀ မှာကတြော့ ၂၀၁၅ ကို အတှအေ့ကွုံယူပွီးတော့ ကိုယျ့ပွညျနယျ ကိုယျ့ဒသေတှမှော နိုငျအောငျယှဉျပွိုငျ မယျဆိုပွီးလုပျလာကွတာတှရေ့တယျ။ တကယျတနျး NLD အနနေဲ့ တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေို လကျတှဲခဲ့ရငျ သူ့အနနေဲ့ အောငျပှဲတှအေမြားကွီးရနိုငျမယျလို့ ထငျတယျ။ ဒီလိုမလုပျနိုငျခွငျးအားဖွငျ့ ပွညျနယျတှမှော တိုငျးရငျးသားပါတီတှအေား ကောငျးနတေယျလို့ မွငျရတယျ။ USDP အနနေဲ့က သူကိုယျတိုငျ စဈတပျမှထှကျပွီး ဗိုလျခြူပျဟောငျးတှဖွေဈတဲ့အတှကျ သူကိုယျတိုငျပွငျမယျဆိုတာက မဖွဈနိုငျဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဒီပနျးတိုငျရောကျဖို့ NLD နဲ့လကျတှဲဖို့လိုတယျ။ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒပွေငျဖို့ ပနျတိုငျခငျြးတူတယျ။ ဆိုတော့ NLD က တိုငျးရငျးသားပါတီအားလုံးကို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျစညျးရုံးပွီး ဒါတှကေိုလုပျဆောငျရမှာဖွဈတယျ။ တဈဖကျမှာလညျး NLD နှငျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီအားလုံးက စဈအာဏာရှငျစနဈကို မကွိုကျကွတာတော့ ဟုတျတယျ။ ဒါကို သူတဈယောကျထဲ မလုပျနိုငျဘူးဆိုတာတှမွေ့ငျနရေတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံက ဘယျလိုပဲဆိုဆို စဈအာဏာရှငျစနဈကို ဦးစှာအရငျပွောငျးလဲရမှာဖွဈတယျ။
NLD ကိုမကွိုကျတာမဟုတျဘူး၊ ကွိုကျတယျ။ ကနြျောသာ အောကျပိုငျး ရနျကုနျတှမှော အိမျထောငျစုရှိရငျ NLD ကိုပဲ မဲ ပေး မှာဖွဈတယျ။ တိုငျးဒသေကွီးတှမှောနိုငျအောငျ လုပျဖို့ထောကျခံအားပေးရမှာဖွဈတယျ။ ဒါပမေဲ့ တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော တော့ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးအတှကျ တိုငျးရငျးသားဘကျကို ကွညျ့ရမယျ။ တိုငျးရငျးသားတှနှေငျ့ မဟာမိတျ လုပျပွီး တိုငျးရငျးသားဒသေ တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေိုနိုငျအောငျလုပျခိုငျးပွီးတော့ တိုငျးရငျးသားကိုယျစားပွုပါတီတှကေို နရောထားပေးတယျဆိုရငျ တိုငျးရငျးသားတှနေိုငျလိမျ့မယျ။ NLD က မဟာမိတျဖှဲ့ပွီဆိုရငျ ဘယျလိုမဆိုအား ကောငျးလာ မယျ။ အားကောငျးလာပွီဆိုရငျ တိုငျးရငျးသားကိုယျစားပွု ကခငျြဆိုရငျ ကခငျြတှရေဲ့ကိုယျစားပွုတဲ့သူတှေ လှတျတျောထဲ ရောကျလာရငျ ဖယျဒရယျ၊ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒပွေငျဖို့ ဖွုတျဖို့ အားလုံးပိုပွီးအားကောငျးလာမယျ။ NLD တဈပါတီထဲနိုငျပွီး စဈတပျကို ဘယျလိုမှ မနိုငျဘူး။ စဈတပျက သူ့အပျါမှာရှိနတေယျ။ တိုငျးရငျးသားတှနှေငျ့ မဟာမိတျဖှဲ့ရငျ တော့ ဒါတှကေို တှနျးလှနျနိုငျမယျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/11/05/l1-21/
ကယားပွညျနယျ အခွစေိုကျပါတီတဈခုဖွဈသော ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီ ( KySDP ) ကို ကရငျနီလူမြိုးစု တိုငျးရငျးသား လူငယျအငျအား ၁၆၀ ကြျောက လှိုငျကျောမွို့နယျ၊ လှိုငျလငျလေးမွို့တှငျ နိုငျဝငျဘာလ ၃ ရကျနကေ့ အငျအားပွ ဝနျးရံလှညျ့လညျခဲ့ကွသညျ။
ဝနျးရံလှညျ့လညျ စညျးရုံးပေးခွငျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး ကရငျနီလူမြိုးစု တိုငျးရငျးသား လူငယျအဖှဲ့ဝငျဖွဈသညျ့ ကယားလီဖု လူငယျအဖှဲ့၏ ကိုယျစားလှယျ ခူးပေါလူက “ဒီ တိုငျးရငျးသား ပါတီကို ဘာကွောငျ့ ဝနျးရံလဲဆိုတော့ ဒီတိုငျးရငျးသားပါတီက ကြှနျတျောတို့ တိုငျးရငျးသား၊ ကြှနျတျောတို့ ရပျရှာရဲ့အရေးကို ပိုသိတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့မို့လို့ ကြှနျတျောတို့ ဝနျးရံရခွငျး ဖွဈတာ ပေါ့နျော”ဟု ပွောသညျ။ ယခုကဲ့သို့ ကရငျနီလူမြိုးစု တိုငျးရငျးသား လူငယျမြားအနဖွေငျ့ ဒသေအခွစေိုကျပါတီကို ဝနျးရံ ခွငျးသညျ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ မတျလ ၁၈ ရကျတှငျ ပွုလုပျခဲ့သညျ့ လူငယျထုမြား၏ တှဆေုံ့နှီးနှော ဖလှယျပှဲမှ ထုတျပွနျလိုကျ သော သဘောထားအတိုငျး လုပျဆောငျနခွေငျး ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ဒသေအခွစေိုကျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားကို တခွား နိုငျငံရေးပါတီတခြို့က နိုငျငံရေးအရ ဝဖေနျတိုကျခိုကျမြားလညျး ကွုံနရေကွောငျး ကယနျးလူငယျတဈဦးဖွဈသူ ခှနျးမြိုးလှိုငျဝငျး က ပွောသညျ။
ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီသညျ ကယနျးအမြိုးသားပါတီနှငျ့ မဟာမိတျဖှဲ့ထားပွီး ပွညျနယျတှငျး မဲဆန်ဒနယျမွေ ၃၄ နရောရှိသညျ့အနကျ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီက နရော ၃၀ နှငျ့ ကယနျးအမြိုးသားပါတီက လေးနရော တို့ တှငျ အသီးသီး ဝငျရောကျအရှေးခံကွမညျ ဖွဈသညျ။ အဆိုပါ ဒသေအခွစေိုကျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားကို ဝနျးရံနသေညျ့ ကရငျနီလူမြိုးစု လူငယျမြားမှာ ကယား၊ ကယနျး၊ ကယော၊ ကျောယျော (မနုမနော)၊ ယငျးတလဲနှငျ့ ကရငျလူငယျမြား ပါဝငျ သညျ။ ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကယားပွညျနယျအတှငျး နိုငျငံရေးပါတီ ၁၂ ပါတီ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျနေ ပွီး ပွညျနယျရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ၏ နောကျဆုံးစာရငျးအရ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ ဦးရေ ၂၀၇၀၀၀ ကြျော ရှိသညျ။ http://www .mizzimaburmese.com/article/75205
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကွိုတငျမဲအဖွဈ အသကျ ၆၀နှငျ့အထကျ မဲဆန်ဒရှငျမြားကို စကျတငျဘာလ ၂၉ရကျ နမှေ့စ၍ တဈပတျကွာအတှငျး ကော့ကရိတျမွို့နယျတှငျ မဲရုံအခြို့ကိုသာ စောငျ့ကွညျ့နိုငျသညျ့ကွားက အားနညျး ခကျြအခြို့ရှိနေ သညျဟု အရပျဖကျအဖှဲ့မြား၏ ပွောဆိုခကျြအရ သိရသညျ။
ကော့ကရိတျမွို့ပျေါ ရပျကှကျ(၅)မဲရုံနှငျ့ ရနျကုတျကြေးရှာရှိ မဲရုံတဈရုံကို ကွိုတငျမဲပေးနမှေုကို စောငျ့ကွညျ့နသေညျ့ People’s Alliance for Credible Election(PACE) အဖှဲ့ကိုယျစားလှယျက ကြေးရှာမဲရုံတှငျ အားနညျးခကျြ မရှိသျောလညျး မွို့ပျေါရပျကှကျမဲရုံတှငျ မဲပွားအနညျးငယျ စညျးတံဆိပျမပါခွငျးနှငျ့ သကျကွီးမဲဆန်ဒရှငျအခြို့ မဲပေးမှုကို နားမလညျသညျ မြားရှိကွောငျး လလေ့ာတှရှေိ့ရသညျဟု ပွောသညျ။ PACE အဖှဲ့ကိုယျစားလှယျ ကိုစိုးသိနျးက “ကနြျောစောငျ့ကွညျ့တဲ့ ရပျကှကျမှာတော့ ရပျကြေးကျောမရှငျ ဥက်ကဌက ရုတျတရကျ လထေိထားပွီးတော့ ကွိုတငျမဲလကျမှတျမှာ စညျးတံဆိပျရိုကျ တာ သိပျအာရုံစိုကျလို့ မရတာ၊ အပငျ ပမျးခံလို့ မရတာတှေ ရှိတယျ။ တဈညလုံး မဲလကျမှတျတှေ ထိုငျလုပျတာ ၃-၄စောငျက (တံဆိပျမပါဘဲ) လှတျသှား တယျ။ နောကျနေ့ ကွိုတငျမဲ ထညျ့ခြိနျမှာ ဒါတှတှေရေ့တယျပေါ့နျော။”ဟု အောကျတိုဘာလ ၂၉ ရကျနေ့ ဖွဈစဉျကို ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ကော့ကရိတျမွို့ပျေါအနဖွေငျ့ အရပျဖကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ စောငျ့ကွညျ့ရေးမှာ မရှိသလောကျ ဖွဈနပွေီး ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား၏ ကိုယျစားလှယျနှငျ့ နိုငျငံရေးပါတီမြား၏ ကိုယျစားလှယျမြားသာ မဲရုံမြားတှငျ စောငျ့ကွညျ့နိုငျ ကွသညျဟု မဲပေးရေးစညျးရုံးလှုံ့ဆျောရေးအဖှဲ့မှ နယျခံ နျောတကောထူးက ပွောသညျ။ နျောတကောထူးက “အရပျဖကျ အဖှဲ့ စောငျ့ကွညျ့ရေးကို မပေးတဲ့အပျေါမှာ အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြ၊ စိနျချေါ ခကျြတှကေ မြားတာပေါ့နျော။ ဥပမာ အားဖွငျ့ ကွိုတငျမဲကိုပဲကွညျ့ရငျ ဝရုနျးသုနျးကား ထညျ့ကွတယျ။ ဒါတှကေ အမှနျတကယျ မဲထညျ့တဲ့ပုံစံဖွဈနပွေီလေ။ မဲပေးနပွေီလေ။ ဒါကို လမျးညှနျခကျြတှေ လကျထပျပွီးတော့ သှားထု ပေးတာတှေ တှရေ့တယျ။ ဒါတှကေ မသနျစှမျးတို့ ဘာတို့မှ အကူတောငျးရတာလေ။”ဟု ပွောဆိုသညျ။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%b1%e1% 80%80 %e1%80%ac%e1%80%b7%e1%80%80%e1%
ခငျြးပွညျနယျတောငျပိုငျး ပလကျဝမွို့နယျကုလားတနျမွဈအထကျပိုငျး မီးဇာကြေးရှာရှိ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားသညျ အစိုးရနှငျ့ အဖှဲ့အစညျးတခြိူ့ထံမှ ငှကွေေးအထောကျအပံ့မြားရရှိမှုရှိသျောလညျး ၎င်းငျးတို့ဒသေတှငျ ကုနျဈေးနှုနျးအဆမ တနျမွငျ့ တကျမှုကွောငျ့ အခကျကွုံနကွေရသညျဟု သိရသညျ။
လူမှုဝနျထမျးကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေးဝနျကွီး ဌာနနှငျ့ ကမ်ဘာ့စားနပျရိက်ခာအစီစဉျ (WFP)တို့ထံမှ ယခု ရကျပိုငျးအတှငျး ငှကွေေးအခြိူ့ထောကျပံ့မှုရရှိခဲ့ကွသျောလညျး ကုနျဈေးနှုနျးအဆမတနျမွငျ့တကျမှုကွောငျ့ အခကျကွုံ နရေ သညျဟု မီးဇာကြေးရှာရှိ စဈဘေးရှောငျပွညျသူ တဈဦးဖွဈသညျ့ ဦးထှနျးသနျးကပွောသညျ။“ဆနျတှဝေယျဖို့ကတော့ WFP က ဒီလတညျးမှာထောကျပံ့ပေးတာရှိပါတယျ ပိုကျဆံနဲ့ပေါ့နျော၊ ဆနျ ဆီ ဆား ပဲတှကေ သူတို့ထောကျပံ့လို့မရဘူး လမျးပနျး ဆကျသှယျရေးအခကျအခဲတှကွေောငျ့ ဒီပလကျဝကွားမှာ အတကျအဆငျး သိပျအဆငျမပွလေို့၊ ဒီထောကျပံ့တာက ဒီဇငျဘာလ ထိ သုံးနိုငျတဲ့အနအေထားတော့ရှိတယျ၊ ကနြျောတို့နယျမွေ အခွအေနအေရ ကုနျဈေးနှုနျးတှလေညျး အရမျး တကျနတေယျတဲ့အခါကတြော့ အဆငျမပွဘေူး၊ ကနြျောတို့ အဓိကလို အပျတာက ဆနျတှလေိုအပျတယျ ဒုတိယတော့ ပိုကျဆံလိုအပျတယျ နောကျကနျြတဲ့အပိုငျးတှကေတော့ ရုနျးကနျလို့ရတဲ့ အနထေား မြိုးမှာရှိပါတယျ အခုလတျတလော တဈလနှဈလတော့ အဆငျပွလေောကျမယျထငျတယျ ဒါပမေဲ့ ကနျြတဲ့လမှာ ပိုငျးမှာတော့ ကနြျောတို့လညျး ခနျ့မှနျးလို့မရ တော့ဘူး” ဟု ဦးထှနျးသနျးကပွောသညျ။
ပလကျဝမွို့နှငျ့ မီးဇာကြေးရှာအကွားတှငျ တပျမတျောစဈဆေးရေးဂိတျ ၃ ဂိတျခနျ့ရှိသညျ့အပွငျ AA တပျဖှဲ့မြားလညျး လှုပျရှားမှုရှိပွီးသှားလာ၍မရဖွဈကာ ပလကျဝဘကျမှ ကုနျပစ်စညျးမြားသယျယူပို့ဆောငျ၍မရသောကွောငျ့ မတူပီမွို့နယျ လိုငျလငျးပီမွို့ ဘကျမှ ကုနျပစ်စညျးသယျယူရသညျ့အတှကျ ကုနျဈေးနှုနျးအဆမတနျမွငျ့တကျခွငျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ ယခုလကျရှိ မီးဇာကြေးရှာတှငျ ဆနျတဈအိတျ ၇ သောငျးခှဲ၊ ဆားတဈပိသာ ၄၀၀၀ နှငျ့ ငါးပိတဈအိတျ ၈ သောငျးခနျ့ပေါကျ ဈေးရှိနသေညျဟုသိရသညျ။
မီးဇာကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဟှလေ့ောက “ဆနျကပွတျလတျမှုတော့မရှိဘူး ဒါပမေဲ့ ရှိတဲ့သူဆီကနေ ဝခှေဲစားသောကျ နရေတာ ဆနျအိတျကလညျး ၇ သောငျးထိတကျ အခုက ပလကျဝတောငျမှ သှားလို့မရဘူး၊ အခုတောငျယာလုပျတာက လညျး ဆနျလုံလောကျမှုတော့မရှိဘူး၊ တောငျယာမှာ နညျးနညျးပါးပါးတော့ရှိတယျ၊ ပလကျဝဘကျလညျးသှားလို့မရဘူး ကွားမှာ AA ကလညျးရှိနတေယျ တပျကလညျး ဂိတျရှိတယျ အသှားအလာလုံးဝကိုမရဘူးပေါ့ အခုက ကုနျဈေးနှုနျးတှကေ လညျး အကုနျလုံးတကျကုနျနတော အခုလောလောဆယျတော့ ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျနဲ့ ကွံပွီးမှ စားသောကျနရေတာ၊ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မရှိတဲ့လူတှကေလညျး ဟိုခြေးဒီခြေး စဈဘေးရှောငျလောကျပဲမဟုတျဘူး အခုမီးဇာဆိုရငျလညျး တဈရှာလုံးပဲ အခကျအခဲကွုံနရေတာ ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျနဲ့ကို ကြျောဖွတျသနျးပွီးမှ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျကို ဖလှယျပွီးမှစားနရေတာ” ဟု ပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76699
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ဖွဈပျေါနသေော တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျ အရအေတှကျ ၂၃၆၂၀၀ ကြျောရှိလာပွီး စားသောကျရေး အခကျအခဲမြားစှာ ရငျဆိုငျနရေကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါ စဈဘေးဒုက်ခသညျမြားသညျ စဈဘေးရှောငျ စခနျးပေါငျး ၁၆၈ ခုတှငျ နထေိုငျသူမြားအပွငျ ဆမြေိုးအသိုငျးအဝိုငျးမြားရှိရာတှငျ သှားရောကျခိုလှုံနကွေရသူလညျးမြားစှာ ရှိ သေးကွောငျး သိရသညျ။
“ကြှနျတျောတို့ စာရငျးကောကျတယျ ဆိုတာကလညျး ဒုက်ခရောကျနသေူတှေ အဆငျပွစေဖေို့အတှကျ စုဆောငျးတငျပွတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဲဒီစာရငျးကိုလညျး ကြှနျတျောတို့ ထုတျပွနျထားပွီး ဖွဈပါတယျ”ဟု REC (Rakhine Ethnics Congress) ၏အတှငျးရေးမှူး ဦးဇျောဇျောထှနျးက ပွောကွားသညျ။ REC အဖှဲ့က နိုဝငျဘာ၂ ရကျ ညနေ ၅ နာရီအထိ နောကျဆုံး ကောကျယူထားခကျြအရ သိရှိရခွငျးဖွဈပွီး ထိုသို့စာရငျး ကောကျယူရခွငျးမှာလညျး လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခ ကွားတှငျ အတိဒုက်ခ ရောကျနရေသညျ့ ပွညျသူမြား၏ အရအေတှကျနှငျ့ အခကျအခဲမြားကို သကျဆိုငျသူမြား သိရှိပွီး ပွညျသူလူထုကို မထိခိုကျစသေော နိုငျငံရေးနညျးဖွငျ့သာ ဆှေးနှေးအဖွရှောကွစလေိုခွငျး၊ ပွညျသူလူထုက တငျမွှောကျ သော အစိုးရတဈရပျ အနဖွေငျ့ ပွညျသူကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျသညျ့ ဒီမိုကရစေီ ယဉျကြေးမှုကို အာမခံစလေိုခွငျး၊ ထိခိုကျနဈနာသူမြားအတှကျ အစိုးရနှငျ့ ပွညျတှငျး/ပွညျပ အဖှဲ့အစညျးမြားက ဝိုငျးဝနျးကူညီ ထောကျပံ့ပေးနိုငျရနျအတှကျ အထောကျအပံ့ ဖွဈစရေနျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ စားသောကျရေးအပိုငျးတှငျလညျး အခကျအခဲမြား ဖွဈပျေါနပွေီး ဖွဈသလို နထေိုငျစားသောကျ ရသညျမြားလညျးရှိကွောငျး မွပေုံမွို့နယျမှ စဈဘေးရှောငျမြားက ပွောကွားသညျ။“စားသောကျရေး အဆငျမပွမှေုတှမြေား လာတယျ။ အခုဆိုရငျ ဒီလထဲ ရိက်ခာမရှိတော့၊ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့က ကူညီပေးနိုငျမယျ့ အဖှဲ့အစညျးတှကေို အကူအညီ တောငျးထားတယျ။ ဒီရကျပိုငျးမှာ မရောကျရငျ ငတျကွမှာပဲ။ နောကျပွီး စဈရှောငျစခနျးမှာ နထေိုငျဆိုပမေဲ့ ဘာမှလုပျကိုငျ စားသောကျလို့ မရတာက ခကျတယျ။ လုပျကိုငျစားသောကျ နိုငျရငျတော့ အနညျးနဲ့အမြား မိသားစု စားသောကျရေးအတှကျ ကာမိမှာ ဖွဈပါတယျ”ဟု ကမျးထောငျးကွီး စဈဘေးရှောငျစခနျးမှ ဒသေခံ ဦးကြျောဝငျးက ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/197075
ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုကို လြှော့ခရြနျ အပါအဝငျ တိုငျးရငျးသားမြားအတှကျ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစု တညျဆောကျရေးကို ရရှိ အောငျ လုပျဆောငျပေးရနျ မြှျောမှနျးထားသညျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားကို မဲဆန်ဒရှငျ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ မဲပေးရနျ တိုငျးရငျး သားပါတီ အခြို့က တိုကျတှနျး ပွောဆိုလိုကျသညျ။ ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုကို လြှော့ခနြိုငျပါက တိုငျးရငျးသားမြား လိုခငျြနသေညျ့ တနျးတူရေး၊ လှတျလပျခှငျ့၊ ကိုယျ ပိုငျပွဌာနျးခှငျ့နှငျ့ ကိုယျ့ကွမ်မာကိုယျဖနျတီးခှငျ့တှကေို ရရှိနိုငျမညျဟု တိုငျးရငျးသားပါတီ မြား က ပွောသညျ။
ကရငျအမြိုးသား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ KNDP ဥက်ကဋ်ဌ မနျးအောငျပွညျစိုးက “ကနြျောတို့ရဲ့ ဆောငျပုဒျထဲမှာ လညျး တနျးတူ ညီမြှဖှံ့ဖွိုးဖို့ KNDP ကို မဲပေးစို့ ကိုယျ့ကွမ်မာ ကိုယျဖနျဖို့ရယျ KNDP ကို မဲပေးမယျဆိုပွီးတော့ ကနြျောတို့ ကွှေးကွျောထား တယျ။ စညျးရုံးဆျောသွထားတဲ့အပိုငျးမြိုးပါ။ အထူးသဖွငျ့ကတော့ တနျးတူညီမြှ ဖွဈဖို့အတှကျ ကနြျောတို့ကို မဲပေးသငျ့တယျ ကနြျောတို့ ဒါကို အကောငျအထညျဖျောဖို့ ကွိုးစားမယျ လှတျတျောထဲမှာ တတျနိုငျသလောကျပေါ့လေ။ ကနြျောတို့ ပွညျနယျမှာ ဆိုလို့ရှိရငျလညျး အဲဒီအတိုငျးပဲပေါ့။ အဲ့လိုဖွဈဖို့အတှကျ ကနြျောတို့ ဆောငျရှကျဖို့လိုတဲ့အတှကျ မဲဆန်ဒရှငျတှေ က ကနြျောတို့ကို မဲပေးဖို့လိုအပျတယျ”ဟု ပွောသညျ။ ကယားပွညျနယျ ဒီမိုကရကျတဈပါတီ KySDP ပါတီကလညျး ရှေး ကောကျပှဲတှငျ အနိုငျရရှိပါက ဗဟိုခြုပျကိုငျမှုကိုလြှော့ခရြနျနှငျ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုကို ဖျောဆောငျရနျ ဦးတညျခကျြထား သော ပါတီဖွဈသညျ့ အတှကျ မဲဆန်ဒရှငျမြားအနဖွေငျ့ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြား၏ အကြိုးကို သယျပိုးမညျ့ ၎င်းငျးတို့၏ ပါတီကို မဲပေးကွ ရနျလိုသညျ ဟု KySDP အတှငျးရေးမှူး ခူးသဲရယျ က ပွောသညျ။
ထို့အတူ ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ KSPP ဒု-ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကှမျဂေါငျအောငျခမျးကလညျး မဲဆန်ဒရှငျပွညျသူ မြားအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ပါတီကို မဲပေးသငျ့သညျ့ အကွောငျးအရငျး နှငျ့ ပတျသကျ၍ ယခုကဲ့သို့ ပွောသညျ။“KSPP ဟာ ကခငျြပွညျနယျကို ဦးဆောငျတဲ့ ပါတီဖွဈတယျ။ နောကျအနာဂတျမှာ ၂၀၂၁ နောကျပိုငျးမှာ ညှနျပေါငျးအစိုးရဖှဲ့တဲ့ အခြိနျမှာလညျး KSPP ဟာ အရေးကွီးတဲ့ အခနျးကဏ်ဍမှာ ပါမယျ။ ဖကျဒရယျ နိုငျငံ တညျဆောကျတဲ့ နရောမှာလညျး KSPP ဟာ ပါဝငျလာရမယျ။ ဒါပွီးမှ အခွခေံ ဥပဒပွေငျဆငျတဲ့ဟာမှာ လညျး KSPP ဟာ ပါဝငျရမယျ။ ဒါကွောငျ့ KSPP ဟာ ကခငျြပွညျနယျနဲ့ ခှဲခွားလို့ မရတဲ့ ပါတီ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လဲ ဒီဟာက ကခငျြပွညျနယျအတှငျးမှာ မှီတငျးနထေိုငျကွတဲ့ တိုငျးရငျးသားတှေ အားလုံး အတှကျ ဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့လဲ KSPP ကိုမဲပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။”ခငျြးပါတီ ၃ ပါတီ ပေါငျးစညျးထားသညျ့ ခငျြးအမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ CNLD ပါတီကလညျး ကိုယျပိုငျ ပွဌာနျးခှငျ့၊ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစု တညျဆောကျရေးနှငျ့ ခငျြးအမြိုး သားရေး လက်ခဏာမြားကို ဦးစားပေး လုပျဆောငျမညျ့ ခငျြးပါတီကို မဲပေးကွရနျ CNLD ဥက်ကဋ်ဌ ဦးငိုငျဆာ့ချ က ပွောသညျ။
ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ SNLD ပါတီအနဖွေငျ့လညျး ၁၉၄၇ ပငျလုံ ကတိကဝတျကို အခွခေံသညျ့ ပါတီ ဖွဈသညျ့အပွငျ ရှမျးလူမြိုး တဈမြိုးတညျး၏ အရေးအတှကျ လုပျဆောငျမညျ့ ပါတီ မဟုတျပဲ ပွညျထောငျစုထဲတှငျ မှီတငျးနေ ထိုငျသညျ့ တိုငျးရငျးသား အားလုံး၏ အရေးကို လုပျဆောငျမညျ့ ပါတီဖွဈသညျ့အတှကျ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့ပါတီကို မဲပေးသငျ့သညျဟု SNLD ပါတီ မှ ဝိုငျး မျောမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး စိုငျးဆှနျလြို့ က ပွောသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲကွီးတှငျ တိုငျး ရငျးသားမြားက ၎င်းငျးတို့၏ အမြိုးသားအလိုကျ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားကို ပွနျလညျဝနျးရံခဲ့ကွသညျကို တှရေ့သညျ။ https://www.bnionli ne.net/mm/news-76723
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့နယျအတှငျး အစိုးရ တပျမတျော၏ စဈကား အစီးရေ ၂၀ ကြျော စဈအငျအားနှငျ့ ရိက်ခာ အပွညျ့တငျဆောငျကာ ဖွတျသနျးသှားကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။ နိုဝငျဘာ ၃ ရကျ နလေ့ညျပိုငျးက စဈအငျအားမြား နှငျ့ ရိက်ခာမြား တငျဆောငျသညျ့ စဈကားမြားသညျ မူဆယျမွို့ကိုဖွတျကာ စယျလနျ့ကြေးရှာဘကျသို့ သှားခထြားခဲ့ကွောငျး မူဆယျမကျြမွငျဒသေခံမြားက ပွောသညျ။
“ မူဆယျမွို့လယျကို ၁၀ စီးဖွတျတယျ။ မူဆယျမွို့ပတျလမျးဘကျကနေ ၁၀ စီးဖွတျတယျ။ အဲ့ကနေ ပွီးတော့ စယျလနျ့ ဘကျကို သှားတယျ။ စဈသားတှေ ရိက်ခာတှခေပြွီး ပွနျသှားတယျ” ဟု မကျြမွငျဒသေခံ အသကျ ၄၀ ဝနျးကငျြ အမြိုးသားက ပွောသညျ။ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ကငျြးပရနျ ၄ ရကျသာ ကနျြရှိသညျ့အခြိနျတှငျ စဈသားမြား သယျဆောငျ လာသညျ့ ကားမြားသညျ မူဆယျမွို့နယျအတှငျးသို့ ဖွတျသနျးလာသညျမှာ စဉျးစားစရာဖွဈကွောငျး လညျး ၎င်းငျး က ပွောသညျ။“ စဈကား အစီးရေ ၂၀ စီးမှာ စဈအငျအား ဘယျလောကျပါလာလဲတော့မသိဘူး။ ရှေးကောကျပှဲလညျး နီးပွီဆို တော့ စိုးရိမျစရာတော့ ဖွဈတာပေါ့” ဟု မူဆယျဒသေခံ တဦးက ပွောသညျ။
မူဆယျခရိုငျ တာမိုးညဲမွို့နယျ အတှငျးတှငျလညျး အသကျ (၆၀) အထကျ သကျကွီးရှယျအိုမြား ကွိုတငျမဲပေးရာတှငျ ဖိအားပေးပွီး မိမိဆန်ဒမဲမပေးခဲ့ရကွောငျး လညျး ရှိသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/19203
ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရတောရှညျမွို့နယျ မဲစာရငျးရောကျရှိသှားသညျ့ ကရငျ ပွညျနယျ၊ သံတောငျကွီးမွို့နယျ၊ သာမိုတောငျ ကြေးရှာအုပျစု၊ ကပျပယျရှာ မဲစာရငျးကို ကရငျပွညျနယျ၊ သံတောငျကွီး မွို့နယျမဲစာရငျးထဲ ပွနျလညျ ထညျ့ပွီးဖွဈကွောငျး ရတောရှညျမွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ ခှဲဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိနျထှနျးက ပွောသညျ။ ကပျပယျရှာသညျ ယခငျကတညျးက ကရငျပွညျနယျ၊ သံတောငျ ကွီးမွို့နယျ အုပျခြုပျမှုဧရိယာအတှငျး တညျရှိသျောလညျး ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာန၏ ၂၀၁၈၊ ဩဂုတျ ၃ ရကျနရေ့ကျစှဲပါ အမိနျ့ကွျောငွာစာအမှတျ (၁၀၁၅/၂၀၁၈) အရ နယျမွထေိစပျနသေညျ့ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရတော ရှညျမွို့နယျ၊ ကြှဲရိုငျးပငျကြေးရှာအုပျစုအတှငျးသို့ ထညျ့သှငျးဖှဲ့ စညျးလိုကျ ခွငျးဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ရတောရှညျမွို့နယျ မဲစာရငျးထဲတှငျပါဝငျခဲ့ပွီး ဒသေခံမြားက သံတောငျကွီးမွို့နယျမဲစာရငျးထဲ ပွနျလညျထညျ့ သှငျးပေးရနျ လြှောကျထား မှုကွောငျ့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ လုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့အညီ ရတောရှညျမဲစာရငျးထဲမှ ပယျဖကျြပေးလိုကျကွောငျး ရတောရှညျမွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိနျထှနျးက ပွောသညျ။“ပုံစံ ၆၆ က သာမိုတောငျ အုပျစု၊ သံတောငျမွို့နယျထဲက ထုတျပေးထားတဲ့ ဟာတှဆေိုတော့ သူတို့က ၄ (က) နဲ့ လြှောကျလို့ရ တယျ။ သူတို့က လြှောကျလာကွတော့ ကဲအဲ့ဒါဆိုရငျတော့ ၄ (ခ) နဲ့ဖကျြပေးလိုကျဆိုတော့ ဖကျြပေးလိုကျတာပါ။ နယျမွေ ကတော့ ဘာမှ မပွောလိုဘူး။ အုပျခြုပျရေး ပိုငျးဆိုငျရာပွဿနာ။ ကနြျောတို့ကျောမရှငျ ကတော့ ကျောမရှငျဥပဒအေရပဲ လုပျပေးလိုကျတာပါ”ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။ ယခုလို ပဲခူးတိုငျး၊ ရတောရှညျမွို့နယျထဲ ရောကျရှိသှားသညျ့ ကပျပယျရှာနှငျ့ ခပေါငျးပငျရှာမြားသညျ သံတောငျကွီးမွို့နယျ မဲစာရငျးသို့ပွနျလညျရောကျရှိပွီးဖွဈကာပူးပေါငျးကူညီလုပျဆောငျပေးခဲ့သညျ့ ကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲတာဝနျရှိသူမြားကို ကြေးဇူးတငျကွောငျး NLD မှ သံတောငျကွီးမွို့နယျ၊ အမြိုးသားလှတျတျော ကိုယျစား လှယျလောငျး နျောခရစ်စထှနျးက ပွောသညျ။
ကရငျပွညျနယျထဲ ပွနျရောကျလာသညျ့ ကပျပယျရှာမဲစာရငျးတှငျ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ ၁၄၀ ဦးရှိပွီး သံတောငျကွီးမွို့နယျတှငျ ရှေးကောကျပှဲ ဝငျပွိုငျမညျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို မဲပေးရ မညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါရှာနှဈရှာ ကို သံတောငျကွီးမွို့နယျအတှငျးမှ ရတော ရှညျမွို့နယျ အတှငျး ထညျ့သှငျးဖှဲ့စညျးလိုကျမှုအပျေါ၂၀၂၀ ပွညျနှဈ မတျ ၆ ရကျနေ့ တှငျ ကငျြးပသညျ့ အမြိုးသားလှတျတျောအစညျးအဝေးတှငျ ကရငျပွညျနယျထဲ ပွနျထညျ့သှငျးရနျ မေးခှနျးမေးမွနျး ခဲ့ဖူးပွီး ထိုစဉျက ဖှဲ့စညျးပုံ အတိုငျး လုပျဆောငျသှားမညျဟု ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ရုံးဝနျကွီးဌာန ဒု-ဝနျကွီး ဦးတငျမွငျ့က ဖွကွေားထားသညျ။ http://kicnews.org/2020/11/%e1%80%95%e1%80%b2%e1%80%81%e1% 80%b0%e1 %80%b8%e1%8
ရခိုငျပွညျနယျ၊ စဈတှမွေို့နယျ၊ ပလ်လငျပွငျကြေးရှာသား ၄ ဦးကို ယမနျနေ့ ညနေ ၅ နာရီအခြိနျခနျ့က ရခေမျြးပွငျ ရဲစခနျးမှ တဈဆငျ့ ပွနျလှတျပေးလိုကျကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
၎င်းငျးတို့ ၄ ဦးမှာ ဦးသာထှနျးလှ (၆၈)နှဈ၊ ဦးထှနျးကြျောလှိုငျ (၄၈)နှဈ၊ ဦးမောငျသိနျးခြေ (ခ) ဦးဆိတျတောငျး (၄၀)နှငျ့ ဦးကြျောဝငျးခြေ (၃၈)နှဈ အရှယျတို့ဖွဈကွောငျး ဦးသာထှနျးလှ၏သမီး ဒျေါမသနျးလှိုငျက ပွောသညျ။ “ မနကေ့ ၅ နာရီ လောကျမှာ ရခေမျြးပွငျရဲစခနျးကနပွေီးတော့ လှတျလာပါတယျ။ စဈသားတှကေတော့ မနကေ့ ညနေ ၄ နာရီလောကျမှာ ရခေမျြးပွငျရဲစခနျးကို လှဲပွောငျးပေးလိုကျတယျလို့ပွောပါတယျ။ ကမြအဖေ ပွောတာကတော့ ရှာကထှကျတဲ့ အခြိနျကနေ မကျြနှာကို အဝတျစနဲ့ ခြုပျယူသှားလို့ပွောတယျ။ ပွီးတော့ ၃၅၄ တပျမှာ ထားပွီးတော့ စဈဆေးတယျလို့ပွောတယျ။ စဈဆေး တာတှကေတော့ AA နဲ့ ဆကျစပျမှု ရှိတယျ။ AA ကို ထောကျပံ့ကွေးတှပေေးတယျဆိုပွီးတော့ စှပျစှဲတယျလို့ပွော တယျ။ ကမြအဖတေို့က AA နဲ့ ဆကျစပျမှုမရှိသလို ထောကျပံ့ကွေးပေးတာတှလေညျး မရှိဘူးဆိုပွီးတော့ ငွငျးဆိုတဲ့အတှကျ ပွနျလှတျပေးလိုကျတယျလို့ ပွောတယျ” ဟုပွောသညျ။
ဖခငျဖွဈသူအပါအဝငျ ဖမျးဆီးခံရသော ကြေးရှာသားမြားအားကို ပွနျလညျလှတျပေးလိုကျသဖွငျ့ အလှနျဝမျးသာမိကွောငျး ဒျေါမသနျးလှိုငျကဆကျပွောသညျ။ ၎င်းငျးတို့ ၄ ဦးအား ပလ်လငျပွငျကြေးရှာသို့ ရောကျရှိလာသော မွနျမာ့တပျမတျောစဈကွောငျး စုပေါငျးတပျဖှဲ့က နိုဝငျဘာလ ၃ ရကျနေ့ ညနေ ၅ နာရီကြျော အခြိနျခနျ့က ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခွငျးဖွဈသညျ။ အဆိုပါ ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပလ်လငျပွငျကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးမောငျမွစိနျ ကလညျး ၎င်းငျးတို့ ၄ ဦး လှတျမွောကျလာခွငျးမှာ ဟုတျမှနျကွောငျး နိရဉ်စရာသတငျးဌာနသို့ အတညျပွုပွောကွားသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76750
ကယားပွညျနယျ COVID-19 ကာကှယျ၊ ထိနျးခြုပျ၊ ကုသရေး ကျောမတီ၏ ညှနျကွားခကျြကို လိုကျနာရနျ ပကျြကှကျသဖွငျ့ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ပွငျဦးလှငျမွို့တှငျ နထေိုငျသူတဈဦးကို သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒေ ပုဒျမ ၃၀ (က)၊ (ပ) ၃၀၆/၂၀၂၀ ဖွငျ့ လှိုငျကျောမွို့မ ရဲစခနျး၌ အမှုဖှငျ့ တိုငျကွားထားကွောငျး သိရသညျ။ စကျတငျဘာလ ၁၅ ရကျနကေ့ မန်တလေးမှတဈဆငျ့ ရှမျးပွညျနယျ၊ ဖယျခုံမွို့နယျ လမျးအတိုငျး ဆိုငျကယျဖွငျ့လာခဲ့သော စိုငျးဝဏ်ဏ ဆိုသူသညျ ပီကငျးကောခူ ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေးဂိတျတှငျ စဈဆေးမှု မခံဘဲ ဒီမော့ဆိုမွို့နယျ လေးမိုငျစံပွရှာသို့ ရောကျရှိခဲ့ကွောငျး စိစဈတှရှေိ့ရသဖွငျ့ လှိုငျကျောမွို့မ ရဲစခနျးတှငျ အမှုဖှငျ့ အရေးယူထားကွောငျး ကယားပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး Facebook လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
ကနျြးမာရေး စဈဆေးမှုမခံခဲ့သူ စိုငျးဝဏ်ဏကို စိစဈတှရှေိ့ရပွီးနောကျ ကှာရနျတငျး စငျတာ ဝငျခိုငျးခဲ့ပွီး ဆကျလကျ၍ နအေိမျတှငျ သီးခွားနထေိုငျခဲ့ရသောကွောငျ့ ယခုမှ အမှုဖှငျ့ အရေးယူရခွငျးဖွဈကွောငျး လှိုငျကျောမွို့နယျ အထှထှေေ အုပျခြုပျရေး ဦးစီဌာန၊ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးလညျးဖွဈ COVID-19 ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေး ကျောမတီဥက်ကဋ်ဌလညျး ဖွဈသူ ဦးရနျနိုငျဝငျးက ဆိုသညျ။ လှိုငျကျောမွို့မ ရဲစခနျးမှ စခနျးမှူး ကြျောလငျးထှနျးက စိုငျးဝဏ်ဏကို နိုဝငျဘာလ ၄ ရကျ ညတှငျ တရားလိုပွုလုပျ၍ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး မဇ်ဈိမကို အတညျပွုသညျ။ “မွို့နယျ သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျ စီမံခနျ့ခှဲမှု အဖှဲ့ကနပွေီးတော့ ကြှနျတော့ကို တရားလို ပွုလုပျတိုငျတနျးဖို့ ဆိုပွီး သူတို့က အကွောငျးကွားတာကိုး။ အကွောငျးကွားတော့ ကြှနျတျောက တရားလိုလုပျပွီး အမှုဖှငျ့ပေးထားတယျ” ဟု စခနျးမှူး ကြျောလငျးထှနျးက ပွောသညျ။
တာဝနျပေးအပျခွငျး ခံရသညျ့ ဌာန၊ အဖှဲ့အစညျး သို့မဟုတျ ပုဂ်ဂိုလျ၏ ညှနျကွားခကျြ တဈရပျရပျကို လိုကျနာရနျ တမငျ ပကျြကှကျခွငျးတို့ကွောငျ့ ပွဈမှုထငျရှားပါက တဈနှဈထကျ မပိုသော ထောငျဒဏျဖွဈစေ၊ ငှဒေဏျဖွဈစေ၊ ဒဏျ နှဈရပျလုံးဖွဈစေ ခမြှတျရမညျဟု သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒေ ပုဒျမ ၃၀ (က) တှငျ ဖျောပွထားသညျ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/75244
သြှမျးပွညျ အရှပေို့ငျး မိုငျးဆတျမွို့နယျ “ဝ” တပျဖှဲ့လှုပျရှားနယျမွေ နထေိုငျသူမြားအားလုံး ကွံ့ခိုငျရေးပါတီ ကို မဲထညျ့ပေး ရနျ “ဝ”တပျဖှဲ့ ကညှနျကွားထားကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။ မိုငျးဆတျမွို့နယျအတှငျးရှိ “ဝ” တပျဖှဲ့ လှုပျရှားသညျ့ နယျမွေ အတှငျး နိုငျငံရေးပါတီမြားအား ကိုဗဈ ၁၉ ရောဂါကာကှယျရေးအတှကျ ဟုအကွောငျးပွကာ ဝငျထှကျသှားလာခှငျ့မပေး သဖွငျ့ နိုငျငံရေးပါတီမြား ထိုနရောသို မဲဆှယျခှငျ့မရရှိခဲ့ကွကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ ထိုနရောတှငျ လှတျလပျပွီး တရားမြှတမှု မရှိနိုငျဟုဆိုကာ ရှေးကောကျပှဲ ပယျဖကျြပေးရနျ နိုငျငံရေးပါတီ (၄)ခု က ယမနျနေ့ (နိုဝငျဘာ ၄)ရကျက တောငျးဆိုခဲ့သညျ။
သို့သျော “ ဝ”တပျဖှဲ့ ထိနျးခြုပျနရောဖွဈသညျ့ ဝမျဟုံ၊ ဆီဘုတျ၊ မိုငျးယှနျး၊ တာကူးတှငျနထေိုငျသညျ့ ပွညျသူမြားကို သကျဆိုငျရာ အာဏာပိုငျးမြားက အစိုးရတပျမတျောနှငျ့ ဆကျနှယျသညျ့ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ(USDP) ပါတီကို မဲထညျ့ရနျ ပွောဆိုခဲ့ပွီး၊ မဲထညျ့ပုံ၊ထညျ့နညျးမြား ကို ချေါယူသငျကွားပေးနကွေောငျးလညျး အမညျ မဖျောလိုသညျ့ “ဝ”တပျဖှဲ့ဝငျ တဦးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။“ ကနြျောတို့ကို ချေါပွီးတော့အစိုးရတပျ ပါတီကိုပဲ မဲပေးဖို့ ပွော ပါတယျ။ ကနျြပါတီတှမေပေးဖို့ နောကျပွီး တံဆိပျတုံးထုတာတှေ သငျပေးပါတယျ” ဟု ၎င်းငျး အမညျမဖျောလိုသညျ့ “ ဝ”တပျသား က ဆိုသညျ။ ယခငျ ထိုဒသေတှငျနထေိုငျသညျ့ ပွညျသူမြားသညျ ဒီမိုကရစေီပွုပွငျပွောငျးလဲရနျ အတှကျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ(NLD)ကိုသာမဲပေးရနျ “ ဝ”တပျဖှဲ့က ပွောဆိုခဲ့ပွီး၊ ၅နှဈသာကာလအတှငျး အပွောငျး အလဲမရှိလာသညျ့အတှကျ ယခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲမှာ အစိုးရတပျ ပါတီဖွဈသညျ့ USDPကို မဲပေးရနျ ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
“ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတပျသားတှေ က မဲပေးခှငျ့မရှိပမေယျ့ “ဝ”ထိနျးခြုပျနယျမွကေ ဝ တပျသားတှကေတော့ မဲ ပေးလို့ရတယျ။ “ဝ”နယျမွကေ လူကွီးပျေါမူတညျတယျ။ ဘယျသူ့ကိုမဲထညျ့ဖို့ ဆိုတာက ဒါကတော့ တရားမြှတမှု မရှိဘူး” ဟု မိုငျးဆတျမွို့နေ အသကျ ၄၀ ကြျော စိုငျးတဈ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ကို ပွောသညျ။ မိုငျးဆတျမွို့နယျ နိုငျငံရေးပါတီမြား ဝငျခှငျ့မရသညျ့ ဒသေမြားတှငျ မဲဆန်ဒရှငျမြားကို တိုငျးရငျးသားပါတီမြားအား မဲပေးရနျ ဟနျ့တားခွငျး၊ ခွိမျးခွောကျခွငျးတို့ ပွုလုပျကွောငျးလညျး မိုငျးဆတျဒသေခံမြားပွောပွခကျြအရ သိရသညျ။ မိုငျးဆတျမွို့နယျ အတှငျး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ပါတီမြားမှာ “ဝ”အမြိုးသားပါတီ၊ ပွညျထောငျစု ကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ၊ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ လားဟူအမြိုးသား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးပါတီ၊ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ ရှမျးတိုငျရငျးသားမြား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ နှငျ့ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေး ပါတီတို့ ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/19229
ရခိုငျပွညျနယျ၊ တောငျကုတျမွို့နယျ၊ အမြိုးသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ ခြုပျ (NLD) ပါတီမှ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ ဦးကို ရက်ခိုငျ့စဈတပျ(AA)က ဖမျဆီးခဲ့ရာ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပရနျ ၃ ရကျသာ လိုတော့သညျ့ အခြိနျထိ ပွနျလညျလှတျ မွောကျလာခွငျး မရှိသေးကွောငျး သိရသညျ။ ယနအေ့ခြိနျအထိ ပွနျလညျ လှတျမွောကျမလာသညျ့အတှကျ မိသားစုနှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ လုပျဖျောကိုငျဖကျ NLD ပါတီဝငျမြား က စိုးရိမျလကျြရှိသညျ။ NLD ပါတီ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ ဦး ဖွဈသညျ့ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးမငျးအောငျ၊ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဒျေါနီနီမမွေငျ့၊ အမြိုးသား လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး ဒျေါခဈြခဈြခြော တို့ ဖွဈပွီး အောကျတိုဘာလ ၁၄ ရကျနကေ့ တောငျကုတျမွို့နယျ ဖောငျးခါးကြေးရှာတှငျ မဲဆှယျ စညျးရုံးနစေဉျ အဖမျးခံခဲ့ ရခွငျး ဖွဈသညျ။
တောငျကုတျမွို့နယျ NLD ပါတီဝငျ ဦးသကျထှနျး (ခ) ကိုဖိုးထောငျက“ဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ ယောကျ သတငျးကတော့ နောကျဆကျတှဲ ဘာမှ မကွားရသေးဘူး။ သူတို့ရဲ့ ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေးတှကေိုတော့ မွို့နယျအောငျနိုငျရေး ကျောမတီနဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ ယောကျရဲ့ ကိုယျစားလှယျတှကေ ပူးပေါငျးပွီး မဲဆှယျ စညျးရုံး ရေးလုပျငနျးတှကေို ဆကျလကျ လုပျဆောငျနတော ရှိပါတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ ဦးသကျထှနျး(ခ) ကိုဖိုးထောငျ သညျ အဖမျးခံထားရသညျ့ NLD ကိုယျစားလှယျ ဦးမငျးအောငျ၏ ရှေးကောကျပှဲ ကိုယျစားလှယျတဦးလညျး ဖွဈပွီး ဖမျးဆီးခံ ရသညျ့ ဖွဈစဉျကိုလညျး ကိုယျတိုငျ ကွုံတှခေဲ့ရသူ တဦး ဖွဈသညျ။ သံတှဲခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ ဥက်ကဌ ဦးတငျသိနျး ကလညျး အဖမျးခံထားရသညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ ဦးမှာ အသကျရှငျလကျြ ရှိသဖွငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးအနဖွေငျ့ ဆကျလကျ ရှေးကောကျခံပိုငျခှငျ့ ရှိနသေေးကွောငျး ပွော သညျ။
ယခု အဖမျးခံထားရသညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၃ ဦးတှငျ ဦးမငျးအောငျမှာ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ မှ စညျပငျဝနျကွီး ဟောငျးတဦးဖွဈသလို လကျရှိပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ တဦးလညျး ဖွဈသညျ။ ဒျေါနီနီမမွေငျ့မှာလညျး လကျရှိ တှငျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျတဦးကာ NLD ပါတီ ဗဟိုလူငယျ အဖှဲ့ဝငျတဦး လညျး ဖွဈသညျ။ ဒျေါခဈြခဈြခြော မှာ ပွညျနယျအဆငျ့ ပါတီ လူငယျ ခေါငျးဆောငျတဦးလညျး ဖွဈသညျ။ ရက်ခိုငျ့စဈတပျ (AA) အနဖွေငျ့ အဆိုပါ ကိုယျစား လှယျလောငျး ၃ ဦးကို စဈဆေးမေးမွနျးချေါခဲ့ပွီး လိုအပျခကျြအရ ကာလအတိုငျးအတာတခုအထိ ထိနျးသိမျး စဈဆေးမညျ ဖွဈကာ အစိုးရက ဖမျးဆီးထားသော ရခိုငျနိုငျငံရေးသမားမြား၊ ပွညျသူ မြားနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ တောငျးဆိုနသေော ကြောငျးသားမြားအား ပွနျလညျလှတျပေးမညျ ဆိုပါက ကိုယျစားလှယျ လောငျး ၃ ဦးအားလညျး ပွနျလညျလှတျပေးမညျ ဖွဈကွောငျး အောကျတိုဘာ ၁၉ ရကျနေ့ AA ဘကျက ကွညောခကျြ တစောငျ ထုတျပွနျထားသညျ။ https://burma.irr awaddy.com/news/2020/11/05/232851.html
မှနျပွညျနယျတှငျ ရောကျရှိနသေညျ့ ရှပွေ့ောငျးနထေိုငျသူ ၈၃၀၀ ကြျော မဲပေးရနျ လြောကျထားခဲ့သညျဟု ပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ ခှဲ တာဝနျရှိသူ က ပွောသညျ။ အနညျးဆုံး ရကျပေါငျး ၉၀ ထကျမနညျး မဲဆန်ဒနယျပွငျပ ရောကျနသေူမြားသညျ မိမိတို့၏ အမွဲတမျးနရေပျသို့ သှားရောကျပွီး မဲပေးလိုခွငျးမရှိပါက မိမိတို့ရောကျရှိနသေညျ့ မဲဆန်ဒနယျက ရှေးကောကျခံ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားကို မဲပေးရနျ လြှောကျထားနိုငျသညျ။
“သထုံခရိုငျ ၄ မွို့နယျပေါ့၊ ဒီ သထုံ ကြိုကျထို ဘီးလငျး ပေါငျ ၄ မွို့နယျမှာ အနညျးဆုံး ရကျပေါငျး ၉၀ ထကျမနညျး မဲ ဆန်ဒ နယျပွငျပရောကျနသေူတှေ ပုံစံ (၃-က) နဲ့ လြှောကျထားတာ ၄ မွို့နယျပေါငျးခြုပျက ၁၅၀၀ ကြျောရှိတယျ”ဟု သထုံခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဦးသကျနိုငျဦးက ပွောသညျ။ ထို့အပွငျ မျောလမွိုငျခရိုငျအတှငျးရှိ မျောလမွိုငျ၊ ခြောငျးဆုံ၊ ကြိုကျမရော၊ မုဒုံ၊ သံဖွူဇရပျ၊ ရေး ၆ မွို့နယျတို့တှငျ လြှောကျထားသူ စုစုပေါငျး ၆၈၀၀ ကြျောရှိ သညျဟု မျောလမွိုငျခရိုငျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ ခှဲ အတှငျးရေး မှူး ဦးထငျကြျော က ပွောသညျ။ ရှပွေ့ောငျးရောကျရှိ နသေူမြား မဲပေးနိုငျရနျ စကျတငျဘာ ၁၇ ရကျနမှေ့ အောကျတိုဘာ ၁၀ ရကျနေ့ နောကျဆုံးထားပွီး သကျဆိုငျရာ ရပျကြေး ကျောမရှငျအဖှဲ့ ခှဲရုံးမြား တှငျ လြှောကျထားနိုငျသညျ။
ရပျကြေး ကျောမရှငျအဖှဲ့ ဝငျ တဈဦးဖွဈသညျ့ ဦးမွငျ့ဆှေ က “တခွားဒသေ အစုံကနပွေီးတော့မှ ဒီမှာအလုပျလာလုပျကွတဲ့ ရှပွေ့ောငျးလုပျသားတှပေေါ့။ COVID ကွောငျ့ သူတို့နရေပျပွီးတော့ မဲပေးဖို့ မဖွဈနိုငျကွလို့ ဒီမှာပဲ မဲပေးဖို့လြှောကျကွတယျ”ဟု ပွောသညျ။ ပုံစံ (၃-က) ဖွငျ့ လြှောကျထားသူတို့၏ မဲစာရငျးကို ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပမှီ တဈပတျအလိုတှငျ သကျ ဆိုငျရာ ရပျ/ကြေးကျောမရှငျရုံး တို့တှငျ ကပျထားကွညောပေးထားမညျဖွဈပွီး မဲဆန်ဒရှငျသကျသခေံ လကျမှတျမြားထုတျပေး သှားမညျဖွဈသညျဟု တာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။ ပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ ခှဲ၏နောကျဆုံးပွုစု ထားသညျ့ စာရငျးမြားအရ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပမညျ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ မှနျပွညျနယျတဈပွညျနယျလုံးတှငျ မဲ ပေးပိုငျခှငျ့ ရှိသညျ့ မဲဆန်ဒရှငျ ပွညျသူ ၁၈ သိနျး ၄ သောငျး ကြျော ရှိသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76740
ကရငျပွညျနယျ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျတှငျ အသကျ ၆ဝ အထကျရှိသူမြား အောကျတိုဘာ ၂၉ ရကျမှ နိုဝငျဘာ ၃ ရကျ နအေ့ထိ ၎င်းငျးတို့သကျဆိုငျရာ မဲဆန်ဒနယျအလိုကျ ကွိုတငျဆန်ဒမဲပေးခဲ့ပွီး အမြားစုမှာ မဲထညျ့ဖူးခွငျး အတှအေ့ကွုံ မရှိခဲ့ သညျ့အတှကျ ပယျမဲမြားနိုငျမညျဟု နိုငျငံရေးပါတီမြားက ပွောသညျ။ ပထမဦးဆုံအကွိမျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပခှငျ့ရထား သညျ့ ကြေးရှာမြားတှငျ ကွိုတငျဆန်ဒမဲလာထညျ့ကွသော အသကျ ၆ဝ ကြျောအရှယျ ဒသေခံအမြားစုမှာ ပယျမဲ၊ ခိုငျလုံမဲမြား နှငျ့ မဲထညျ့ပုံထညျ့နညျးမြား သိရှိထားမှု အားနညျးခဲ့သညျ့အပွငျ ကျောမရှငျအနဖွေငျ့လညျး မသိနားမလညျသညျ့ အပိုငျးမြား တှငျ ရှငျးပွပေးမှု အားနညျးသညျဟု နိုငျငံရေးပါတီမြားက ကအေိုငျစီသို့ ပွောဆိုသညျ။
“ သကျကွီးရှယျအိုတှကေ မဲထညျ့နညျးတှေ သိပျနားမလညျထားကွဘူး။ တဈခြို့ဆို ဘာတံဆိပျမှ တုံးမထုပဲ ဆန်ဒမဲစာရှကျ ကို ပုံးထဲဒီအတိုငျးပဲ ထညျ့သှားတယျကွားရတယျ။ မဲရုံကျောမရှငျတှဘေကျမှာ မသိနားမလညျဘဲ မဲလာထညျ့သူတှကေို မဲ ဆှယျတာတော့ မဟုတျ ဘူးပေါ့နျော။ မသိတာတှေ ရှငျးပွမှုအပိုငျး အားနညျးတယျ။ ၅ ပုံ ၂ ပုံလောကျက ပယျမဲဖွဈလိမျ့မယျ” ဟု ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ NLD ပါတီ သတငျးနှငျ့ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ကိုထိနျလငျးက ပွောသညျ။“အသကျ ၆ဝ ကြျော ဆိုတော့က မဲမထညျ့တတျကွဘူးလေ။ မဲစာရငျးက တဈခြို့နရောဆို အိမျမှာပဲကပျထားတယျ။ မကပျထားတာလညျးရှိတယျ။ တဈခြို့ကပျထားတယျ။ စိတျဝငျစားမှုမရှိလို့ သှားမကွညျ့ကွဘူး။ ကျောမရှငျနဲ့ ကြေးရှာလူကွီးတှလေညျး ရှာသားတှကေို မပွောထားနိုငျကွဘူး။ မဲအမှတျစဉျတှေ မသိထားကွဘူး။ ကွိုတငျမဲမှာ ပယျမယျမြား နိုငျတယျလို့ ကွားရတယျဟု ကရငျ အမြိုးသား ဒီမိုက ရကျတဈပါတီ -KNDP ပါတီမှ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး စကြျောစှာက ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
ပုံစံဖွညျ့စှကျ နောကျဆုံးလြှောကျထားသူမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး နောကျတိုးဆန်ဒမဲထညျ့ခှငျ့ရသူ အမညျစာရငျး၊ မဲဆန်ဒရှငျ အမညျစာရငျးမြားအား လုံးကိုပါ နိုဝငျဘာ ၇ ရကျနတှေ့ငျ သကျဆိုငျရာ ရပျကြေးကျောမရှငျရုံးမြားတှငျ ကပျထားပေးမညျ ဖွဈ ပွီး ကွိုတငျမဲလာရောကျထညျ့မှု ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး အခကျအခဲမရှိဟု ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကွညျလှငျက (နိုဝငျဘာ ၄ ရကျ) တှငျ ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျတှငျ ဆန်ဒမဲထညျ့ခှငျ့ ရသူ ၁၅ဝ, ဝဝဝ (တဈသိနျးငါးသောငျး)ကြျောရှိပွီး နိုငျငံရေးပါတီ ၅ ပါတီမှ ကိုယျစားလှယျလောငျးအသီးသီး ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျကွသညျ။ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျမှ ပွညျနယျလှတျတျောမဲဆန်ဒနယျ ၂ နရော၊ အမြိုးသားလှတျတျော မဲ ဆန်ဒနယျ ၂ နရောနှငျ့ ပွညျသူ့လှတျတျောမဲဆန်ဒနယျအပါ စုစုပေါငျး မဲဆန်ဒနယျ ၅ နရော ခှငျ့ပွုထားသညျ။ http://kicnews .org/2020/11/%e1%81%be%e1%80%80%e1%80%ac%e1%80%a1% e1%80%84% e1%80